အပျိုကြီးရဲ့အာသာဖြေ – Grab Love Story
ဒီအကြောင်း ကိုပြောရမည်ဆိုရင် “တော်ဝင်ပန်း” အမျိုးသမီး ဘော်ဒါဆောင်က စရမည်မှာသေချာ၏။ တော်ဝင် ပန်း ဆိုသည်မှာ ရန်ကုန်မြို့ ဆင်ခြေဖုံး ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက် တခု၏အစွန်မှာ ရှိသည်။ တဖက်ရပ် ကွက် ကတော့ သာမန်လူတန်းစား အများစုနေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ တော်ဝင်ပန်း တည်ရှိရာက လည်း ဟို အရင်ကဆိုရင် သာမန်ရပ်ကွက်တခုသာဖြစ်သည်။ နောက်မှ လူလူသူသူ လူချမ်းသာ ရပ်ကွက်ဆန် ဆန် ဖြစ် လာ သည့် နေရာတခုဖြစ်သည်။ တော်ဝင်ပန်းကို နာမည်နှင့် လိုက်သည်ဟု အရပ်ထဲမှာရော ဒီအနီးနား တဝိုက်မှာပါ သိကြသည်။ ပြောစမှတ် ဖြစ် လောက်အောင်လည်း အဆောင်သူတွေက လှတပတ လေးတွေများသည်။ တော်ဝင်ပန်းမှ မိန်းကလေး တွေ အ ကြောင်းပြောပါက အဆောင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဒေါ်နုနုရှိန် ဆိုသည့် မိန်းမချောကြီး ၏ အကြောင်းက စပြောမှ ဖြစ်ပါ မည်။ အကယ်၍အဆောင်သူ မိန်းကလေး တယောက်ကို သွားပြီး တော်ဝင်ပန်း က မိန်းကလေး တွေ လှသည့် အကြောင်းသင်က ပြောမည်ဆိုရင် အပြောခံရသူ မိန်းကလေးက “ဆရာမ ကမှ ပိုလှတာပါ” ဟုပြော မှာ မလွဲ အ သေ အချာဖြစ်သည်။ အဆောင်သူတွေ ဘယ်လောက်ချောချော ဒေါ်နုနုရှိန် ကို မမှီတာ မြင်ဖူးသူတိုင်း လက် ခံ ကြ ရသည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။ အသက် လေးဆယ်ကို လပိုင်းလောက်ကျော်နေသည့် ဒေါ်နုနုရှိန် ကို ဘယ်သူကမဆို သုံးဆယ် သီသီ စွန်းစ လောက် ဟုသာ ထင်ပေမည်။ နာမည်နှင့် လိုက်အောင် အရွယ်တင်နု ပျိုသည်။ လှပသော မျက်နှာ နှင့် ဖြူစင် ဝင်း မွတ်သည့် အသားအရည် ရှိသည်သာမက ထွားသောရင်၊ ကျင်သောခါး၊ ကား သောတင် စသည့်မက်လောက် စ ရာ ကိုယ်ပိုင် ဥစ္စာတွေ ရှိသည့် ဒေါ်နုနုရှိန်သည် အခုချိန်ထိ အပျိုကြီး တယောက်ဖြစ်နေခြင်း က ထူးခြားအံ့ သြ ဖွယ်ရာ ကောင်းလွန်းလှသည်။
တချို့ ကတော့ ချောလွန်းလို့ အပျိုကြီး ဖြစ်တာဟု ဆိုကြ၏။ အဆောင်သူတွေက ဆရာမ ဟုခေါ်ကြသည့် ဒေါ်နုနုရှိန်သည် အရင်တုန်းကတော့ တကယ့်ဆရာမ တယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါ၏။ နယ်က တက္ကသိုလ်တခုတွင် လက်ထောက်ကထိကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် မိခင်ကြီး ၏ ကျန်း မာ ရေးအခြေအနေ ကြောင့် အလုပ်က နွုတ်ထွက်ခဲ့ရသည်။ အလုပ်ထွက်ကာ ပြန်လာပြီးနောက် အမေဖြစ်သူကို လ ပိုင်း လောက်သာ ပြုစုခွင့်ရခဲ့သည်။ မိခင်ကြီး ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက် တယောက်ထဲ အထီးကျန် ဖြစ်ခဲ့ရ သည့် ဖခင်ကြီး ကိုပြုစုရင်း အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့ရသည့် အတွက် အိမ်ထောင်ရေးကို ပြန်လှည့် မကြည့်နိုင်တာလည်း ဖြစ် ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သားအဖ နှစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့သော်လည်း ဒေါ်နုနုရှိန် တို့တွင် စည်းစိမ်ဥစ္စာက ပြည့်စုံပြီးသား ဖြစ်သည်။ ဒေါ် နုနု ရှိန် တက္ကသိုလ် ဆရာမ လုပ်ခဲ့တာကလည်း ဂုဏ်အတွက် နှင့်ဝါသနာကြောင့်သာဖြစ်သည်။ အလုပ်မရှိဘဲ ဒီအတိုင်း မနေချင်သည့် ဒေါ်နုနုရှိန် က မိခင်ကွယ်လွန်ပြီး တနှစ်လောက်အကြာတွင် ဘော်ဒါဆောင်ဖွင့်ဖြစ်သည်။ ဆရာမ ဘဝတုန်းကလည်း အဆောင်နည်းပြ၊ အဆောင်မွုး တာဝန်တွေယူခဲ့ ရသူဖြစ်လို့ အိုးမကွာအိမ်မကွာ စီး ပွားရေးဖြစ်သည့် ဒီလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန်၏ ဖခင်ကလည်းအားပေးသည်။ အကယ် ၍ သူသာ မျက်နှာလွဲခဲ့ပါလျှင် သမီးတယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့မှာစိုးသည်။ ဘော်ဒါ ဆောင်ဆိုတော့ စည်စည်ကားကား သိုက်သိုက် ဝန်းဝန်း နှင့် ဒေါ်နုနု ရှိန်အတွက် လုံခြုံမည်ဟု ယူဆသည်။ ဒါကြောင့်လား မသိပါ လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ် ခန့် က အဖိုးကြီး အိပ်နေရင်းနှင့် ပင်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ဇနီးသည် နောက်သို့လိုက်ပါသွားသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန်၏ အဆောင်က အခန်းတွေ ကျယ်ဝန်းသန့်ပြန့်၏။ ခြံဝန်းကလည်း ကျယ်သည်။ ရေနှင့် မီးကို အငြို အ ငြင် မရှိရသည်။ထို့ ကြောင့်ဈေးအနည်းငယ် များသော်လည်း လူကြိုက်များသည်။ အမြဲလို အခန်းတွေပြည့် နေ လေ့ ရှိ၏။ အဆောင်သူလက်ခံရာ မှာလည်း ဒေါ်နုနုရှိန်က သေသေချာချာ စစ်ဆေးပြီးမှ လက်ခံသည်။
မိဘမျိုး ရိုး နှင့် လက်ရှိ တက်နေသည့် ကျောင်း သို့ မဟုတ် လက်ရှိလုပ်နေသည့် အလုပ်အကိုင် အနေအထားကိုပါ လေ့လာ ပြီးမှ လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ် ဆရာမပီပီ ပညာအရည်အချင်းမြင့် သူကို ပိုဦးစားပေးလက်ခံသည်။ ထို့ အပြင် ရုပ်ရည်ကိုလည်း ကြည့်သည်ဟု တချို့ကပြောကြ၏။ ရုပ်ရည်နှင့် ပတ်သက်လို့ကတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် တရား ဝင် မကြေငြာပါ။ ပညာရည် နှင့် အလုပ်အကိုင်ကို အလေးထားကြောင်းကိုတော့ ပြောလေ့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် တိုက်ဆိုင်လှစွာပင် ဒေါ်နုနုရှိန် ထံမှ မိန်းကလေးတွေက ခပ်ချောချောလေးတွေ များနေသည်။ အဆောင်သူတွေ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်မစားချင်ပါကလည်း စီစဉ်ပေးသည်။ ဒီလိုလုပ်ပေး နိုင်အောင်လည်း ဒေါ် နုနုရှိန်ထံတွင် ဝန်ထမ်းအင်အား ကောင်းသည်။ မိဘတွေ ရှိစဉ်က ထဲက အတူနေခဲ့သူ ဒေါ်အေးစိန် ဦးစီးသည့် အိမ်ဖေါ် လေးယောက်ရှိသည်။ ကိုယ်တိုင် အဝတ်မလျှော်ချင်သူတွေ အတွက်ဒေါ်အေးစိန် ထံတွင်ကျသင့်ငွေ ကို ပေးပြီး အပ်လိုက်ရုံပင်။ ထမင်းလခ ပေးထားသူ ဖြစ်ပါကလည်း ကျောင်းမသွားမှီ ရုံးမသွားမှီ ထမင်းချိုင့် က အ သင့် ဖြစ်ပြီးလေပြီ။ ညနေဆို ခြောက်နာရီ ဒေါင်ဆိုတာနှင့် ဝင်းတံခါးပိတ်လိုက်သည်။ ပိတ်ပြီးတာ နှင့် ဒေါ်နုနု ရှိန် ဖခင်ကြီး၏ လက်ရင်းတပည့်ကျော် ကုလားအဖိုးကြီး နာရရား က ဝင်းဝတွင် ၀ါးရင်းတုတ်ကြီး နှင့် နေရာယူလိုက် သည်။ သူက တညလုံး မအိပ်၊ ဂိတ်ဝ က သူ့ အတွက်တဲလေးထဲမှာ ထိုင်လိုက်၊ လက်နှိပ်ဓါတ်မီး တလက်ဖြင့် ခြံထဲမှာ ပတ်လိုက်လုပ်နေ၏။ မနက် ခြောက်နာရီ တံခါးပြန်ဖွင့် ပေးပြီးမှ မီးဖိုချောင်တွင် မနက်စာ သွားစားပြီး တဖက်ရပ်ကွက်တွင် ရှိသည့် သူ၏ အိမ်သို့ ပြန်အိပ်၏။ ညနေ ခြောက်နာရီ ကျော်လျှင် မည်သူမှ အပြင်မထွက်ရပါ။ ဒါက အဆောင်သူတွေ အတွက်စည်းကမ်းဖြစ်ပြီး ဒေါ်နုနုရှိန် နှင့် အလုပ်သမား တချို့ကတော့ အကြောင်းကိစ္စရှိရင် ထွက်နိုင်ပါသည်။ များသော အားဖြင့်တော့ ခြေခင်း လက်ခင်းသာသည့် ညနေပိုင်းတွေ ဆိုရင် ဒေါ်နုနုရှိန် လမ်းလျှောက်ထွက်တတ်သည်။ တခါတလေ ဒေါ် အေးစိန်ပါပြီး တခါ တလေတော့ သူမ တယောက်ထဲပင်။ အပြင်မထွက်ရသော်လည်း အဆောင်သူတွေ အ ဆောင် ထဲမှာ တော့လွတ်လပ်စွာနေနိုင်ပါသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ကိုယ်တိုင်က ကျောင်းဆရာမ ဘဝတွင် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ပညာသင်သွားဖူးသည်ဖြစ်ရာ သိပ်ပြီးရှေးရိုး မဆန်သည့် အမြင်ရှိသူလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိန်းကလေး တွေကို အုပ်ထိန်းသည့် နေရာတွင် ခေတ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ချိန်ညှိပြီး လုပ်တတ်သူ အဖြစ် အဆောင်သူလေးတွေ ကလည်းသဘောကျ သည်။
ဒေါ်နုနုရှိန် ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မွုက လည်း ငယ်ရွယ်သူတွေ နှင့် မခြားခေတ်မှီသည်။ သို့သော်လည်း ပြောစရာ ရှိရင် ဆိုဆုံးမစရာ ရှိရင်တော့ နွုတ်လေးသူမဟုတ်ပါ။ ယနေ့ခေတ် မိန်းကလေးတွေလို စကပ်အတို၊ ဘောင်းဘီ အကြပ်တွေ မဝတ်သော်လည်း ဒေါ်နုနုရှိန် က စကပ် အရှည် နှင့် ဂါဝန်လောက်တော့ ဝတ်ပါသည်။ ရည်းစားသနာ ကိစ္စ ကိုလည်း အဆောင်မှာ လာတွေ့ စကားပြော ရုံ လောက်ကိုတော့ မသိသလိုသာနေ၏။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ မပြောချင်ရင်လည်း ခြံထဲမှာ ပန်းခြံလိုလုပ်ထားသလို အရိပ် ကောင်း သစ် ပင်ကြီးတွေ အောက်မှာ ခုံတန်းတွေထားပေး၏။ အေးအေးဆေးဆေး ပြောနိုင်သည်။ ဆွေမျိုးသား ချင်း သို့ မဟုတ်လူကြီးသူမ တယောက်ယောက်၏ ထောက်ခံမွုမရှိဘဲ အပြင်ကို ညအိပ်ထွက်ခွင့်မပေးပါ။ နည်း နည်း ဟော့ရမ်းသည့် မိန်းကလေး နှစ်ဦး သုံးဦးလောက်ကို ဒေါ်နုနုရှိန်က မိဘ ခေါ်ပြီးပြန်အပ်ဖူးသည်။ ထိုသို့ ဝန်ဆောင်မွု ကောင်းခြင်း၊ စည်းကမ်း ကောင်းခြင်းတို့ ကြောင့် မိန်းကလေးတွေ၏ မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေ က လည်း သဘောကျသည်။ တချို့ ပြည့်စုံသူတွေ ဆိုလျှင် ရန်ကုန် မှာ ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်း၊ ဖြစ်ဖြစ် အိမ်ဖြစ်ဖြစ် ဝယ် ပြီး ထားနိုင်သော် လည်း ဒေါ်နုနုရှိန် ထံမှာ သမီးကို တမင်လာထားတာမျိုးတောင်ရှိသည်။ ငွေကြေးချမ်းသာ သည့် မိန်းကလေး တွေ ရှိသလို၊ ရာထူးကြီးကြီး တွေ၏ ရင်သွေးတချို့ လည်းဒေါ်နုနုရှိန်ဆီ မှာရှိသည်။ တော် ရုံ သင့်ရုံ အဆင့်အတန်းမှ လာသူတော်တော်ရှား၏။ ထို့ကြောင့် နဂိုထဲက အမြတ်အစွန်း ကို အဓိက ထားသူမဟုတ်သည့် ဒေါ်နုနုရှိန်က ရေဖိုး၊မီးဖိုး နှင့် ဝန်ထမ်းစား ရိတ် ကျေလျှင်တော်ပြီ ဟုသဘောထားကာ အဆင်ပြေအောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ စီမံပေးထား၏။ မီးတွေ ပျက်တတ် သည့် နွေရာသီ ဆိုရင် တောင် စာကြည့်ချိန်အတွက် မီးစက်မောင်းပေးသည်။ အခုဆိုရင် အင်တာနက်လိုင်း တောင် ယူဖို့ ဒေါ်နုနု ရှိန်စဉ်းစားနေသည်။ ဒီမှာ နေသူတွေ အားလုံးကလည်း တတ်နိုင်သူတွေ ဖြစ်ရာ အင်တာ နက်ရသည် နှင့် သူတို့လည်း ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာတွေ ဝယ်ကြမည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဤမျှလောက်ဆိုလျှင် ဒေါ်နုနုရှိန် နှင့် တော်ဝင်ပန်း အဆောင်အကြောင်းနှင့် အဆောင်သူတို့ အခြေအနေ ကို အ ကျဉ်းမျှ ငုံမိပြီထင်ပါသည်။ ထပ်ပြောရန် ရှိသည်ကား ဒေါ်နုနုရှိန်သည် သူမ၏ အဆောင်၏ အဆင့်အတန်း မြင့် ခြင်းနှင့် အတူ အဆောင်သူတို့၏ အခြေမြင့်ခြင်း အပေါ်လည်း အလွန်ဂုဏ်ယူတတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သူမ ကိုယ်သူ မလည်း ခေတ်နှင့်တသားထဲရှိသူဟု ယူဆထားခဲ့သည့် ဒေါ်နုနုရှိန် တယောက် မျက်လုံးပြူးစရာ အကြောင်းအရာ တွေ တခုမက ကြုံရသည့် နေ့ကိုတော့ မပျက်မကွက် ဖေါ်ပြရန်လိုပေမည်။ တခုသော ညနေခင်းတွင် ဒေါ်နုနုရှိန် ခြံဝန်း အတွင်းလမ်းလျှောက်နေပါသည်။ တနေကုန် အလုပ်ကိစ္စ ကျောင်း ကိစ္စ နှင့် အပြင်ကိုရောက်နေကြသည့် အဆောင်သူ တွေလည်း တဖွဲဖွဲ နှင့် ပြန်လာနေကြပြီ ဖြစ်သည်။ သွားရင်း လာရင်း နှင့် ခြံဝန်း အတွင်းတွင် ဖေါက်ထားသည့် လမ်းကလေးနဘေး ပုဏ္ဏားရိပ် ပင်တန်း၏ အခြေ တွင် အာလူး ကြော်လား၊ ငါးမုန့်ကြော်လား မသိသည့် အိတ်ခွံ တခုကိုတွေ့၍ ပန်းခြံအလုပ်သမား ကိုလှရွေတို့ လင်မယားသိမ်း ဖို့ ကျန်ခဲ့တာ ဖြစ်မည်ဟု တွေးကာ ကိုယ်တိုင်သွားကောက်လိုက်သည်။ ပုဏ္ဏားရိပ်ပင်တန်း၏ ရှေ့လမ်းဘေးတွင် တရုပ်စကားပင် တပင်ရှိပြီး အပင်ခြေတွင် ခုံတန်းလျားလေး တခု ရိုတ် ပေး ထားသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ရောက်သွားချိန်တွင်ခုံတန်းလျား၌ သက်မာဆိုသည့် မိန်းကလေးထိုင်နေသည်။ အ သားညို သယောင်ရှိသော်လည်း ငါးရံ့ကိုယ်လုံးလေး နှင့် ချစ်စဖွယ်ရုပ်ရည်ရှိသော သက်မာ၏ ဖခင်သည် ပြည် နယ်တခုတွင် ကြီးကြီးမာစတာ တယောက်ဖြစ်သည်။ အမ်ပီဖိုး ကလေးကို နားကြပ်တပ်ကာသီချင်းနား ထောင် ရင်း ငြိမ့်နေသည့် သက်မာက သူမ၏ နောက် ဖက်တွင် ဒေါ်နုနုရှိန် ရောက်နေ သည်ကို လုံးဝ မသိပါ။ ပုဏ္ဏားရိပ် ပင်တန်း အပြင် တရုပ်စကားပင်ကပါကြားမှာ ခြားနေသည်။ သက်မာကို တချက်ကြည့်လိုက်ပြီး အိတ်ခွံလေးကို ကုန်းအကောက်တွင် မြက်ခင်းစပ်၌ ပေါက်နေသည့် စွယ်တော် ပင်ပေါက်လေး တပင်ကို ဒေါ်နုနုရှိန် မြင်လိုက်ရ၏။ ခြံထဲမှာ စွယ်တော်ပင် မရှိပါ။ ဘယ်က ဘယ်လိုရောက်လာ မှန်း မသိသည့် အပင်လေး ကို ရှင်သန်အောင် စိုက်ချင်စိတ်ပေါက်သွားသည်။ တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်၏ ဝတ္တု တွေ နှစ်ချိုက်ခဲ့ သူပီပီ စွယ်တော်ပင် ကို ဒေါ်နုနု ရှိန် သဘောကျသည်။ဒီနေရာ မှာတော့မဖြစ် နေရာရွေ့ရမည်။ ပလပ် စတစ် အိတ်ခွံကလည်း အဆင်သင့်ရှိနေရာ အပင်ကလေး ကို မြေကြီး နှင့် ရောကာတူးယူပြီး ထည့် လိုက်လို့ရ သည်။ ရေစက်နားမှာ ဂေါ်ပြားငယ်လေး တခုသွားယူလာပြီး တူးနေတာကိုတောင် သက်မာမသိပါ။ မြေ ကလည်း ပျော့လို့ တူးလို့ လွယ်ပါသည်။ အမြစ်ပါအောင် ၀ိုက်ကာတူးပြီး ပလပ်စတစ်အိတ်ထိပ်ဝကို ဖွင့်ကာထည့် နေစဉ် သက်မာ၏ နွုတ်ဆက်သံကို ကြားလိုက်ရသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ကို တော့မဟုတ်ပါ။
အပြင်က ပြန်လာသည့် သူမ၏ ဘေးခန်းက ပပ ကို နွုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။ အသားဖြူဖြူ၊ လုံးကြီးပေါက်လှ နှင့်ရုပ်ရည်လည်းချောသည့် ပပက သက်မာနှင့် အခန်းချင်းကပ်လျှက် ဖြစ်သလို ကျောင်းမှာလည်း တတန်းထဲတက်နေသည့် ဂုဏ်ထူးတန်းကျောင်းသူတွေ ဖြစ်သည်။ နားမှာနားကြပ် တပ်ပြီး စကားပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်ရာသက်မာ အသံက တော်တော်ကျယ်၏။ “ကောင်မ၊ ကုံးကွ လာပါလား၊ နင့်ကို မျိုးကို ဘယ်လောက်တောင် ဆော်လွတ်လိုက်လဲ” နောက်မှာ ရှိသည့် ဒေါ်နုနု ရှိန်ကို နှစ်ယောက်လုံး မမြင်ကြပါ။ ပပ ခုံတန်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်သံကြားရသည်။ “သက်မာရယ် နင့်အသံကြီးက ကျယ်လိုက်တာ၊ နားကြပ်ချွတ်ပြီး ပြောစမ်းပါ” “အေးပါ၊ အေးပါ ချွတ်လိုက်ပါပြီ၊ နင့်ကြည့်ရတာ ခြေထောက်တောင် မနည်းသယ်နေရတယ်၊ ဘယ်နှစ်ခါတောင် လုပ်လိုက်လို့တုန်း” “မှတ်တောင် မမမှတ်မိပါဘူး သူငယ်ချင်းရာ” ပပ၏ အသံက နွမ်းဖျော့ နေသည်။ “မျက်လုံးတွေလဲ စင်းလို့ အခုထိ ဖီးတက်နေတုန်းလား၊ ဘယ်မှာတုန်း၊ ခါတိုင်းလို မျိုးကို သူငယ်ချင်းအခန်း ပဲ လား” “မဟုတ်ဘူး၊ ဒီနေ့ သူတို့ဖဲဝိုင်းရှိလို့တဲ့၊ မရမ်းကုန်း ဖက်က Inn တခုကိုသွားတာ” “ဘယ်လိုလဲ၊ အေးအေးဆေးဆေး ရှိရဲ့လား” “ရှိပါတယ်၊ လူလဲရှင်းတယ်၊ နာမည်တော့ ငါလဲ မဖတ်မိဘူး” ချစ်သူနှင့် ဆိတ်ကွယ်ရာတခုသို့ သွားသည့် အကြောင်းကို ထမင်းစားရေသောက်ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ပြောနေသည့် သူ ငယ်မ နှစ်ယောက်၏ စကားကို နားထောင်ရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် လက်တွေတုန်လာသည်။ ထိုင်ရာကနေ ထရပ်လိုက် ရင် မြင်သွားကြမှာစိုးပြီး မလွုပ်မယှက် ဆက်၍ထိုင်နေရသည်။ နဖူးမှာ ချွေးတွေစို့လာတာကို တောင် သုတ်မပစ် နိုင်ရှာပါ။ “ဘယ်သူမြှောက်ပေး လိုက်တယ်မသိပါဘူး သက်မာရယ်၊ အားဆေး အကောင်းစားတဲ့၊ အဲဒါသောက်ပြီးတော့ ငါ့ ကို ဒုက္ခ ပေးတော့တာပဲ၊ တခါပြီး ဖို့ တနာရီလောက်ကြာတယ်၊ လူလဲသေချင်စော်နံလာတာပဲ၊ အခုထိနာနေတုန်း ပဲ၊ ဗိုက်တောင်အောင့်တယ်” “မှတ်ပြီလား၊ ရဲမင်းစိုးကို မဖြတ်ပါနဲ့ လို့ငါတားရဲ့သားနဲ့ နင်နားမှ မထောင်တာ၊ မျိုးကို ရုပ်ကိုက ထန်တဲ့ ရုပ်” “ဆေးသောက်လိုက်လို့ပါဟယ်၊ အရင်ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး၊ နောက်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ ဆောရီးပဲ ပြောခဲ့တယ်၊ ရေချိုး လိုက်ဦးမယ် ဟာ၊ ဒီညတော့ TV တောင်ကြည့်နိုင်တော့မယ် မထင်ဘူး” “ဟေ့ ဒီနှစ်ယောက် ဘာတွေ အတင်းတုတ်နေတာလဲ” “ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး မမစန္ဒာ” ပပ လေးတွဲ့သည့်ခြေလှမ်းတွေ နှင့် အဆောင်ဖက်ကို လျှောက်သွားသည်။ နောက်ရောက်လာသည့် စန္ဒာက တော်ဝင်ပန်း ၏ ၀ါရင့် အဆောင်သူဖြစ်သည်။ ကျောင်းသူဘဝကထဲက နေခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ ကြီးတခုမှာ ဒေါ်လာအများကြီးရသည့် မန်နေဂျာမလေး တယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
အနည်းငယ် ပိန်သယောင်ရှိ သော်လည်း သူ့တိုင်းအတာနှင့် သူကြည့်ကောင်းသူလေး ဖြစ်သည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် နှင့် အရင်းနှီးဆုံး အဆောင် သူ လည်းဖြစ်သည်။ “မိပ က ဘာဖြစ်တာလဲ၊ လေတိုက်ရင်လဲမယ့် ပုံနဲ့၊ သူ့ချစ်ချစ် ဆီက ပြန်လာတာလား” “သေချာတာပေါ့ မမရယ်၊ မျိုးကို ဆိုတဲ့ ငနာလက်ချက်ပေါ့၊ အဲဒီကောင်သိပ်မွန်တာ” “အင်းပေါ့၊ ပပ လိုအလုံးအထည်နဲ့ တောင်ယိုင်ဆင်းလာတာပဲ၊ သဘောပေါက်ပါတယ်၊ သက်မာချစ်ချစ်ကရော ဘယ်လိုလဲ” “ငြိမ်းချမ်း က အေးဆေးပါ၊ သက်မာ သဘောမတူပဲ ဘာမှမလုပ်ဘူး” “ဒါပေမယ့် သက်မာက လည်းအမြဲသဘောတူတယ် မဟုတ်လား” ရယ်သံလေးတွေ လွင့်လာသော်လည်း ဒေါ်နုနုရှိန် နားမှာမချိုပါ။ အဆောင်မှာ အသက်အကြီးဆုံး၊ ၀ါအရင့်ဆုံး ဖြစ်လျက်နှင့် ဒီကလေးမတွေ ကို မဆိုမဆုံးမသည့် အပြင် မိမိ ကိုလည်း ဒီလိုမျိုးတွေ ရှိနေတာကို အသိမပေး သည့် စန္ဒာ ကို စိတ်ထဲက ကျိတ်ပြီး အပြစ်တင်နေမိသည်။ “သက်မာ တို့က တခါတလေ မှပါ မမရယ်၊ ကျောင်းပိတ်ရက်ကြုံတာမျိုးမှ တညင်ကျောက်တန်း ဖက်ကို ကား မောင်းထွက်ကြတာလောက်ပါ၊ ဟီး …ဟီး” “တခါ တလေ ဆိုပေမယ့် မပေါ့နဲ့နော်၊ ငြိသွားရင်ခက်မယ်” “ငြိမ်းချမ်းက သက်မာထက်တောင်ကြောက်တတ်သေးတယ်၊ ဆိုင်ကယ်စီးရင် အမြဲတမ်း ဦးထုပ်ဆောင်းတယ်” “တော်သေးတာပေါ့၊ သက်မာ အလုပ်မရွုပ်တော့ဘူး” “အင်း …. ပပ ကတော့ဆေးထိုးတယ်၊ ညီမတော့ ဆေးခန်း မသွားရဲပေါင်၊ ရှက်စရာကြီး၊ တကယ်တော့ ရည်းစား ထားရတာလဲ ရွုပ်ပါတယ်၊ မမစန္ဒာလို အတုကြီးသုံးတာပဲ ကောင်းပါတယ်။” “ဟောတော် … ရှင်က ဘယ်လိုသိတာတုန်း၊ ချောင်းစရာ အပေါက်လည်း မရှိပါဘူး ရှက်လိုက်တာ” “ကိုယ့်ညီမလေးပဲ မရှက်ပါနဲ့၊ သက်မာ ကလည်း မမအခန်းထဲမှာ ကပ်ကြေးလာရှာရင်း မတော်တဆတွေ့တာပါ၊ ဘယ်သူ့မှ မပြောဘူး၊ စိတ်ထဲမှာပဲထားတယ်” စန္ဒာလည်း ခေသူ မဟုတ်ပါလားဆိုသည့် အတွေးကြောင့် ဒေါ်နုနုရှိန်ပါးစပ် အဟောင်းသားဖြစ်နေမိသည်။
“ငါ့ ညီမလေး လိမ်မာတယ်၊ ညကျရင် လဘက်သုတ်ကျွေးရမယ်” “ဒါနဲ့ မမ အဲဒါကို ဘယ်ကသွားဝယ်တာလဲဟင်” “လက်ဆောင်ရတာ၊ မ တို့ဆီကို project နဲ့လာတဲ့ ဖော်ရိန်နာမ တယောက်လက်ဆောင်ပေးသွားတာ၊ သူက စန္ဒာ နင့်မှာရည်းစားရှိလားတဲ့၊ အရင်ကရှိတယ် အခုမရှိဘူး ဆိုတော့ ဆက်စ် ကိစ္စ စိတ်ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ် သလဲ မေးတာနဲ့ အဆင်ပြေသလိုပေါ့ လို့ပြောလိုက်တာ ပြန်ခါနီး အဲဒါကြီး ပေးသွားတာပဲ” “သူသုံးတာလား” “အသစ်ပါ၊ သူက နှစ်ခုတောင်ယူလာတာတဲ့” “အကြီး ကြီးပဲနော်၊ မမ မနာဘူးလား” “ဂျယ် သုံးရတာပေါ့၊ အမယ်လေး သူပြန်ယူသွားတဲ့ ဟာကြီး ညီ မတွေ့ရင် လန့်မယ်၊ အထစ်အထစ် အရစ်အရစ် တွေ နဲ့ ကြောက်စရာကြီး၊ သူကပြောတော့ အဲဒါမျိုးမှ ပိုထိတာတဲ့” “သက်မာ လဲ ငြိမ်းချမ်းနဲ့ ပြတ်ရင် မမ လမ်းစဉ် လိုက်ရင်ကောင်း မလားမသိဘူး” “အတုက အစစ်လောက်ဘယ်ကောင်း မလဲ ညီမရယ်၊ တို့ က ကြိုက်မယ့်လူမရှိလို့” “မမ ပြောဖူးတဲ့ စလုံးက လူကြီးကရော” “ဟိုမှာ အိမ်ထောင်ကျသွားပြီ၊” “မမ က နှစ်မျိုးလုံးကြုံဖူးတော့ မေးကြည့်ရဦးမယ်၊ အတုနဲ့ အစစ် တော်တော်ကွာသလား” “ကွာတာပေါ့၊ အတုကို အစစ်နဲ့ ဘယ်လောက်တူအောင်လုပ်ထားလုပ်ထား အစစ်ကို မမှီဘူး” “အင်း … မမ ဆီက ဟာကတော့ တကယ့် အစစ်အတိုင်းပဲနော်၊ သွေးကြောတွေ တောင်ပါတယ်” “ဒါပေမယ့် အထိအတွေ့ကျတော့ ကွာတယ် ညီမရဲ့၊ လူ ကျတော့ အပွေ့အဖက် အနမ်းလေးတွေပါတယ် လေ၊ အတုကျတော့ စိတ်မကောက်ဘူး၊ သဝန်မတိုဘူး၊ သုံးပြီးတာနဲ့အိပ်ယာအောက် ထိုးထည့်လိုက်ရုံပဲ၊ ကဲပါ မှောင် တောင် မှောင်တော့မယ် အထဲဝင်ရအောင်၊ သိချင် ညကျမှ ဆက်မေး ဟုတ်လား” စန္ဒာ နှင့် သက်မာ အသံတွေဝေးသွားသည် အထိ ဒေါ်နုနုရှိန် ငူငူကြီး ဆက်ထိုင်နေမိသည်။ တော်တော်လေး မှောင်လာတော့ မှထမိ၏။
ထိုင်နေတုန်းက မသိသော်လည်း ထလိုက်တော့ ခြေထောက်တွေ ထုံကျဉ်နေသည်။ လက်စ နှင့် စွယ်တော်ပင်လေး ကို အဆောင်အဝင်ဝ၏ ညာဖက်နားက လွတ်နေသည့်နေရာမှာ သွားပြန်စိုက် လိုက်ပြီး အနားရောက်လာသည့် အိမ်ဖေါ်ကောင်မလေး တယောက်ကို ရေလောင်းခိုင်းကာ အိမ်ထဲဝင်ခဲ့ သည်။ “ဆရာမ …ဆရာမ” လမ်းမှာတွေ့သည့် အဆောင်သူမိန်းကလေး တယောက်က ဒေါ်နုနုရှိန် နောက်ဖက်ကို လက်ညိုးထိုးပြသည်။ “ဘာလဲ သမီး” “ဆရာမ ထမိန် နောက်မှာ ကွက်နေတယ်” လက်နှင့်စမ်းကြည့်လိုက်ရာ စိုစိစိ ချောကျိကျိ နှင့်ဖြစ်နေ၍ အခန်းထဲ မြန်မြန်ပြေးဝင်ပြီး မီးရောင်နှင့် ဖြန့်ကြည့် လိုက်မိသည်။ လေးလက်မ ပတ်လည်လောက်ရှိမည့် အကွက်ကြီးတကွက်ကို မြင်ရသည်။ သွေးလည်း မဟုတ်ပါ။ ဘယ်ကလာသနည်း ဟု စဉ်းစားနေဆဲ မသိစိတ်၏ စေ့ဆော်မွု ကြောင့်ပေါင်ကြားကို လက်နှင့် စမ်းလိုက်ရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် တကိုယ်လုံး အေးစက် တောင့်တင်းသွားရသည်။ သူမ၏ မိန်းမအင်္ဂါအဝတွင် ရွဲရွဲစိုနေသည်ကို စမ်းလိုက်မိသည်နှင့် အံကို တင်းတင်းကြိတ်ပြီး အိပ်ခန်းနှင့် တွဲထားသည့် အိမ်သာထဲသို့ အပြေးဝင်လိုက်မိ ပါတော့သည်။ သူမ အလွန်ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားခဲ့ရသည့် အဆောင်သူတချို့၏ လိင်မွုကိစ္စ အပေါ်သဘောထား နှင့် လုပ်ဆောင်ကျင့် သုံးနေမွုကို အမှတ်မထင်သိခွင့်ရလိုက်ခြင်းက ဒေါ်နုနုရှိန်၏ စိတ်ကို အလွန်အနှောက်အယှက်ပေးသည် ကို အထူး ပြောရန်လိုမည် မထင်ပါ။ သူမ ခမျာ အရမ်း လည်းထိတ်လန့်တုန်လွုပ်မိပါသည်။ ထိုအကြောင်းတွေ ကြား ရပြီးကထဲက ခေါင်းထဲမှာ ဒါကိုပဲ တွေးနေမိသည်။ “good morning ဆရာမ၊ မင်္ဂလာပါ” တက်ကြွလန်းဆတ်သည့် အသွင်ဖြင့် ထမင်းစားခန်းထဲဝင်လာပြီး နွုတ်ဆက်သည့် စန္ဒာ့ ကို ဒေါ်နုနုရှိန် ပြန်နွုတ် မဆက်မိသေးပဲ ငေးကြောင်ကြည့်နေမိပါသည်။ အိပ်ရေးမဝ လို့ ငူငူ ငေါင်ငေါင်ဖြစ် နေသည့် သူမနှင့် ဆန့်ကျင် စွာပင် စန္ဒာက ကြည်လင်ဖျတ်လတ်နေ၏။ “အော် …အေး …မင်္ဂလာပါကွယ်” မီးခိုးရောင်ရင့်ရင့် ကုတ်နှင့် စကပ်ရှည်ကို ဆင်စွယ်ရောင်ကိုယ်ကြပ်ဖြင့် တွဲဖက်ဝတ်ဆင် ထားသည့် စန္ဒာက ပြန် ပြုံးပြလိုက်ပြီး ထမင်းစားပွဲမှာဝင်ထိုင်သည်။ တော်ဝင်ပန်းက မနက် စာတော့ စီစဉ်မပေးပါ။ အဆောင်သူတွေက ဒေါ်အေးစိန်၏ ကောင်မလေးတွေကို မုန့်ဖိုးပဲ ဖိုးပေးပြီး စီစဉ် ခိုင်းတာမျိုးကိုတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် မသိသလိုပင် နေပါ ၏။ အခုလည်း စန္ဒာက ကောင်မလေး တွေ ဝယ်ပေးထားသည့် မုန့်ဟင်းခါးစားနေသည်။
ဟိုတလောကမှ ၂၈ နှစ်ပြည့်သည့်စန္ဒာက တဆောင်လုံးကို မုန့်ကျွေးတာပြန်မှတ်မိသည်။ လူက ပိန်ပိန်သွယ် သွယ်ဖြစ်သော်လည်း စန္ဒာ့ရင်သားတွေကတော့ ဖွံ့ဖြိုးသည်ကို အခု မှဒေါ် နုနုရှိန် သတိထားမိပါသည်။ ဒါတွေက သူမ၏ ချစ်သူအတွက် ကစားကွင်းကောင်းတခု ဖြစ် ချင်ဖြစ်နေခဲ့ပေလိမ့်မည်။ အခုတော့ လိင်တံအတု ဖြင့် စိတ် ဖြေနေသည် ဆိုသည့်စန္ဒာ့ ကို နားမလည်နိုင်သလို ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရသနည်းဟု သိချင်စိတ်လည်းပြင်း ပြ မိသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ဆယ့်လေးနှစ်သမီးမှာ အပျိုဖြစ်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင်အသက်လေးဆယ်ပြည့်ပြီးခဲ့ပြီ။ နှစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ် ဆို သည့်ကာလတခုမှာ လိင်ကိစ္စကို ဘာကြောင့်ကိုယ်နှင့် မဆိုင်သ လို နေခဲ့ပါလိမ့်ဟုလည်းတွေးမိ၏။ အရွယ် ရောက် သည်စမှပြီး ယောက်ျားသားတွေ၏ လိုချင်တပ်မက်မွုတွေ ပိုင်ဆိုင်လိုမွုတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင် ကြုံ ခဲ့ပြီး သည့်အတွက် မိမိ လှသည့် အကြောင်း ဒေါ်နုနုရှိန်သိပါသည်။ လက်တွဲဖေါ်ယောက်ျားသား တယောက် ရဖို့ ဘယ် လိုမှ မခက်ပါ။ ခုအရွယ် အထိတိုင်အောင် ကမ်းလာသည့် လက်တွေကို ရှောင်ဖယ် နေရသည် မဟုတ်ပါ လား။ ရတာမလို လိုတာမရဟု အပျိုကြီးတွေကို ပြောစမှတ်ရှိကြသော်လည်း ဒေါ်နုနုရှိန် အတွက် ကတော့ လိုချင်သူ များလွန်းခြင်းကြောင့် တယောက်ထဲ ဖြစ်ရခြင်းလို့ ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆိုနိုင် ပါသည်။ များပြားသည့် ကမ်းလှမ်းမွု တွေ ကြားမှာ ဘာကိုရွေးရမှန်း မသိနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ ရ သည်။ မျက်စိမှိတ်ရွေးချင်စိတ်ပေါက်လောက်အောင် လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မတပ်မက်မိခဲ့။ အချစ်ဆိုသည့် အရာက ဒေါ်နုနုရှိန် နှလုံးသားတံခါးကို ဖြတ်ကျော်ဝင်လာဖို့ အသာ ထား၊ တံခါးခေါက်သံလေးပင် မပေးခဲ့ပေ။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူဘဝ အလှဆုံးနှင့် အတောက်ပဆုံးအချိန်မှာ မိဘစကားနားထောင် သည့် သမီးအလိမ္မာ ဘဝမှာ ကျေနပ်နေခဲ့မိသလို အထင်ကြီးအားကျသည့် ဆရာမ ဘဝ ကို ရောက်နိုင်ရေးအတွက် စာကြိုးစားဖို့ကို သာစိတ်သန်ခဲ့၏။ လူရိုသေရှင်ရိုသေ ဆရာမဖြစ်ချင် သူက လူမွုရေးပိုင်းမှာသန့်ရှင်းဖို့ လိုသည်ဟု တွေးခဲ့မိ တာ ကြောင့်လည်းပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဆရာမ ဖြစ်လာပြန်တော့ ကျောင်းသားတွေက ဆရာမ ငယ်ငယ်လှလှလေးကို အရိုအသေ မတန် စေရန် အိနြေ္ဒကြီး တခွဲသားနှင့် နေရသလို တက္ကသိုလ် အသိုင်းအဝိုင်း ထုံးစံ နိုင်ငံခြားပညာသင်သွားခွင့် ရဖို့ အရေး အတွက်စာတွေပိုကြိုးစားရပြန်သောကြောင့် မေတ္တာရေးမှာလစ်ဟင်းရပြန်သည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားက ရ သည့်ဘွဲ့၊ လက်ထောက်ကထိက ဆို သည့်ရာထူးနှင့် ပြည့်စုံလာပြန်တော့လည်း မမျှော်လင့်ဘဲ မိခင်ကြီး၏ ကျန်းမာရေးက ဝင် လာသည်။
တန်ဖိုးထားခဲ့သည့် ဆရာမအလုပ်ကိုစွန့်ပြီး ပြုစုခဲ့သည့်တိုင် မိခင်ကိုဆုံးရပြန်သောအခါ ဖခင် ကိုလည်း တဦး ထဲ ပစ်မထားနိုင်လို့ အဖေနားမှာပဲ နေရင်း နောက်တော့ အဆောင် ဖွင့်ဖြစ်သည့်အခါ အဖေတလှည့် အဆောင်တ လှည့် အချိန်ပေးရင်း အချိန်တွေကုန်ဆုံးခဲ့ရသည်။ ဖခင် မရှိတော့သည့် အခါမှာလည်း နာမည်ရနေသည့် အ ဆောင်ကို ကြိုးစားစောင့်ရှောက် နေရသဖြင့် ဒေါ်နုနုရှိန် မှာ ထွေလီကာလီ စိတ်များချိန်မရခဲ့ပါ။ အခုခေတ်ကာလမှာ သမီးရည်းစား စံနွုံးတွေ ပြောင်းလဲ ကုန်ပြီလားဟု ဒေါ်နုနုရှိန် ဇဝေ ဇဝါ ဖြစ်ရသည်။ ဆိတ် ကွယ် ရာမှာ သွားပြီး လိင်ဆက်ဆံကြခြင်းက ဟိုတုန်းက အတွဲတွေ ပန်း ခြံသွားကြသလို ရုပ်ရှင်သွား ကြည့်ကြ သလို သာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ကိစ္စတခုလို့ သတ်မှတ် ထားလိုက်ကြပြီထင်ပါသည်။ မိန်းကလေး သိက္ခာ၊ အပျိုစင် ဂုဏ်ဒြဒ်၊ စသည့် သတ်မှတ် ချက်တွေလည်း ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့လေပြီ။ ကျောင်းဆရာမ မဟုတ်တော့သည့်တိုင် ဆရာမစိတ်၊ ဆရာမကျင့် ဒေါ်နုနုရှိန် ပျောက်မ သွားပါ။ အဆောင်သူတွေ ဆိုတာကလည်းသူမ၏ ကျောင်းသူတပည့်လေးတွေ၏ အရွယ် သာဖြစ်ရာ တပည့်လေးတွေလိုပဲ သဘောထားမိ ပါသည်။ ကိုယ့်ဥယျာဉ် တွင်းက ပန်းက လေးတွေလို သဘောထားပြီး စောင့်ရှောက်ချင်စိတ်၊ ပျိုးထောင်ချင်စိတ် အမြဲရှိခဲ့သည်။ သူမ၏ ပန်းကလေးတွေ လှပကြပါသည်။ လန်းဆန်းတင့်တယ်ကြပါသည်။ သို့သော်လည်း အတွေး အမြင်ပိုင်းမှာတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် ဖြစ်စေချင်သည်နှင့် များစွာခြားနား ခဲ့ပြီမှာ အမှန်ဖြစ် တော့၏။ ဒါပေမယ့် သူမ၏ မိန်းကလေးတွေက အလုပ်ခွင်မှာ ကျောင်းစာမှာတော့ အောင်မြင်ကြပါ သည်။ ရည်းစား ထား သော်လည်း၊ ရည်းစားနှင့် အိပ်သော်လည်း စိတ်လေပြီး ဆုံးရွုံး တာမျိုး လည်း ရှိမနေကြပြန်။ အိပ်ရေးမဝလို့ ရီဝေ နေသည့် ခေါင်းကို ခပ်သာသာခါရင်း ဘာကိုနား လည်ရမှန်း မသိသည့်အဖြစ်ကို တွေးနေမိ၏။ သက်မာ၊ ပပ နှင့် စန္ဒာတို့ကတော့ အိမ်ထောင်သည် မဟုတ်သော်လည်း အပျိုမစစ်ကြတော့တာ သိပြီးဖြစ်သည်။ ကျန်သည့်မိန်းကလေး တွေရောဘယ်လိုလဲဟု သိချင်လာမိသည်။ အားလုံးတော့ ဒီလိုမဟုတ်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် အ ဆောင်က မိန်းကလေး တဝက်လောက်တော့ သက်မာတို့ အတိုင်းဖြစ်လောက်သည်ဟု ထင်မိပါသည်။သိချင်စိတ် ကိုမထိန်းနိုင်တော့သည့် အခါ အဆောင်မှာ မိန်းကလေး တယောက်မှ မရှိတော့သည့် နေ့ လည်ခင်းတခုမှာ အ ခန်းတွေထဲဝင်ရှာမိတော့သည်။ ဒေါ်နုနုရှိန်ဆီမှာ အခန်းတိုင်း၏ သော့တွေရှိနေသည်ကို ဘယ်သူမှမသိကြပါ။
ဒေါ်နုနုရှိန် ကလည်း လိုလိုမယ်မယ် သိမ်းထားသော်လည်း တခါမှထုတ်မသုံးခဲ့ ဖူးပါ။ ဒီတခါမှ ထုတ် သုံးမိခြင်းဖြစ်ပါ၏။ အဆောင် က အိမ်မ နှင့်တဆက်ထဲဖြစ်သည်။ အပေါ်ထပ်ကဖြစ်စေ အောက်ထပ်ကဖြစ်စေ အဆောင် ဝရံတာ သို့ တန်း ဝင်နိုင်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံး L ပုံစံဖြစ်အောင် အိမ်၏ ခြေရင်းဖက် အခြမ်းကို ဖြိုပြီး နှစ်ထပ်တန်းလျား ရှည် ကြီး နှင့် တဆက်ထဲ လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မီးဖိုနှင့် ထမင်းစားခန်း ကိုတော့ အိမ်မ ထဲမှာထည့်ထား၏။ အခန်း ခြောက်ခန်းပဲ ရှိသည့် အောက်ထပ်ကို အရင်ဝင်ကြည့်သည်။ အောက်ထပ်က မိန်းကလေး တချို့က ဒီ နှစ်မှ ရောက်လာသည့် လူသစ်ကလေးတွေ ဖြစ်သည်။ စိတ်ထဲမှာ မလုံမလဲ ဖြစ်ရသော် လည်း အားတင်းပြီး လေ့လာ မိ၏။ သာမန်မိန်းကလေး တွေ၏ အခန်းမျိုးသာ ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ချမိသည်။ တံမျက်စည်း လှည်း ဖို့ တော့ ဒီကလေး မတွေပျင်းပုံရသည်။ အပေါ်ကိုတက်သည့် အခါကျတော့ အရင်ဆုံး နားနှင့် ဆတ်ဆတ်ကြားခဲ့ရသည့် သက်မာ၏ အခန်း နှင့် ပပ၏ အခန်းကို ရှာသည်။ ရှာသည်ဆိုတာ က လည်း လက်ရာခြေရာ မပျက်ရအောင်သတိထားပြီး ကြည့်ရတာဖြစ် သည်။ အိပ်ယာပေါ် စားပွဲပေါ် နှင့် သော့ခတ် မထားသည့် ဘီရိုများ အံဆွဲများကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း မျိုးလောက်ပဲ လုပ်နိုင်သည်။ သော့ ခတ်ထားတာတွေ ဆိုရင် တော့ ဘာမှလုပ်လို့ မရပေ။ သက်မာနှင့် ပပ ဆီမှာ ဘာမှထူး ခြားတာ မတွေ့သဖြင့် ကျန်တဲ့ အခန်းတွေ လိုက် ကြည့်မိသည်။ ကျောင်းသူလေး တယောက်၏ အံဆွဲထဲတွင် ကွန်ဒွန် နှစ်ခုသုံးခု တွေ့သည်။ တခြား တယောက် ဆီမှာတော့ ပဋိသန္ဓေ တားဆေးကဒ် တွေ့၏။ ဒါဆိုရင် သူ တို့လည်း ပပ တို့ နှင့် လိုင်းတူလို့ သတ်မှတ် နိုင်သည်။ ကျန်အခန်းတွေ မှာတော့ အဝတ်တွေပွရွုပ်နေတာ၊ သုံး ပြီးသား လစဉ်သုံးဂွမ်းထုပ် ကို တွေ့ရာစက္ကူ နှင့် ပတ်ပြီး အခန်းထောင့်မှာ ဒီတိုင်းပစ်ထားတာ၊ နေကြာစေ့၊ ဆီး ထုပ် အခွံတွေ များနေတာ ဒီလောက်ပဲ တွေ့ရသည်။ စန္ဒာ့ အခန်းကတော့ အပြင်ဖက် အကျဆုံး အပေါ်ထပ်ထောင့် စွန်းမှာဆိုတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် နောက်ဆုံးမှဝင်ဖြစ်၏။ အခန်းတွေ အားလုံးထဲမှာ စန္ဒာ့ အခန်းက အလင်းရောင်အရဆုံး အကောင်းဆုံး အခန်းဖြစ်သလို အသန့်ရှင်းအ သပ်ရပ် ဆုံး ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရသည်။ စန္ဒာက အမြဲသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ နေတတ်သလိုသူမ၏ အခန်းက လည်း အခန်းရှင် အတိုင်း ပင်ဖြစ်နေသည်။
သက်တမ်းရှည် အဆောင်သူဖြစ်နေလို့ ဒေါ်နုနုရှိန် က အကောင်း ဆုံးအခန်း ကိုပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ထပ်မှာ အိမ်မနှင့် ကပ်လျက်ရှိသော ရေချိုးခန်း အိမ်သာတွေ နှင့် ဝေးသည်မှ အပ လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး အလင်းရောင်ရသည့် အခန်းကို သဘောကျလို့ စန္ဒာ မနေတော့ရင်ပြောင်းနေ ချင်ပါသည် ဟု ကြိုပြောထား သူတွေတောင်ရှိပါသည်။ အခန်းထဲမှာ လိုက်ကြည့်ရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် နားထဲတွင်“ ပြီးတာနဲ့ အိပ်ယာအောက်ကို ထိုးထည့်လိုက်ရုံပဲ” ဆိုသည့် စန္ဒာစကားကို ကြားယောင်လိုက်မိပြီးနောက်တွင် မွေ့ယာကို အသာလေး မပြီး ကြည့်လိုက်မိသည်။ ခြေရင်းဖက် မှာ ဘာမှမတွေ့၍ အလယ်လောက်ကို မလိုက်တော့မှ အဖြူလိုလို မီးခိုးလိုလိုအရောင်ဖြင့် ရာဘာအချောင်းကြီး ဘွားကနဲ ထွက်လာသည်။ စက္ကူ တရွက်နှင့် ပတ်ထားသော်လည်း အားလုံးကို ငုံမိအောင်မအုပ်နိုင်။ ထိပ်ဖျားနှင့် အရင်းဖက် က အပြားဝိုင်းဝိုင်းတခုက အပြင်သို့ထိုးထွက်နေသည်။ ထုပ်ထားသည့် စက္ကူမှာ ရေအနည်းငယ်စိုစွတ်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားဆဲ မွေ့ယာ ကို ပြန်ချဖို့မေ့ပြီးဒေါ်နုနုရှိန် ကြောင်ကြည့်နေမိသည်။ ဘယ်လောက် ကြာအောင်စိုက်ကြည့်နေမိတာကို သတိ မ ထားမိပါ။ ယောက်ျားတယောက်၏ တန်ဆာက ဒီလောက်အရွယ် အစားရှိသလား။ ဒေါ်နုနုရှိန် လည်းမမြင် ဖူး သည့်အတွက် ထူး ဆန်းနေသည်။ ပိန်ပိန်ပါးပါး စန္ဒာ့ ၏ ကိုယ်လေးထဲသို့ ဒါကြီးထိုးထည့်လို့ ရသည်ဆိုတာ ကို လည်းအံ့သြနေမိပါသည်။ ကြည့်နေရင်း အသက်ရွုမြန်လာပြီး မွေ့ယာကိုင်ထားသည့်လက်တွေ တုန်နေကြောင်း ဒေါ်နုနုရှိန် သတိပြုလိုက် မိ ပြီးသည့်နောက်တွင် အနားစပ်ကနေ ပင့်မထားမိသည့် မွေ့ယာ ကိုလွတ်ချပစ်လိုက်သည်။ အိပ်ယာခင်း အ နား စလေးတွေကို ညီညီညာညာ ဖြစ်သွားအောင် ပြန်လုပ်ပေးရင်း လူက ကတုန်ကရီဖြစ်နေသည်။ လက်ဖဝါး တွေမှာ ချွေးပြန် နေပြီး နဖူးစပ်မှာလည်းချွေးတွေသီးနေ၏။ အသက်မဲ့သည့် ယောက်ျားအင်္ဂါအတုတခုကို မြင်ရ သည့်အ စား သက်ရှိအဆိပ်ပြင်းမြွေ တကောင်ကိုမြင်တွေ့ရသလို တုန်လွုပ်မောပန်း နေရသည်။ ဒါတောင်မှ သက်မာက အ စစ်နှင့် အလွန်တူသည်ဟု ချီးမွမ်းခဲ့သည့် အရာကို တပိုင်းတစသာမြင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရာခြေရာ ပျက်မပျက် စေ့စေ့စပ်စပ် အကဲခတ်ပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့သည့် တိုင်အောင် ဒေါ်နုနုရှိန် ရင်တုန်မ ပျောက်သေးပါ။ အိမ်ဖေါ်ကောင်မလေး တယောက်ကို သံပုရာရည် ဖျော်ခိုင်းပြီး သောက်လိုက်ရသည်။ တနေ့ လုံး လည်း အခန်းအောင်းနေမိ၏။ ဒေါ်အေးစိန် ကို ဈေးဝယ်ဖို့ ကားမောင်းပို့မည်ပြောထားတာကိုတောင် မထွက် ချင် တော့လို့ အိမ်ဖေါ်တ ယောက်ထည့်ပေးပြီး တက္ကဆီ နှင့်သွားခိုင်းလိုက်ရသည်။
အခန်းသာအောင်းနေသော်လည်း ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မလုပ်ဖြစ်ပါ။ စာဖတ်လိုက်၊ အိပ် ယာ ထဲမှာလှဲလိုက် နှင့် အ ချိန်တွေကုန်သွားသည်။ ယနေ့ခေတ် မိန်းကလေးတွေ အကြောင်းလည်း စဉ်းစားနေမိ၏။ ဒေါ်နုနုရှိန် တို့ခေတ်က ရည်းစားဘဝ မှာနယ်ကျော်ခြင်း မရှိမဟုတ်၊ ရှိကြပါသည်။ ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုးမဟုတ်ဟု ထင်၏။ တလော တုန်း က သူငယ် ချင်းဆရာမ တယောက် အလည်လာစဉ်ပြောပြသွားသည့် သူမ၏ တပည့်တွေက ယောက်ျားလေး ရောမိန်းကလေးပါ တအိမ်ထဲတူတူငှားနေပြီး ကျောင်းတက်ကြသည့် အကြောင်းပြောသွားစဉ်က သိပ်မယုံချင် သ လိုဖြစ်ခဲ့ တာကိုပြန်တွေးမိသည်။ “နင်တို့က မပြောဘူးလား” “ပြောလဲရမှာမှ မဟုတ်တာ၊ ငါတို့တုန်းကလို အစိုးရကျောင်းဆောင်တွေလဲ မရှိတော့ဘူးဆို တော့ သူတို့ဖာသာ အပြင်မှာနေချင်သလို နေနေကြတာ တို့လဲ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ” နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်တုန်းကတော့ သမီးရည်းစား အတူတူနေကြတာမဆန်းပါ။ ဒါသူတို့ ယဉ်ကျေးမွု့ လို့ပဲ နားလည်ခဲ့ သည်။ အခုတော့ ဒီကိုလည်း ထိုယဉ်ကျေးမွု ကူးစက် လာသည့် အနေအထားဖြစ်နေသည်။ မိမိ အ ဆောင်က မိန်းကလေးတွေကတော့ ဒီလိုမဟုတ် ဟု ထင်ထားမိတာ အလွဲကြီးလွဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက် ရ ပါသည်။ အဆောင်မှနေ ကျောင်း သို့မဟုတ် အလုပ်ကို ထွက်သွားပြီးသည့် အချိန်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်ပါ။ အဆောင်ပြန်ဝင်လာမှ သူမတို့ကို ထိန်းချုပ်လို့ရပေမည်။ နောက်ဆုံးတော့ အဆောင်မှာမဟုတ်တရုတ်လုပ်မနေ ရင်ပြီးတာပဲဟု စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ရသည်။ ဒါပေမယ့် စန္ဒာ့လို ကိစ္စမျိုးကျတော့ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်နားလည်ရမည်ကို ဒေါ်နုနုရှိန် မတွေးတတ်ပြန်ပါ။ အဆောင် စည်း ကမ်းကိုဖေါက် ဖျက်ပြီး ယောက်ျားခေါ်လာခြင်းလည်း မဟုတ်၊ သက်မဲ့ပစ္စည်းတခုကို အသုံးချပြီးသူမ၏ ဆန္ဒကို ဖြေဖျောက်ခြင်းသာဖြစ်ရာ တားမြစ်ချင်ရင်တောင် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ တားမြစ်ရမည် မှန်းလည်း ဒေါ်နုနုရှိန် အဖြေမ ထုတ်နိုင်ပါ။ “တော်ပြီ၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြတော့၊ ငါ့ အဆောင်မထိခိုက်ရင် ပြီးတာပဲ” ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးနောက် ရွုပ်ထွေးနေသည့် ဦးခေါင်းနှင့် တနေကုန်ညောင်းချိနေသည့် ကိုယ်ခန္ဓာကို ဖြေလျော့ရန် ရေချိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အဝတ်အစားချွတ်ရင်း မှန်ထဲမှာ ကိုယ့် ကိုယ်ကို သေသေချာချာ ပြန်ကြည့်မိသည်။ ၀ါဝင်းပြည့်ဖြိုးသည့်ရင်သားတွေက ခရမ်းရောင်ဘရာစီယာထဲက အပြင်ကိုအတင်းတိုးထွက်နေကြသည်။ ဘရာ စီ ယာကို ချွတ်လိုက်လို့ ခွက်ထဲကနေ ထွက်လာသည့် တိုင် ရင်သားတွေက လျှောကျသွားခြင်းမရှိဘဲ တင်းတင်း ရင်းရင်း နေရာ တကျဖြစ်နေသည်။ အသက်လေးဆယ် ရှိသည့်တိုင် လျော့တွဲခြင်း မရှိသေးသည့်ရင်သား တွေကို လက်နှင့်အသာမကြည့်မိသည့် အခါတွင်တကိုယ်လုံးကြက်သီးမွေးညင်းတွေ ထလာ သလိုခံစားရသည်။ ရင်သားတွေသာမဟုတ် ပုခုံးသား၊ လက်မောင်းသာတွေက လည်းတင်းရင်းစိုပြေနေဆဲပင်။
အဆီပိုမရှိပါ။ ဗိုက် ခေါက်ကလည်းရွယ်တူ မိန်းမတွေလို ထူထူမောက်မောက်မဟုတ်ဘဲ ယောင်ယောင်လေးသာမို့ သယောင် ရှိနေ သည်ကို စိုက်ကြည့်ရင်း ထမိန်ကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ ဆီးခုံမို့မို့အောက်တွင် အမွေးတွေ နည်းနည်းပြန်ရှည် နေ ကြသည်။ သက်ပြင်းချရင်း ဒီနေ့တော့ ရိတ်လို့ မဖြစ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အပျိုဖြစ်လာစမှာ အမွေးလေး တွေ ထွက်လာတော့ ရှက်စိတ်ဖြင့် ကပ်ကြေးနှင့် ညှပ်ပစ်ခဲ့၏။ အမွေးကြမ်းကြမ်း တွေရှည် ထွက်လာတော့ ဒေါ်နုနု ရှိန် မနေတတ်တော့ပါ။ မြင်ရထိရရင် စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိ။ တက္ကသိုလ်ရောက်မှ သူငယ်ချင်း တယောက် က သူမ၏ အမွေးတွေကို မှန်မှန်ရိတ်ပေးသည့် အကြောင်း ပြောပြရာမှ ဒေါ်နုနုရှိန် လည်း ရိတ်ဖြစ်သွားသည်။ အခုတော့ အကျင့်ဖြစ်သွားပြီး နည်းနည်း ပြန်ရှည်လာတာ နှင့် မနေတတ်တော့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပစ္စည်း ကိုယ် ပြန် မကြည့်ရဲအောင်ဖြစ်နေရသည့် အချိန်မှာတော့ မရိတ်ရဲ ပါ။ ခြေတုန်လက်တုန်နှင့် ရှကုန်ရင်ခက်မည်။ မျက် လုံးထဲမှာ စန္ဒာ့မွေ့ယာ အောက်က အ ချောင်းကြီးကို ပြန်မြင်ယောင်လာသည့် အခါ တကိုယ်လုံးတုန်သွား၍ အလန့်တကြား ဖြင့် ရေချိုးခန်းသုံး တ ဘက်ကြီးဖြင့် တ ကိုယ်လုံးလုံအောင်ပတ်ထားလိုက်မိသည်။ အပျိုကြီး ဖြစ်မည့်ဇာတာပါသူပီပီ ဒေါ်နုနုရှိန် မှာ နောက်ထပ်ဇီဇာ ကြောင်တာ တခုရှိသေးသည်။ အတွင်းခံကို နည်းနည်းလေး ဟောင်းသွားတာနှင့် ဘယ်တော့မှ မဝတ်တော့။ အိမ်က ကောင်မလေးတွေကိုဖြစ်ဖြစ်၊ ခြံအလုပ် သမားကိုလှရွေ၏ မိန်းမ ကိုဖြစ်ဖြစ်ပေး ပစ်လိုက်သည်။ ဝတ်ရင်လည်း အဖိုးအတန်သော၊ လှပသော အတွင်းခံ မျိုးတွေပဲ ဝယ်ဝတ်တတ်သည်။ သူ၏ အကျတွေရသည့် သူတွေက လည်း ထိုအကျင့်ကို သဘောကျကြသည်။ အတွင်းခံ အသစ်လှလှလေး ဝယ်လာဖြစ်ပြီဆိုရင် အိမ်ရောက်တာ နှင့် မှန်ရှေ့မှာဝတ်ကြည့်တတ်သည်။ အပေါ် ကအကျ င်္ီထပ်ဝတ်လိုက်ရင် ပျောက်ကွယ်သွားမှာမှန်း သိရက်နှင့် လှတာကိုပဲမက်သည်။ ဘယ်လောက်ဈေးကြီး ကြီး ဝယ်ဝတ်သည်။ သွားရင်းလာရင်း ကြိုက်တာတွေ့ရင်လည်း အမြဲဝယ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်နုနုရှိန်ဆီမှာ အတွင်းခံတွေ ပုံနေတတ်သည်။ အတွင်းခံလှလှလေးဝတ်ထားသည့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ထဲမှာ ပြန်ကြည့်ရတာ ကို ဒေါ်နုနုရှိန်ပျော်သည်။ လူတိုင်း၊ ယောက်ျားတိုင်း တပ်မက်စွာကြည့်ကြသည့် ခန္ဓာကိုယ် မိမိ မှာရှိမှန်း ဒေါ်နုနုရှိန် သိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် အဝတ်မပါဘဲမြင်ဖူးသည့် အကြိမ်တွေတိုင်း စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ မနေခဲ့ ဘဲဒီနေ့မှ ထူးခြားစွာရှက်ရွံ့နေသည့် အဖြစ်ကိုဒေါ်နုနုရှိန် နားမလည်ပါ။ ခါတိုင်းလို ပင်ရေချိုးရင်း ကိုယ်ကို ပွတ်သပ်သန့်စင် ခြင်းကိုပင် မလုံမလဲ ဖြစ် နေရသည်။ ပေါင်ကြား ထဲကို ဆပ်ပြာတိုက်ချိန်မှာပင်ရွရွလေးသာပွတ်မိ၏။ စိတ်ထဲ ဂယောင်ချောက်ခြားဖြစ်နေသည်ကို သည်းမခံနိုင်တော့သဖြင့် ရေချိုးတာကို အမြန် လက်စသတ်ပြီး အ ပြင်ကိုထွက်လာမိသည်။ ရေသုတ်ပြီး အဝတ်အစားလဲတော့လည်း မှန်ကို မကြည့်မိအောင်သတိထားနေမိသည်။ အဝတ်အစား အပြည့်အစုံဝတ်ပြီး ခေါင်းဖြီး တော့မှသာ မှန်ပြန်ကြည့်သည်။
အသက်လေးဆယ် ရောက်မှ ဘာ ကြောင့် မြီးကောင်ပေါက် မလေးတယောက်လို ဖြစ်နေရသည်ကို ဒေါ်နုနုရှိန် နားမလည်ပါ။ ဒါပေမယ့် နားလည် ဖို့လဲ မလိုဟုတွေးနေမိပါသည်။ ညနေအဆောင်သူတွေ ပြန်ရောက်လာကြချိန်တွင် အရင်ရက်တွေကလို ဟိုလျှောက်ဒီသွား နှင့် မျက်နှာပြလူစစ် မနေတော့ဘဲ ခြောက်နာရီ ထိုးခါနီးမှ လူစုံမစုံ ဒေါ်အေးစိန်ကိုကြည့် ခိုင်းလိုက်သည်။ လူစုံသည် ဆိုတော့မှ နာရာ ရား ကို တံခါးပိတ်ခိုင်းလိုက်၏။ သူတို့လေး တွေ မရှိခိုက် အခန်းထဲဝင်ကြည့်မိသည့် အဖြစ်ကို ဒေါ်နုနုရှိန် မျက်နှာ ပူနေမိခြင်း ဖြစ် သည်။ အဆောင်သူတွေ၏ အခန်းထဲကို ဒေါ်နုနုရှိန်ဝင်ဖူးပါသည်။ ဒါပေမယ့် ပိုင်ရှင်ရှိသည့် အချိန် မျိုးမှသာ အကြောင်းကိစ္စတခုခု ဖြစ်သွားစကားပြောခြင်း၊ နေမကောင်းဟု ဆိုရင်သွားကြည့်ချင်း လောက်သာ ဖြစ် သည်။ စိတ်မလုံသည့် အတွက် သူတို့ညစာစားနေကြချိန်တွင် ဒေါ်နုနုရီ ခြံပြင်ကိုထွက်လာခဲ့၏။ “ကောင်မလေး ဘယ်တုန်း” ငယ်စဉ်ကထဲက သိခဲ့သည့် ကုလားအဖိုးအို အတွက်ဒေါ်နုနုရှိန် သည် ကောင်မလေးသာဖြစ်၏။ “ဟိုနား ဒီနားပါပဲ” ဒေါ်အေးစိန် အလုပ်ရွုပ်ရသည့် အချိန်ဖြစ်လို့ တယောက်ထဲပဲ အနီးတဝိုက်မှာ လမ်းပတ်လျှောက်နေမိပါသည်။ သိ သည့်သူတွေက လည်းနွုတ်ဆက်သွားကြ၏။ ညီအကို မသိတသိ အချိန်မှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ်လို့ လည်း သတိ မထား မိပါ။ အလိုက်သင့် ပြန်နွုတ်ဆက် လိုက်ရုံသာ ဖြစ်သည်။ အိမ်နှင့် ဝေးလာတော့မှ ပြန်လှည့်လာခဲ့၏။ “ဆရာမ၊ အတော်ပဲ” အိမ်နားမရောက်မှီ လမ်းချိုးထဲက ထွက်လာသည့် အမျိုးသမီးတယောက်က အနားကပ်လာသည်။ မီးရောင်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရသည့် အသားညိုညို နှင့် ဒီအမျိုးသမီး ကိုတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် ကောင်းစွာသိပါသည်။ “အော် …မစိုးစိုးနွယ်” “ကျွန်မ ကို ပြခိုင်းထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ ရှိလို့ ဆရာမဆီလာပြမလားလို့” “တလောက တင်ဝယ်သေးတယ်လေ၊ မယူနိုင်သေးပါဘူး မစိုးစိုးနွယ်ရယ်” “ဝယ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကြည့်ပါဦး ဆရာမရဲ့၊ ကြိုက်တာတွေ့ချင်လဲ တွေ့မှာပေါ့” မစိုးစိုးနွယ်က လိုင်းစုံရသည့် ပွဲစားဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေနှင့် စိန်ရွေရတနာမှသည် အိမ်ဖေါ်အထိ ပွဲစားလုပ်၏။ ဒေါ် နုနုရှိန် အိမ်က အိမ်ဖေါ်ကလေး တယောက်က မစိုးစိုးနွယ်ခေါ်ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် က ဒီလိုအရပ် ပွဲစား နှင့် အဖိုးတန်ပစ္စည်း ဝယ်လေ့ မရှိပါ။ ပြီးတော့ မစိုးစိုးနွယ်၏ ရွေထည်တွေကလည်း သိပ်ပြီးအရည်ကောင်း လှသည် မဟုတ်။တလောကမှ အိမ်က အဖေါ်ကောင်မလေးတွေ အတွက် ဈေးခပ်ပေါပေါ ဆွဲကြိုးလေးတွေ သူမ ထံမှ ဝယ်ပေးဖြစ်ခဲ့သည်။ “ဗိုက်နာလို့ ထုတ်တာတဲ့၊ ပစ္စည်းကောင်းတွေပါ၊ ကြည့်ကြည့်ပါဦး ဆရာမရယ်၊ မနက်ဖြန်လာခဲ့ မယ်နော်” ခြံဝ လဲ ရောက်နေ ပြီဖြစ်လို့ ဒေါ်နုနုရှိန်က ခပ်လွယ်လွယ် ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သည်။
“သွားမယ်နော် ဆရာမ၊ နောက်တောင်ကျနေပြီလား မသိဘူး” ဒေါ်နုနုရှိန် ကို နွုတ်ဆက်ပြီး မစိုးစိုးနွယ် ခပ်သွက်သွက်လျှောက်သွားသည်။ အရင်ကဆိုရင် ဆင်မယဉ်သာလို့ ပြော ရမည့် ခြေလှမ်းမျိုးနှင့် ညက်ညက်ကလေးသွားတတ်သူက ဒီနေ့တော့ အရင်လိုနေပုံရသည်။ နောက်က နေ ကျားလိုက်လာသလို သုတ်ခြေတင် နေ၏။ သူမ ဆီက ပျံ့လွင့်လာသည့် ရေမွေး နံ့ ပြင်းပြင်းက ဒေါ်နုနုရှိန် ဆီလွင့် လာ၏။ သူ့ အထွာနှင့်သူ ငွေကြေးပြည့်စုံပါလျှက်နှင့် ဘာကြောင့် ရေမွေး ကောင်း ကောင်း မသုံးသနည်းဟု ဒေါ်နု နု ရှိန်တွေးနေမိသည်။ “အဲဒီ ကောင်မလေး နော်၊ ညနေဆိုရင် ဟိုဖက်ကို သွားပြီ၊ အဲဒီမှာ သူ့ရည်းစား ရှိလိမ့်မယ်” နာရရား က တံခါးဖွင့်ပေးရင်းပြောသည်။ “မဟုတ်တာ နာရရားရယ်၊ သူ့မှာ ယောက်ျားရှိတယ်လေ၊ အလုပ်ရှိလို့ ဖြစ်မှာပါ” “သူ့ယောက်ျားနော် သေတော့မယ်၊ သူအခု အသစ်ရှာနေတာ” “ကဲ ..ကဲ ၊ သူ့ဖာသာ ဘာရှာရှာ၊ နာရရားကို လာမရှာရင် ပြီးရောပေါ့” မုဆိုးဖို ကြီး နာရရားကို သူ့နဖူးသူရိုတ် ကျန်ခဲ့အောင်ပြောထားခဲ့ ပြီး ဒေါ်နုနုရှိန် အိမ်ထဲဝင်လာခဲ့သည်။ ထမင်းစား ခန်း ဖက်ကို တချက်သွားချောင်း လိုက်ပြီး အိပ်ခန်းထဲပြန်ဝင်လာလိုက်သည်။ အားလုံးပြီးသွား မှပဲ ညစာကို အေး အေးဆေး ဆေး တယောက်ထဲ သွားစားတော့မည်။ – ဒေါ်နုနုရှိန် လက်တွေတုန်နေသည်။ဒီပစ္စည်းကြီးကို ဘာလို့ အိတ်ထဲကနေထုတ်ကြည့်ချင်စိတ် ဖြစ်လာရသည်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းနားမလည်နိုင်ရှာပေ။ တုန်ရီသောလက်တွေနှင့် ဆွဲထုတ်လိုက်ချိန်တွင် အသက်အောင့် ထား မိသည်။ ထပေါက်တော့မည့် မြွေတကောင်ကို ကိုင် ထားရသလို သတိကြီးစွာ ဖြင့် ပင့်မြှောက်ကြည့်လိုက်၏။ ရာ ဘာသား၏ ချောမွေ့ မွုကြောင့် ချွေးစေးတွေ ပြန်နေသည့်လက်ထဲကနေချော်ပြီး လွတ်ကျမသွားအောင် ခါး လည် ကနေ တင်းတင်း ညှစ်ဆုပ်ထားမိသည်။ ထိပ်ဖျားက ထွက်ပြူလာစ မှိုပွင့်ကြီးတပွင့် အလားပင်။ အရစ်၏ နောက်တွင်အောက်ကိုပြန်ချိုင့် ပြီး ဆင်း လာ သည့် တလျောက်တွင် သွေးကြောလိုမြောင်း တွေဖုထနေ၏။ ဒေါ်နုနုရှိန်၏ တထွာ မကအောင်ရှည်လျားသည့် လိင်တံက လက်နှင့်ဆုပ်လို့ မနိုင်အောင်ကြီးထွားသည်။ ပိန်ပိန်းပါးပါး စန္ဒာတယောက်ဒီ လောက်ကြီးသည့် ဟာ ကြီးကို သူမ၏ပစ္စည်းလေးထဲသို့ ဝင် အောင်ဘယ်လိုသွင်းသနည်းဟု တွေးကြည့်ရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် ရင်တွေတဒိန်း ဒိန်း ခုန်လာသည်။အသက်ရွူရတာလည်း မမှန်တော့ဘဲ အလိုလိုမောလာ၏။ ကိုင်ကြည့်တာတောင် ဒီလောက် ဖြစ်ရလျှင် အထဲကိုသာထည့်လိုက်လို့ကတော့ အသက်ရွူရပ်သွားနိုင်သည်ဟု ထင်မိသည်။ မရည်ရွယ်ပါပဲ ဒေါ်နုနုရှိန်၏ လက်တဖက်က သူမ ပေါင်ကြားထဲရောက်သွားသည်။ ထမိန် အသားပျော့ပျော့ ပါး ပါးမှာ အတွင်းခံ လည်းမပါလို့ အရည်တွေရွဲနေသည့် ဖေါင်းဖေါင်းမို့မို့ ရတနာတွင်းကို တိုက်ရိုတ် နီးပါးစမ်းမိသည်။ ဘာကြောင့် အရည်တွေထွက်နေရသနည်းဟု တွေးရင်း ရှက်ရွံ့စွာဖြင့် လက် ထဲက ဟာကြီးကို အိတ်ထဲပြန် ထိုး ထည့်ပြီး သူ့နေရာ သူပြန်ထားလိုက်သည်။
စန္ဒာ့ အခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာသည့် ဒေါ်နုနုရှိန်၏ ခြေလှမ်းတွေက ယိမ်းယိုင်လေးလံနေသည်။ ခေါင်းတွေ က လည်း ရီဝေနောက်ကျိနေ၏။ “နုနု နေ မကောင်းဘူးလား” “ကောင်းပါတယ်” လမ်းမှာ တွေ့သည့် ဒေါ်အေးစိန်၏ အမေးကို တိုးတိမ်စွာဖြေလိုက်ပြီး ဒေါ်နုနုရှိန် အိပ်ခန်းထဲ ဝင် လာခဲ့သည်။ ကုတင်းဘေး မှန်တင်ခုံက မှန်မှာ အဆီပြန်နေသည့် မျက်နှာမသာ မယာနှင့် မိမိ ကိုယ်မိမိ ပြန်မြင်ရသည်။ “စိတ်ညစ်လိုက်တာ” ပါးစပ်က ဖွင့်ဟ ညည်းလိုက်မိသည်အထိ စိတ်ပျက်နေရပါသည်။ ဒီအရွယ်ရောက်မှ မဟုတ်မဟပ် ပစ္စည်းတခု၊ အကြောင်းအရာတခုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေရ သည့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်းနားမလည်ပါ။ အိပ် ယာပေါ်ခွေခွေလေး လှဲချလိုက်ရင်း လက်က ပေါင်ကြားကို စမ်းမိပြန်သည်။ စိုစွတ်သည့် အထိအတွေ့က ဒေါ်နုနု ရှိန်၏ ရင်ခုန်သံတွေကို မြန် စေပြန်၏။ စိတ်ပေါက်ပေါက်ရှိတာ နှင့် စိုနေသည့် အရည်တွေကို ထမိန်နှင့် ပွတ်ကာ သုတ်လိုက် ၏။ ပြောင်စင်သွားပြီဟု ထင်လိုက်မှ နားလိုက်သည်တွင် လူကလည်းမောနေသည်။ အမောဖြေနားနေရင်း မျက်လုံးကို မှိတ်ထားသော်လည်း ဒေါ်နုနုရှိန်၏ အာရုံက ပေါင်ကြားထဲ မှာပဲ ရှိနေသည်။ တချက်တချက်တွင် လိင်တံ အတုကြီးကိုလည်း မြင်ယောင်နေ၏။ ထိုအချိန် တွင် မိမိ၏ သဘာဝတွင်းလေး ထဲ မှာလည်း အရည်တွေ တစိမ့်စိမ့် ဖြစ်လာပြန်သည်ဟု ထင် မိသည်။ စိတ်ရွုပ်ရွုပ်နှင့် ထမိန်ကိုဖြေလျော့လိုက်ပြီး လက်နှင့်ထိုးစမ်းမိသည်။ လမ်းတဝက်မှာ တွန့်သွားသေးသော်လည်း စိတ်ကိုတင်းပြီး အောက်ကို ထိုးဆင်းလိုက် ရ၏။ ချော်ကျိကျိ နွုတ်ခမ်းသားတွေက နွုးညံ့လွန်းသည်။ အကွဲကြောင်းထိပ်က အဖုလေးကို ဖိမိသော အခါ ဒေါ်နုနုရှိန် တွန့်သွားသည်။ မိန်းမတွေ၏ အစေ့ ဆိုတာဒါကိုခေါ်ကြောင်း အရင်ထဲ က သိပေမယ့် တခါမှလက်နှင့် တို့ထိမ ကြည့် ဖူးပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်း ထိမိ တိုက် မိတာလောက်ပဲ ရှိသည်။ အဲဒီအခါတွေတုန်းက ဘယ်လိုမှ စိတ်ထဲ မှာမရှိခဲ့သည့်နေရာက အခု ကျမှ တို့ထိလိုက်သည်နှင့် ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်းထသွားရသည်။ “အာ …အင်” လက်ညိုးထိပ်ဖျားလေး နှင့် သုံးလေးကြိမ်ထပ်ပွတ်ကြည့်လိုက်မိပြီးနောက်တွင် ဒေါ်နုနုရှိန် ရင် ထဲက တလှိုက် လှိုက်တက်လာသည့် ဝေဒနာကြောင့် ပါးစပ်က ခပ်ဖွဖွလေး ညည်းလိုက်မိသည်။ ထိုလှိုက်မောဖွယ်ရာခံစားမွုက ဒေါ်နုနုရှိန်ကို ဖမ်းစားလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် အိပ်ယာပေါ်တွင် တစောင်းကွေးကွေးလေး လှဲရင်း အဖုလေးကို အဆက်မပြတ် ပွတ်နေမိသည်။ “အင်း …..အင်း …..အင်း…..အ….အား” လက်ချောင်းလေးတွေကိုရပ်တန့်လိုက်ဖို့ ဒေါ်နုနုရှိန်မှာ ခွန်အားမရှိတော့ပါ။
ရပ်တန့်ဖို့စိတ်ကူး လည်းပေါ်မလာပဲ ခံစားမွုနောက်ကိုသာ ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားမိသည်။ အားနေ သည့် လက်ဖြင့် ခေါင်းအုံး အစွန်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆွဲလိမ်ရင်း အော်ညည်းနေမိ၏။ ပေါင် ကြားဆီ ကနေတကိုယ်လုံးကို ပြန့်လွင့်တက်လာသည့် ဝေဒနာက မိန်းမူး ဖွယ်ကောင်းလွန်းလှ သည်။ ခံစားမွု ဒီနေမြင့်တက်လာသည်နှင့် အမျှ ဒေါ်နုနုရှိန်၏ အော်ညည်း သံက ပိုကျယ်လောင် လာသည်။ ဒါကိုလည်း ဒေါ်နုနုရှိန် မသိတော့ မျက်လုံးထဲမှာ တိမ်စိုင်တိမ်လိပ် တွေသာမြင် သည်။ တိမ်စိုင်တွေကြားမှာနိမ့်တခါ မြင့်တလှည့်ဖြင့် ညင်ညင်သာသာလေး ရွေ့လျားနေသလို စိတ်မှာ ခံစားရ၏။ “အီး ..ကောင်းလိုက်တာကွယ်……အား ….အင်း” ခံစားချက် အသစ်အဆန်းတခုက ဒေါ်နုနုရှိန်ကို အပြင်းအထန်ဖမ်းစားလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ခုနေ အနားကိုလူတ ယောက် ရောက်လာ ရင်တောင်ဒေါ်နုနု ရှိန်မသိတော့။ ဒါပေမယ့် သူမ၏ ရင်သားတွေ တင်းမာလာတာကိုတော့ သိသည်။ လှိုက်မောရခြင်း နှင့် အတူရင်က လည်းမွန်းပြီး ကြပ်နေသည်။ မတော်သည့် ဘရာစီယာ ကြပ်ကြပ်ကို ဝတ် ထားရသလို ရင်သားတွေက မလွတ်မလပ်နှင့် တမျိုးကြီး ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ခေါင်းအုံးစွန်း ကို ဆွဲ ထား သည့်လက်ကို ဖြုတ်ပြီး ရင်ဘတ်ကို ညှစ်မိသည်။ အင်္ကျီနှင့် ဘရာစီယာခံနေလို့ ညှစ်ရတာမကောင်းပါ။ ပိုပြီး လွတ်လပ်သွားစေရန် ကြယ်သီးတွေကိုပါ ဖြုတ်ချလိုက်ပြီး ဘရာ စီ ယာ ခွက်ကိုပါ အပေါ်ပင့်တင်လိုက်မိ၏။ ဒီတော့မှ လွတ်လပ်စွာဆုပ်နယ် နိုင်သွား သည်။ ကြက်သီး ထသလို တင်း မာနေသည့် နို့သီးဖျားကလေး ကို ညှစ်ရင်း အောက်ကို ပွတ်ရတာ ပိုထိသည်ကို သွားတွေ့၏။ “အား …ဘယ်လို ကြီးလဲ” ခံစားမွု ရေချိန်က တရိပ်ရိပ် နှင့် မြင့်တက်လာသည်။ သူမ၏ ရတနာတွင်းလေး ထဲက ကြွက်သား တွေ ရွုံ့ချည်ပွ ချည် ဖြစ်လာတာကိုလည်း ဒေါ်နုနုရှိန်သိနေ၏။ “အောင် မယ်လေး….” လေထဲသို့ လွင့်မြောက်တက်သွားပြီးချာချာလည်၍ ပြန်ကျလာသလို စိတ်ထဲမှာခံစားလိုက် ရပြီးနောက်တွင်တော့ ဒေါ်နုနုရှိန် ပျော့ခွေကျသွား၏။ သူမ၏ တကိုယ်လုံးမှာ အားအင် လုံးဝ မရှိတော့ဘဲ ၀ါဂွမ်းစလေး တခု လေထဲမှာ လွင့်မျောနေသလို တရိပ်ရိပ်နှင့် လွင့်နေ၏။ မော လည်းအရမ်းမောနေသည် အသက်ကိုပင် ဖြေးဖြေးလေး ရွူ နိုင်သည်။ အစေ့ကို လည်း မပွတ် နိုင်တော့၊ ရင်သားကိုလည်း မညှစ်နိုင်တော့။ “နုနု ….အိပ်ပျော်နေလား” တငြိမ့်ငြိမ့် တမူးမူးခံစားမွု တွင်မိန်းမောနေခိုက် နောက်ကျောဖက်က ဒေါ်အေးစိန်၏ အသံကြောင့် အိပ်မက်က နိုး သလို ဆတ်ကနဲဖြစ်သွားသည်။ ကံကောင်းထောက်မ စွာဖြင့် ဝင်ပေါက်ကို ကျော ပေးထားလို့ အခြေအနေ အရပ် ရပ် ကို ဒေါ်အေးစိန်မမြင်နိုင်ပါ။
တံခါးကို ချက်မချခဲ့ မိခြင်း နှင့် ဒေါ်စိန်ရီ ဝင်လာတာကို မသိလိုက်ခြင်း အတွက် ကိုယ့်ဖာသာ ကျိတ်၍ အပြစ်တင်ရင်း ချော်လဲ ရောထိုင် အိပ်နေသလို ဆက်ပြီးဟန်ဆောင်နေလိုက်သည်။ ပွင့်ဟ နေ သည့်ရင်ဘတ် ကိုလည်း လက်နှစ်ဖက်ယှက်ပြီး ကွယ်ထားလိုက်၏။ ဒေါ်အေးစိန်ကလည်း ဒီဖက်ကို မလာပါ အိပ် နေသည်ထင်ပြီး ပြန်လှည့်ထွက်သွား၏။ တခါးပိတ်သံကြားလိုက်ပြီးသည့်တိုင် ဒေါ်နုနုရှိန် ပြန်မထသေးပါ။ စိတ်ချရသည့် အချိန်ရောက် အောင်စောင့် နေမိ၏။ မိမိ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သနည်းဟု အံ့သြစွာပြန်တွေးရင်း အရင်တုန်းက ကြား ဖူးရုံသာကြားဖူးပြီး တခါမှ မ လုပ်ဖူးသည့် မာစတာဘေးရှင်းခေါ် တကိုယ်ရေအာသာဖြေခြင်းကို ပြုလုပ်မိခဲ့ပြီဟု သိလိုက်သည်။ ဒီအတွက် ရှက်စိတ် မဖြစ်မိသည်ကိုလည်း အံ့သြနေမိသည်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူဘဝ တုန်းက ခပ်ဟော့ဟော့နှင့် ပွင့် လင်းသည့် သူငယ်ချင်းတယောက်က သူမ ဒီလိုလုပ်တတ်ကြောင်း ဝန်ခံဖူးတာကို သတိရသည်။ အခုတော့ ထိုသူငယ်ချင်းမလည်း အိမ်ထောင်ရက်သားကျပြီး နောက်တနှစ်ဆို သမီးပင် တက္ကသိုလ် ရောက်တော့မည်။ ဒေါ်နုနုရှိန်ကတော့ အခုမှ ဒီခံစားမွုကို မြည်းစမ်း ဖြစ်၏။ နည်းနည်းကြာတော့မှ အိပ်ယာက ထပြီးတံခါးကို ချက်သွားထိုးလိုက်၏။ ဘရာစီယာခွက်ကို နေရာ ပြန်ချပြီး အကျ င်္ီကြယ်သီးတွေပြန်တပ်ရင်း ဒူးတွေ ချောင်ချင်သလိုလိုဖြစ်နေ တာကို သတိထား မိ သည်။ ထမိန်ကို လှည့် ဝတ်လိုက်တော့ တင်ပါး တခြမ်းဖက်မှာ ရွဲရွဲစိုနေတာတွေ့ရသည်။ တ စောင်းကွေးကွေး လေးလုပ်နေရင်း အရည် တွေက အောက် ဖက်ရောက်နေသည့် အခြမ်းကို စီးကျ တာဖြစ်ရမည်။ လက်နှင့် စမ်းကြည့်လိုက်တော့ ပေါင်ရင်း ခွဆုံသာမက စအိုဝ မှာပါ ရွဲ နေတာတွေ့လိုက်ရသည်။ ဝတ်လက်စ ထမိန်နှင့်ပဲ အရည်တွေကို ပြောင်စင် အောင် သုတ်လိုက်ပြီး ထမိန်အသစ် အထည်လဲလိုက်ရသည်။ မမျှော်လင့်ဘဲ ကြုံတွေ့လိုက်ရသည့် အတွေ့ အကြုံသစ်ကြောင့် ဒေါ်နုနုရှိန် စိတ်ထဲမှာ တမျိုးတမည် ဖြစ်ရသည်က တော့ အမှန်ဖြစ်သည်။ ဒီရွယ်ရောက်မှ ဒီလိုလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု လုံးဝ မထင်ခဲ့မိပါ။ သွေးသားတက်ကြွသည့် ပျို ရွယ် ချိန်တွေတုန်းက ပင်စိတ်မကူး ခဲ့သည့် အရာကို လုပ်ခဲ့မိသည်။ အရင်က ဒီလိုလုပ်ရတာ ရှက်စရာဟု တွေး ခဲ့ မိသော်လည်း အခုတော့ မတွေးချင်သလိုဖြစ်နေသည်။ ဘယ်သူမှမသိ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မထိခိုက်သည့် အဖြစ် မျိုးလို့သာ သတ်မှတ်မိသည်။ ကိုယ့်စိတ်က ဘယ်လိုဘာကြောင့် ဖြစ်ရသည်ကိုတော့ သိချင်မိသည်။
ပဲစေ့တခြမ်းလောက်သာ ရှိသည့်အသားဖု လေးတခုက လူတကိုယ်လုံးကို သိမ့်သိမ့် လူးအောင်စွမ်းဆောင် နိုင်သည့် အဖြစ်က အံ့သြစရာလည်း ကောင်းလှ သည်။ စန္ဒာ၊ သက်မာနှင့် ပပ တို့ကတော့ သူတို့ဆရာမ သူတို့ကြောင့် အတွေ့အကြုံသစ်၊ ခံစားမွု အသစ်တွေ ရရှိ သွားရတာကို သိကြမည် မထင်ပေသိရင်လည်း အရမ်းအံ့သြကြမှာသေချာသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် နောက်နေ့တွေမှာလည်း စန္ဒာ့အခန်းကို ရက်ခြားလောက်ရောက်သည်။ စန္ဒာ့ အတုကြီးကို လည်း တွေ့ မြဲနေရာမှာတွေ့သည်။ တခါတလေ ကျွတ်ကျွတ်အိတ် နှင့် တခါ တလေ လည်းစက္ကူနှင့် ပတ်ထားသည်။ တခါတရံ လည်း စန္ဒာ အလုပ်မသွားခင် စိတ်ဖြေသည်ထင်သည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ရောက်သွားသည့် အချိန်မှာ အဆီတဝင်းဝင်း အရည်တစိုစို နှင့် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် တွေ့ရသည်။ အဲလိုနေ့တွေ ဆိုရင်တော့ဒေါ်နုနုရှိန် ကိုင်မကြည့်တော့ပါ။ တနေ့မှာတော့ စန္ဒာ့ အခန်းထဲ ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝင်ကြည့် နိုင်ဖို့ အကြောင်း တခုဖန်လာသည်။ ညီမ ဖြစ် သူ ၏ မင်္ဂလာပွဲ ကိုတက်ရောက် ရန်စန္ဒာ အိမ်ခနပြန် ဖို့ ဖြစ်လာ၏။ စားပွဲပေါ်လာတင်သည့် စာအိတ်ကို ကိုင်ကြည့် ရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် အံသြသွားသည်။ အိတ်ပုံစံက မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာနှင့်တူနေသည်။ မော့ကြည့်လိုက်သည့် ဒေါ်နုနုရှိန် ကို စန္ဒာက ပြုံးပြ လိုက်ရင်း “ဆရာမ အထင် မကြီးနဲ့နော်၊ ဒါညီမလေး မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာ” “အော် ….ဘယ်တော့တုန်း” “နောက်အပတ်တနင်္ဂနွေ ဆရာမ၊ အဲဒါပြန်ဖို့ ဆရာမကိုလဲ ခွင့်တိုင်တာ” စန္ဒာ့ နေရပ်က မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအစွန်ကပြည်နယ် တခုမှာဖြစ်သည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် မတက် ရောက်နိုင် မှန်းသိ သိ နှင့် ဖိတ်စာပေးခြင်းက သူမ ပြန်မည့်အကြောင်းကို ခိုင်လုံသော အထောက် အထားပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “စန္ဒာပြန်မှာပေါ့” “ဟုတ်ကဲ့၊ နောက်အပတ်ထဲ ပြန်မယ်၊ ရုံးကလဲ ခွင့်ပေးတယ်လေ၊ ပီးတာနဲ့ ပြန်လာမှာပါ၊ စောပြီး သွားလိုက် မယ်လေ” အနားကို ရောက်လာသည့် ဒေါ်အေးစိန်က ဖိတ်စာကိုလှမ်းယူပြီးဖွင့်ဖတ်ကြည့်သည်။ “နောက်ကကားတွေ တောင်ကျော်ကုန်ပါပကောလား စန္ဒာရဲ့” “တယောက်ထဲပဲ ကောင်းပါတယ် ကြီးကြီးစိန်ရယ်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ နေချင်တော့တယ်၊ ဆရာမ လိုပဲ အ ပျိုကြီးလုပ်မလားလို့ …ဟဲ..ဟဲ” စန္ဒာက အိမ်ထောင်မပြုဘဲ ဟို အတုကြီးနဲ့သာပျော်မွေ့တော့မည်ထင်သည်။ သူမကို အကြောင်းပြုပြီး ဒေါ်နုနုရှိန် အတတ်ကောင်းတွေ တတ်ခဲ့ရသည်ကိုတော့ စန္ဒာသိမည် မဟုတ်ပါ။ အခုဆိုရင် လက်နှင့် ပွတ်ပြီးစိတ်ဖြေသည့် အလုပ်ကို ဒေါ်နုနုရှိန် တော်တော် ကျွမ်း ကျင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ပါတိုင်းလုပ်ဖြစ်၏။
လုပ်ပြီးတိုင်း နွမ်းနယ် ခြင်း ဒါဏ်ကို ခံစားရသော် လည်း စိတ်ထ လာရင် မနေနိုင်ပါ။ ဒေါ်အေးစိန် တို့ကတော့ ခုတလောဒေါ်နုနုရှိန် အခန်း အောင်းလွန်းသည်ဟု ထင်ကြမည်။ ရေမချိုးခင်တော့ အမြဲလိုလုပ်ဖြစ်သည်။ ရေချိုးဖို့ အ ဝတ်တွေချွတ် တိုင်း စိတ် က တဖျင်းဖျင်း ထလာ၏။ မှန်ထဲမှာ အဝတ်မပါသည့် ကိုယ့် ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်ပြီး လုပ်ရသည်မှာ အရသာ တမျိုး ဖြစ်သည်။ ဒီအကြောင်းတွေ ပြန်တွေးမိ ရင်လည်း အရည် တစို စိုဖြစ်ရပြီး မနေနိုင်ပဲ လုပ်မိပြန်သည်။ တနေ့ ဘယ် နှစ်ခါ လုပ်မိသည်ကိုတောင် မသိတော့ပါ။ အရင်တုန်းက ညဖက်ဆို ဒေါ်နုနုရှိန် ဂုဏ်တော်ပုတီးစိတ်တတ်သည်။ ခုတော့ မစိတ်ဖြစ်တော့ပါ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သာယာမွုလေး ရှာပြီး နွမ်းလျစွာအိပ်မောကျသွားရခြင်း ကို သဘောကျနေမိသည်။ ဒါလုပ်ပြီးမှ ပုတီးစိပ်လို့ လည်း မကောင်း သလို၊ ပုတီး စိပ် ပြီးမှ ဒါလုပ်ရင်လည်း မသင့်ဟု ထင်မိသည်။ ထို့ကြောင့် ပုတီး မစိပ်ဖြစ်တော့ပါ။ အိပ် ယာထဲ ရောက်သည်နှင့် ထမိန်ကိုလှန်ကာ အားရပါးရပွတ်ပြီးမှ အိပ်ရတာပိုပြီး နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ပျော်၏။ ဒီအဖြစ် ကို သွယ်ဝိုက်ပြီး ရောက်စေခဲ့သူကတော့ စန္ဒာလို့ပဲ ဆိုနိုင်ပါမည်။ “စန္ဒာပြန်မယ့် နေ့ပြောလေ၊ တို့လက်ဖွဲ့ပေးလိုက်မယ်” “ဆရာမ ကလဲ မဟုတ်တာ၊ သမီးက ပြန်မယ့်ကိစ္စခွင့်တိုင်ဖို့ သက်သေပြတာပါ၊ အထောက်အထား ပြရမယ့် စည်းကမ်း အတိုင်းလုပ်တာပါ။ လက်ဖွဲ့တော့ မပေးပါနဲ့၊ အားနာစရာ ကြီး” “အော် …စန္ဒာနဲ့က မိသားစုတွေလိုဖြစ်နေမှပဲ၊ မပေးလို့ ကောင်းမလား၊ ဘာမှ မပြောနဲ့တော့” စန္ဒာနှင့် ပြောရင်း အောက်က အရည်စိုချင်သလိုလို ဖြစ်လာတာသတိထားလိုက်မိသည်။ ဒီနေ့ အတွက် တကြိမ်မှ မလုပ်ရသေးပါ။ ခံစားမွုအရသာကို သွေးသားတွေက တောင်းဆို လာသည့် အခါ စကားကိုမြန်မြန် ဖြတ်ပြီး ဒေါ်နုနု ရှိန် အခန်းထဲဝင်လာခဲ့သည်။ ဒီလို လုပ်ရသည့် အရသာကို မူးယစ်ဆေး စွဲသလိုစွဲနေပြီ မှန်းတွေးမိသော် လည်း ဆက် မလုပ်ဘဲ မနေနိုင်ပါ။ အခန်းတံခါးကို ချက်ထိုးပြီးသည်နှင့် ဖိတ်စာလေးကို စားပွဲပေါ်ပစ်တင်လိုက်ပြီး ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ ကိုယ်လုံးတီးနှင့် လုပ်ရတာကပိုကောင်းကြောင်း ဒေါ်နုနုရှိန် သိနေပါပြီ။ ချွတ်ပြီးသည်နှင့် မှန် တင် ခုံဖက်သို့ လှည့်ကာ ပေါင်ဖြဲပြီး ကုတင်ပေါ် မှာ ထိုင်လိုက်သည်။
အကွဲကြောင်းလေး အဝကို လက်ကရောက် သွားသည်နှင့် အရည်တွေက တစိမ့် စိမ့်စိုထွက်လာ၏။ “နင်က အသားဖြူတယ်၊ အရည်ရွမ်းမှာ” ဟု ကျောင်းတုန်း က သူငယ် ချင်း မတယောက်ပြောတာကို ပြန်သတိရလိုက် မိရင်း အစေ့လေး ကို လက်ခလည်ထိပ်နှင့် ခပ်ဖိဖိ လေးပွတ်လိုက်၏။ ယောက်ျားတွေနှင့် ပတ်သက်ရင် ဒေါ်နုနုရှိန် က ဘာမှသိဖူး၊ မြင်ဖူးသည် မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် စန္ဒာ့ အခန်းထဲက အစစ်နှင့် အလွန်တူသည်ဟု ဆိုသော ဟာကြီးကိုသာ မျက်စိ ထဲမြင်ယောင်ပြီး လုပ်ရသည်။ နေ့တိုင်းနီးပါး သွား ကိုင်ကြည့်နေလို့ အရွယ် အစားနှင့် ပုံပန်းသဏ္ဍန်ကို အာရုံထဲမှာ အလွတ်ရနေပြီဖြစ်သည်။ သံခမောက်ဆောင်း ထားသလို ထိပ်မှာလုံးပြီး အရစ်လိုက်ကားနေသည့် ခေါင်း။ ဖုထစ်နေသည့် သွေးကြောတွေ၊ လက်တဆုပ်နှင့် မနိုင်သည့် လုံး ပတ်။ မျက်လုံးထဲမှာ ပြတ်ပြတ်ထင်ထင် မြင်ယောင်ရင်း အံလေးခဲကာ ဖိ၍ဖိ၍ ပွတ်မိသည်။ “အား …ဟာ…”စန္ဒာ အိမ်ပြန်သွားပြီး နောက်တနေ့ မှ ဒေါ်နုနုရှိန် စန္ဒာ့ အခန်းကို ရောက်သည်။ အရင်တရက်က အပေါ်ထပ်က မိန်းကလေး တယောက်နေမကောင်းလို့ ဘယ်မှမသွားဘဲ အဆောင်မှာပဲရှိနေသည်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်နုနုရှိန် ဟို ပစ္စည်းကြီးကို သွားကိုင် မကြည့်ဖြစ်တော့။ ကိုယ့်အခန်းထဲမှာပဲ ကိုယ် ဒါကြီးကို မြင်ယောင်ပြီး စိတ်ဖြေလိုက်ရ သည်။ နေမကောင်းသည့် ကလေးမ ကျောင်းပြန်တက် နိုင်သည့်နေ့ကျမှ လုပ်စရာ ကိစ္စတွေ ပြီးသည်နှင့် စန္ဒာ့ အခန်းထဲသို့ မယောင်မလည် နှင့်ရောက်လာခဲ့၏။ တခန်းလုံးရှင်းလင်းနေသည်။ တန်းတွေပေါ်မှာ လည်း အဝတ်တွေ မရှိတော့။ အိပ်ယာကိုလည်း ခြင်ထောင်က အစ ဖြုတ်သိမ်းသွားသည်။ မွေ့ယာကိုလည်း ခေါက်လိပ်ထား သည်ကို မြင်လိုက်ရလို့ ဒေါ်နုနုရှိန် ရင်ခုန် သွား သည်။ လိပ်ထားသည့် မွေ့ယာကို လှန်ကြည့်ဖို့မလိုပါ။ အိပ်ယာသိမ်းထားခဲ့မှာ ဖြစ်လို့ သူ့ဟာကြီးကို စန္ဒာ တနေ ရာရာမှာ သိမ်းခဲ့ မှာသေချာသည်။ စားပွဲအံဆွဲကို ဖွင့်ကြည့်တော့ ဘာမှမရှိ။ ဘီရိုကတော့ သော့ခတ်ထားသည်။ မွေ့ယာလိပ်ထဲမှာ ရှိမလားဟု ဖြေကြည့်သေးသော်လည်း ခေါင်းအုံးနှင့် စောင်တွေပဲ အထဲမှာရှိသည်။ စန္ဒာယူသွားတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ခုခေတ် ခုခါက ခရီးသွားရင် လမ်းမှာ စစ်ကြဆေးကြရှာဖွေကြတာတွေ ရှိ သည်။ လူကြားထဲမှာ အရှက်မကွဲရအောင် စန္ဒာ လူနှင့် တပါထဲ ယူသွားလိမ့်မည် မထင်ပါ။
ဘီရိုထဲမှာ သို့ မဟုတ် သေတ္တာတွင်း မှာထည့်သိမ်းခဲ့တာပဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ စန္ဒာပြန်လာမှသာ သူမ ကိုရင်ခုန်စေသည့် အချောင်း ကြီး ကို ပြန်မြင်တွေ့ရပေတော့မည်။ စိတ်ထဲ တခုခုလိုနေသလို ခံစားရသည့်အတွက် ရေချိုးခါနီး စိတ်ဖြေတော့ တော်တော် နှင့် ကျေနပ်မွုမရ။ အဲဒါကြီးကို လောလောလတ်လတ် မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီ ဆိုရင်စိတ်ကပိုပြီး တက်တက် ကြွကြွ ရှိသည်။ အခုတော့စိတ်အားကလျော့နေလို့ အစေ့ ကို ပူလောင်ကျိန်းစပ် လာသည်အထိ ပွတ်ရသည်။ ပြီး တော့ လည်း အရမ်းပင် ပန်းရသည်။ ရေချိုးပြီး ထွက်လာသည့်တိုင် ပေါင်ကြား ထဲက တမျိုးကြီး ဖြစ်နေ၏။ စိတ်မရွင်လို့ အပြင်တောင် မထွက်ချင်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အေးစိန် နှင့် ဈေးကိုသွားဖို့ ရှိတာကြောင့် အိမ်ဖေါ်ကလေး မ တယောက် ကိုခေါ်ပြီး ကားနှင့် ထွက်ခဲ့ရသည်။ အပြင်ရောက်တော့မှ စိတ်က ကြည်ကြည်လင်လင်ပြန်ဖြစ်လာ သည်။ အပြင်သိပ် ထွက်လေ့ ထွက်ထ မရှိသူလည်း ဖြစ်လို့ မြင်သမျှက စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းဆန်းနေသည်။ ဒေါ် အေးစိန် နှင့် ကောင်မလေး ကိုဈေးမှာ ချပေးခဲ့ပြီးနောက် တနာရီလောက်နေရင် ပြန်လာမည်ဟု ပြောပြီး မရောက် တာကြာသည့် သူငယ်ချင်း တယောက်အိမ်ဖက်ကို မောင်းလာခဲ့၏။ သူငယ်ချင်းနေသည့် တိုက်ခန်းက ဈေးနှင့် သိပ်မဝေးပါ။ ငါးမိနစ်လောက်ပဲ မောင်းရသည်။ လမ်းဘေးမှာကားရပ် ပြီး လှေခါးထစ်တွေ တက်ရင်းနှင့် စိတ်မလုံမလဲ ဖြစ်ပြီးနောက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ နောက်ကနှစ်ထစ်သုံးထစ် အကွာ မှာ ကောင်လေးတယောက်ပါလာသည်။ အသက်နှစ်ဆယ် အစိတ်လောက်တော့ရှိမည်။ လှေခါးတက်နေ သည့် ဒေါ်နုနုရှိန် ၏ နောက်ပိုင်း အလှကို နောက်ကနေ အားပါးတရကြည့်ပြီး လိုက်လာမှန်းသိသာသည်။ လှည့် ကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာ လွဲသွား၏။ ဒေါ်နုနုရှိန် လည်း ဘယ်လိုဆက်တက်ရမှန်း မသိတော့ပါ။ ဒေါ်နုနု ရှိန် ရပ် နေတော့ ကောင်လေး ကလည်းရပ်နေသည်။ “ငါ့ သားလောက်ရှိတာပဲ” ဟု စိတ်ကို တင်းပြီး ဆက်တက်ခဲ့ရ သည်။ ကိုယ်တော်လေး ကလည်း အရောင်လက်နေသည့် မျက်လုံးတွေ နှင့် ကပ်ပါလာ၏။ ခြေလှမ်းလိုက်လို့ တင်ပါးက တုန်ခါသွားတိုင်း ဒေါ်နုနုရှိန် စိတ်မလုံမလဲ ဖြစ်ရသည်။ ကံကောင်းထောက်မ စွာဖြင့် သူငယ်ချင်းနေသည့် သုံးလွာက အရင်ရောက်သည်။ ကျေးဇူးရှင်လေး ကတော့ ဆက် တက်ရမည် ထင်သည်။
ဒါတောင်မှ အခန်းဝမှာ ရပ်နေသည့် ဒေါ်နုနုရှိန် နားက ဖြတ်သွားရင်း “မမ က အ ရမ်းလှတာပဲဗျာ” ဟုလုပ်သွားသေးသည်။ အရွယ်တင်နုပျိုသည့် ဒေါ်နုနုရှိန်ကို သူ့ထက် အလွန်ဆုံးငါးနှစ်လောက် ပဲ ကြီးမည့် မမကြီး အရွယ်လို့ ထင်နေပုံရသည်။ မကြားသလို လုပ်ပြီး လူခေါ်ခေါင်းလောင်းကို နှိပ်လိုက်သည်။ ကောင်လေး က လှည့်ကြည့် လှည့် ကြည့် နှင့် လုပ်ရင်းဆက်တက်သွားပါသည်။ “ဟာ ကြာလိုက်တာ …ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ” အထဲက အသံလည်း မကြားရဘဲ တံခါးလည်း လာမဖွင့်သဖြင့် ဒေါ်နုနုရှိန် နောက်တကြိမ်ထပ်နှိပ်လိုက်သည်။ ဒါ လည်း တုန့်ပြန်သံ မကြားရ။ လူမရှိတာလည်း မဖြစ်နိုင် တံခါးကို အပြင်ကနေ သော့ခတ်မထား။ ဒေါ်နုနုရှိန်၏ သူ ငယ်ချင်းက ခါတိုင်းဆို အိမ်မြဲတတ်သူဖြစ်သည်။ စိတ်မရှည်တော့ သဖြင့် အိတ်ထဲက ဖုန်းထုတ်ပြီး သူငယ်ချင်း ဟန်းဖုန်း ကို လှမ်းခေါ်လိုက်မိသည်။ ဒါကို လည်းတော်တော် နှင့် မကိုင်ပါ။ အကြာကြီး ခေါ်ပြီးမှ ထူးသံကြားရ သည်။ “ဘာလဲ နုနုရဲ့” မောပန်း နွမ်းနယ်နေပုံရသည့် တဖက်က အသံကို ဒေါ်နုနုရှိန် သတိမထားလိုက်မိပါ။ “ဘာလဲ ဆိုတော့ ငါ နင့်တံခါး ဝမှာ ရောက်နေတာပေါ့ ဟဲ့” “အာ …ဘဲလ် တီးတာ နင်လား” “ဟုတ်တယ်” “ဒါဆို လာပြီ၊ လာပြီ” ဖုန်း ကျမသွားခင်လေးတွင် “ကို ခန ဖယ်ဦး” ဟုပြောသံကြားလိုက်ရသည်။ လာပြီ ဆိုသော်လည်း တော်တော် နှင့် မလာ။ ခန ကြာမှ တံခါးပွင့် သွားသည်။ ရွုပ်ပွနေသော ဆံပင်တွေ၊ အဆီပြန်နေသည့် မျက်နှာ နှင့် တီရှပ်ပွ ကြီးကို ကပိုကရို ဝတ်ထားသည့် သူငယ်ချင်းမ ကို စိတ်မသက်သာစွာ တွေ့လိုက်ရသည်။ ကြည့်ရတာ အိပ်ပျော် နေရာက ထလာပုံရသည်။ ဒီ သူငယ်ချင်းမ က အပျိုကြီး အဖြစ်ကျန်နေခဲ့သည့် ဒေါ်နုနုရှိန်မှ အပ အိမ်ထောင်ကျ သွားသူတွေထဲမှာ နောက်ဆုံးမှ အိမ်ထောင်ပြုသူဖြစ်သည်။ အိမ်က မိဖတွေသဘောတူပေးစားသည့် သူနှင့် ယူ လိုက်သည်မှာ လေးငါး ခြောက်နှစ်လောက်ပဲ ရှိဦးမည်ဟု ထင်သည်။ အိမ်ထောင် မပြုခင်အထိ အပျိုကြီးချင်း တော်တော် လေး တွဲဖြစ်ခဲ့သည်။
“နင် အိပ်နေတာလား” “အေး ..ဟုတ်တယ်” “ဒါဆို ငါ့ကြောင့် နင် အိပ်ရေး ပျက်သွားပြီပေါ့” “ရပါတယ် ဟာ၊ နင် နဲ့က တခါတလေမှ တွေ့ကြတဲ့ ဥစ္စာ” စကားပြောရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် နှာခေါင်းထဲမှာ အနံ့ တခုကိုရသည်။ ထိုအနံ့က ထူးခြားသည်။ ဒါ့ အပြင်ဘာနံ့ဆိုတာ လည်း သိနေ၏။ မိန်းမ အင်္ဂါက ထွက်သည့် အရည်နံ့၊ အရင်က ဆို ဒီ အနံ့ ကို သိမှာ မဟုတ် အခုတော့ ဒေါ်နု နုရှိန် နှာခေါင်းက ကောင်းကောင်းသိနေပါသည်။ “နင့်ယောက်ျားကော” “အိပ်နေတယ်လေ” “ဒါဆို ငါ အချိန်ကောင်းကြီး ရောက်လာတာပေါ့ ဆောရီးဟယ်” “အောင်မာ အပျိုကြီးက ဒါတွေတတ်နေတယ်ပေါ့၊ ကိုရေ …. လာပါဦး ….နုနု ကမေးနေတယ်” အတွင်းဖက် ခန်းကို လှမ်းခေါ်လိုက်တော့ သူမ၏ ယောက်ျားထွက်လာ၏။ သူကလည်း အိပ်မွုန်စုံမွား ဖြင့် ကပို ကရို ရှိသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် စိတ်ထင်လို့လား မသိပါ သူ့ ပုဆိုးက ပေါင်ခွဆုံတွင် ဖေါင်းနေ၏။ သို့သော်လည်း ဒေါ် နုနုရှိန် ကိုမြင်လိုက်ရသည့် အခါ ရီဝေနေသည့် မျက်လုံးတွေ တောက်ပသွားကြသည်။ အမှန်တော့ ဒေါ်နုနုရှိန် ကို မဟုတ် ဒေါ်နုနုရှိန် ၏ ဖြူစင်ဝင်းမွတ်သည့် ခြေတံတွေလို့ ဆိုရမည်။ သူငယ်ချင်း နှင့် စကားပြောနေတာဆိုတော့ ခြေချိတ် ထိုင်လိုက် သည့် ထမိန်စကပ် အကွဲကြား ကနေ အပြင်ကို ထွက်နေသည့် ခြေသလုံး နှင့် ပေါင်တဝက်ကို အထူးတလည် မဖုံး ဖိပဲ နေခဲ့သည်။ ခုတော့ ဘသားချော မျက်လုံးတွေ အရောင်လက်သွားလို့ မသိမသာလေး အထိုင်ပြင်ရင်း ဖုံး လိုက်ရ၏။ ဒေါ်နုနုရှိန်၏ သူငယ်ချင်း ကတော့ ခင်ပွန်းသည်ကို တပ်မက်ရီဝေသည့် အကြည့်နှင့်ကြည့်နေသည်လို့ ထင်မိ သည် ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ကို ယောက်ျားက ဘယ်လိုကြည့်နေတယ် ဆိုတာကို မသိရှာပေ။ ရနေသည့် အနံ့ နှင့် သူငယ်ချင်း၏ အမူအရာကြောင့် စောစောက သူတို့ ချစ်တင်းနှောနေကြသည် ဆိုသည့် အထင်ပို ပြီးခိုင်မာသွား ရသည်။ ယောက်ျားတွေက ဒီလိုပဲထင်သည်။ ခုနကောင်လေးကတော့ ငယ်သေးသည့် အပြင် ဒေါ်နုနုရှိန် ဘယ်သူဘယ်ဝါ မှန်း မသိလို့ စိတ်ထဲဘယ်လိုမှမနေသော်လည်း ဇနီးသည်၏ သူငယ်ချင်းမှန်း သိသိနှင့် တပ်မက်သည့် အရိပ်အ ယောင်ပြတာကတော့ လွန်သည်ဟု ထင်မိသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန်၏ သူငယ်ချင်းလည်း အပျိုဘဝက လှသင့်သ လောက်လှပါသည်။ အခုလည်း ကလေးမမွေးသေးသည့် အတွက် အလှအပတွေ ကျန်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဒါတောင်မှ မိန်းမ ကိုဘေးမှာထားပြီး သူငယ်ချင်းကို ကြည့်ချင်သည့် ယောက်ျားကို ဒေါ်နုနုရှိန် နားမလည်ပါ။
အိမ် ထောင်မပြုတာ ကောင်း၏ ဟုပင် အတွေးဝင်မိသည်။ သူငယ်ချင်းမ က နောက်ဖေးမှာ အအေး သွားဖျော်နေချိန် တွင်ဒေါ်နုနုရှိန် ၏ ပေါင်တွေ၊ တင်နှင့်ရင်တွေ ကို စေ့ စေ့ စပ်စပ် မသိမသာကြည့်နေတာကို လည်းထပ်မံတွေ့ရသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ထင်သည့် အတိုင်းဆိုလျှင် သူမ ရောက်လာချိန်မှာ သူတို့လင်မယား နှစ်ယောက် ကာမဆက်ဆံနေကြတာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုရမ္မက်တွေ မသေ သေး လို့ပဲ လှပ သည့်ဒေါ်နုနုရှိန် ကို ပစ်မှားနေတာ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု တွေးမိသော အခါ လာချပေးသည့် အအေး ကို ကမန်းကတန်းသောက်ပြီး ဒေါ်နုနုရှိန် ထိုင်ရာက ထလိုက်သည်။ “ဟဲ့ နင်ကလဲ လာတုန်းကလာ ပြီး ပြန်ချင်တော့လည်း ချက်ချင်း” “ဒေါ်အေးစိန် တို့ကို ဈေးမှာထားခဲ့တယ်၊ ပြန်ကြိုရဦးမယ်၊ နင်နဲ့ မတွေ့တာကြာလို့ ပတ်လာတာ” “အော် …ဒါဆို လဲ နောက် ကို အေးအေး ဆေးဆေး တရက်လာဦး” “အေးအေး” တံခါးဝ အထိ လိုက်ပို့သည့် သူငယ်ချင်းကို ကပ်ပြီးခပ်တိုးတိုးမေးမိသည်။ “အခုန နင်တို့ ဟိုဒင်းလုပ်နေကြတာမဟုတ်လား” “နုနု၊ အပျိုကြီးက အပျိုကြီးလိုနေ၊ ပေါက်ကရမပြောနဲ့” “အချင်းချင်း ပဲ ဟာ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား၊ အမှန်အတိုင်း ပြော” “ဒီအပျိုကြီးတော့ ဒီနေ့ ဘာဖြစ်လာတယ်မသိဘူး၊ သွားသွား” “သွားမယ်၊ သွားမယ်၊ နင်တို့ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်လို့ရအောင် ငါက ပြန်ပေးတာ၊ သိပလား၊ ခုန ဖုန်းထဲမှာ ငါကြား လိုက်ပါတယ်၊ ကို …ခန ဖယ်ဦးတဲ့ ..ဟဲ ဟဲ” ရဲရဲ နီသွားသည့် သူငယ်ချင်းမျက်နှာက ဒေါ်နုနုရှိန်၏ ထင်မြင်ချက်မှန်ကန်ကြောင်း ဖေါ်ပြနေသည်။ အလိုက်တသိ စောပြီး ထွက်လာခဲ့ရ၍ ဈေးမှာ ဒေါ်အေးစိန်ကို နာရီ ဝက်လောက် ကားထဲမှာထိုင်စောင့်လိုက်ရသည်။ ပအခု လောက် ဆိုရင်သူငယ်ချင်း လင်မယားအိပ်ယာပေါ်ပြန်တက်ပြီး ချစ်ပွဲဝင်နေကြလောက်ပြီဟု တွေးမိသည့်အခါ ဒေါ်နုနုရှိန်၏ စိတ်တွေ မရိုးမရွဖြစ်လာသည်။ သူမ ကတယောက်ထဲ ကားထဲမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရချိန် တွင် သူ ငယ်ချင်းကတော့ အိပ်ယာပေါ်မှာ လောကစည်းစိမ် ယူနေလိမ့်မည် ဟုလည်းမလိုတမာတွေးနေမိသည်။ ဒေါ် အေး စိန် ကလည်း တပတ်တခါလောက်မှ လိုတာစုဝယ်ရတာ ဖြစ်လို့ တော်တော်နှင့် မလာပါ။ လွတ်လတ်သော၊ လှ ပ ပြီး ရဲတင်းစွာဝတ်စားဆင်ယင်ထားကြသော မိန်းမငယ်လေးတွေ ဒေါ်နုနုရှိန် ကားဘေး ကနေ ဖြတ်ပြီးသွားလာနေ ကြသည်။ တချို့ကတယောက်ထဲ၊ တချို့ကချစ်သူကောင်လေး နှင့် တချို့ကျတော့ လည်း အပေါင်းအဖေါ်တွေ နှင့်။ သူတို့ထဲမှာ ဒေါ်နုနုရှိန် သူတို့ အရွယ်က ယောင်လို့တောင် စိတ်ထဲမရောက် တော့ သည့် လိင်မွုကိစ္စကို တွေ့ကြုံ ကျော်ဖြတ်ဖူးသူတွေ လည်းပါလိမ့်မည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် လို ကိုယ့်ဖာသာ အာသာ ဖြေဖျောက်သည့် မိန်းက လေး တွေလဲရှိနိုင်သည်။
စန္ဒာ့လို မိန်းကလေး တွေလဲ ပါနိုင်သည်။ ကိုယ့်အတွေး နှင့် ကိုယ်ရှက်ပြုံး ပြုံးနေမိစဉ် ဒေါ်အေးစိန်ပြန် ရောက်လာသည်။ ဝယ်လာသည့် ပစ္စည်းတွေကို နောက်ခန်းမှာ အိမ်ဖေါ်မလေး နှင့် အတူနေရာချပြီး ဒေါ်နုနုရှိန် ဘေးမှာ လာဝင်ထိုင်၏။ “နုနု စောင့်နေတာကြာပြီလား” “နာရီဝက်လောက်တော့ ရှိပြီ” “တို့လဲ နုနုကြာဦးမှာ ဆိုပြီး အေးအေးဆေးဆေး လုပ်နေတာ” “အော် …ရပါတယ်” ဈေးကနေ ပြန်ရောက်လာသည့် အခါ အိမ်မှာ ပြဿနာတခုက စောင့်ကြိုနေသည်။ ခြံအလုပ်သမား ကိုလှရွေက ရေတင်စက် အလုပ်မလုပ်ကြောင်း သတင်းပို့သည်။ ရေလက်ကျန် လည်း နည်းနေပြီဟု ဆို၏။ ရေက အရေးကြီး သည်။ “ဘာဖြစ်တာလဲ၊ ရှင် မလုပ်တတ်ဘူးလား” “မလုပ်တတ်ဘူး ဆရာမ၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာ တော့ ပြင်တတ်တဲ့ လူရှိတယ်၊ ဆရာမ မလာသေးလို့ စောင့်နေတာ” “ဒါဆိုလဲ သွားခေါ်လေ၊ ကားနဲ့ လိုက်ပို့ ရမလား” “သိပ်မဝေးဘူး ဆရာမ၊ လမ်းလျှောက်သွားလိုက်မယ်” ခနကြာတော့ ကိုလှရွေနှင့် အတူ ကုလားလေး နှစ်ယောက်ပါလာပြီး ရေစက်ကို ကလိကြသည်။ အဆောင်သူတွေ ပြန်လာရင် ရေမရှိမှာ စိုးရိမ်လို့ ဒေါ်နုနု ရှိန်လည်း သူတို့နားမှာပဲ အခြေအနေ စောင့်ကြည့်နေသည်။ ညနေ သုံး နာရီ လောက်မှ ပြန်ကောင်းသွားသည်။ ကျသင့်ငွေကို ရှင်းပေးကာ ကိုလှရွေ ကို ရေအပြည့်တင်ထားဖို့ပြောပြီး ထမင်းစားဖို့ ဝင်လာခဲ့ သည်။ ထမင်းစားခန်း အဝတွင် တောင်းကြီးတလုံး နှင့် နေ့လည်က ဝယ်လာသည့် ဟင်း သီး ဟင်းရွက်တွေ ထည့်ထားသည်။ အပေါ်ဆုံးမှာက ခရမ်းသီးတွေ အများကြီးတွေ့ရသည်။ “ဟင် ဒေါ်အေးစိန် ခရမ်းသီးတွေကလဲ” “တန်လို့ ဝယ်လာတာ နုနုရဲ့၊ အများကြီးရတယ်၊ အလုံးသေးတော့ ချဉ်ရည်ဟင်း ချက်ရအောင်ဝယ်လာတာ” “အော် …အင်း ..အင်း” ဒေါ်နုနုရှိန် ထမင်းစားနေစဉ် ဒေါ်အေးစိန်က ခရမ်းသီးတွေ သိမ်းခိုင်းနေသံကြားရသည်။ “ပြီးရင် သိမ်းလိုက်မယ် ကြီးစ်ိန်၊ အခုလက် မအားသေးလို့” “အေးအေး … အဆောင်ထဲက ဟာမ တွေပြန်မလာခင်သိမ်းနော်၊ တော်ကြာတယောက် တလုံးဝင်ဆွဲသွားလို့ ဟင်းချက်စရာ မကျန်ပဲနေမယ်” “ကြီးစိန် ကလဲ၊ နောက်နေ့ကျတော့ ရေဆေးပြီးချက်လဲ ရပါတယ်” “အဲဒီ ခရမ်းသီးဟင်း ညည်းပဲစား” “ကြီးစိန်ကလဲ ဒီလောက်သေးတဲ့ ခရမ်းသီးတွေ ကို မမ တွေကယူမလား” မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ရယ်သံတွေ ဆူညံသွားသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် လည်း ထမင်းသီးသလိုလို ဖြစ်သွားရသည်။ ဒါအများ အတွက်ရယ်စရာ ပျက်လုံးတခုဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေမည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ကတော့ ပြုံးတောင်မပြုံးချင်သလိုပင်။ အဆာ လွန်လို့ သိပ်ပြီးစားမဝင်သည့် ထမင်းကို မြန်မြန်လက်စသတ်ပြီး ပြန်အထွက်တွင် အခန်းဝက တောင်းကို လှည့် ကြည့် မိပြန်သည်။ တောင်းနွုတ်ခမ်းစမ်နားမှ ခရမ်းသီး တလုံးက ဒေါ်နုနုရှိန် အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိုက်၏။ ကောင် မလေး တွေပြောသလိုပင် ခရမ်းသီးတွေက မြင်နေကျထက်သေးသော်လည်း အဲဒီ တလုံးက ထူးထူးခြားခြား လှပ နေသည်လို့ ထင်လိုက်မိသည်။ အရှည်က ဒေါ်နုနုရှိန်၏ လက်တထွာ နီးနီးခန့် နှင့် တခြားအလုံးတွေလို ကွေ့ကောက်မနေပဲ ဖြောင့်စင်းနေသည်။ အဖျားဖက်ဆီမှာ ကားသယောက်နှင့် အညှာတံဖက်ဆီသို့ ပြေပြေလေး သွယ်ဆင်းသွား၏။ အရောင်ကလည်း တောက်ပစို လက်နေသည်။
အညှာတံက ညှိုးမနေဘဲ လတ်ဆတ်စိမ်းလန်းလို့နေ၏။ အနီးအနား ကိုအကဲခတ် ကြည့် လိုက်ပြီး ဘယ်သူမှရှိမနေတာကို မြင်လိုက်ရသည့်အခါ ထိုခရမ်းသီးတောင့် လေးကို ဆတ်ကနဲ ကောက် ယူ လိုက်ပြီး လက်ထဲမှာ ရှိသည့်လက်ကိုင်ပဝါလေး နှင့်လုံး၍ကိုင်ကာ ကိုယ့်အခန်းကိုယ် ခပ်သုတ်သုတ်ပြေးခဲ့၏။ ဘာကြောင့် ဒီ ခရမ်းသီးကို ကောက်ယူလာမိသည်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်းနားမလည်ပါ။ အခန်းထဲ ရောက်တော့ မှန်တင်ခုံပေါ် မှာတင်ထားလိုက်မိသည်။ တလုံးတလေ ပျောက်တာလောက်ကိုတော့ ဒေါ် အေးစိန် သတိထားမိမှာ မဟုတ်လို့လည်း ထင်မိပါသည်။ အိပ်ယာမှာ ခနလှဲမည်လုပ်ပြီးမှ အပြင်ကပြန်လာသည့် အဝတ် အစားတွေ မလဲရသေးတာကို သတိရသည်။ အကျ င်္ီကို ချွတ်လိုက်ပြီး တီရှပ်ပွပွ တထည်ကောက်စွပ်လိုက် သည်။ ရေချိုးဖို့တော့ စောသေးသည်ဟု ထင်သည်။ ထမိန်စကပ်ကို ချွတ်ရင်း မှန်တင်ခုံပေါ်က ခရမ်းသီးလေးဆီ မျက်လုံးက ရောက်သွားသည်။ ယူလာပြီးမှတော့ ပြန်ထား လို့လည်း မဖြစ်တော့ပေ။ အောက်ခံပင်တီကို ချွတ် လိုက်သောအခါ စိမ်းရောင်ဖျော့ဖျော့ ပင်တီလေး၏ ခွနားမှာ စိုနေတာကို မြင်ရသည်။ အမှတ်မထင် ကိုယ့်ကိုယ် ကို လက်နှင့် ပြန်စမ်းကြည့်လိုက်ရာ အရည်တွေ နှင့် ချွဲကျိနေသည်။ အိပ်ခန်း တံခါး ကို သေသေချာချာ ပိတ်ထားသလားဟု လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနောက် ပေါင်ကိုကားပြီး ထိုင်ချလိုက် သည်။ ပြီးတော့ တီရှပ်နှင့် ဘရာစီယာကိုပါ ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး လုပ်ငန်းစတော့၏။ အစေ့လေးကို လက်မနှင့် ကစား ရင်း တွင်းဝလေးကို လက်ခလယ်နှင့် အသာအယာရစ်နေမိ၏။ အထဲကို ထိုးသွင်းဖို့ အကြိမ်ကြိမ်စိတ်ကူးကြည့်ခဲ့ သော် လည်း အခုထိ စိတ်မရဲသေးပါ။ “အား…. အင်း ….အင့် ” အရှိန်ရလာသည့် အခါ ဒေါ်နုနုရှိန် လက်ချောင်းတွေ စိုရွဲလာသည်။ ရင်ထဲ တဖိုဖို တလှပ်လှပ် နှင့် အရသာကို ခံ စားရင်း မှန်တင်ခုံပေါ်က ခရမ်းသီးကို မြင်လိုက်ရသည့် အခါ လွုပ်ရှားမွုတွေရပ်တန့်သွားပြီး ဒေါ်နုနုရှိန် ငိုင်ငိုင်လေး ဖြစ်သွားသည်။ အပျိုဖြစ်ကထဲက ခရမ်းသီးပုံပြင်တွေ ကြားခဲ့ရဖူးသည်။ အဆောင်နည်းပြ ဆရာမ ဘဝတုန်းက လည်း ခင်သူမင်သူတွေက ပြောကြ နောက်ကြသည်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်နုနုရှိန် ကိုယ်တိုင်မကြုံကြိုက်ခဲ့ပါ။ အဆောင် နောက်ဖက်မှာ ကျောင်းသူတွေက ခရမ်းသီးတွေ ပစ်ထားသည်ဆိုလို့ အဆောင်မွုး နှင့် အတူသွားကြည့်ဖူးသည်။ ခရမ်းသီး နှင့် တူတာဆိုလို့ ငှက်ပျောခွံပဲ တွေ့ခဲ့ရသည်။ မှန်တင်ခုံပေါ်က ခရမ်းသီးကို ကောက်ယူပြီးထောင်ကြည့်လိုက်မိ၏။ လက်နှင့် သပ်ကြည့်ကြာ ချောမွတ်ပြီးအေးမြ နေ၏။ စန္ဒာ့ အခန်းထဲက ဟာကြီးလို ပျင်းတွဲတွဲ မနေပါ။ အရွယ် အစားက လည်း စန္ဒာ့ဟာကြီး၏ တဝက်လောက် ပဲ ရှိသည်။ ဒီ ခရမ်းသီး နှင့် စမ်းသပ်ချင်စိတ်တွေ တားမနိုင်ဆီးမရ တဖွားဖွားပေါ်လာသည်။ အညှာဖက်ကနေ ကိုင်ပြီး ပေါင်ကြား ကို ရွယ်ကြည့်မိသည်။ ဒီတော့မှ အသီးအနှံတွေ ကို ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းတတ်တာကို သတိရပြီး ကုတင်ပေါ်ပစ်ချလိုက်မိသည်။ ပြီးတော့ မှတဖန်ကောက်ယူနမ်းကြည့်မိသည်။ ထူးထူး ခြားခြား အနံ့တော့မရပါ။ ခရမ်းသီး နံ့သာရ၏။ “ရေဆေးရင် ရတာပဲ” ရုတ်တရက်ပေါ်လာသည့် စိတ်ကူးကို ချက်ချင်း အကောင်အထည်ဖေါ်ပစ်လိုက်သည်။ ရေဘုံဘိုင်ခေါင်းကို အဆုံး အထိ ဖွင့်ချလိုက်ပြီးနောက် ဆပ်ပြာအထပ်ထပ် တိုက်ကာ ရေဒလဟောဖြင့် ပြောင်နေအောင်ဆေးလိုက်သည်။
ပြီးတော့ အဝတ်သန့်သန့် ဖြင့်သုတ်လိုက်သည့် အခါ ခရမ်းသီးက ပိုပြီးအရောင်လက်လာသည်။ ခရမ်းရောင်စိုစို က အလင်းရောင်တွင် ဝင်းအိနေ၏။ တကယ် ထိုးသွင်းတော့မည် ဆိုတော့လည်း ဒေါ်နုနုရှိန် ချီတုံ ချတုံဖြစ်နေပြန်သည်။ မရဲတရဲစိတ်ဖြင့် အကွဲ ကြောင်း တလျှောက်ခရမ်းသီး ထိပ်နှင့် အစုန်အဆန်ပွတ်ပေး နေမိသည်။ အစေ့လေးကို လည်းလက်နှင့် ဆွဆွ ပြီး ကစားပေးလိုက်သည့် အခါ အရည်တွေ ပြန်စိမ့်လာတာနှင့် အမျှ အထဲကိုထိုးသွင်းချင်စိတ်တွေက ပိုလို့များ လာသည်။ ထို့ကြောင့် အဝလေးမှာ တေ့ပြီးဖိကြည့်လိုက်သည်။ ကျဉ်းမြောင်းသည့် အပျိုစင်ကြွက်သားတွေက ခရမ်းသီးခပ်သေးသေး ကိုတောင်တင်းပြီးခံထားကြ ၏။ ပေါင်ကို အစွမ်း ကုန်ဖြဲပြီး ဖိလိုက်မှ အဝနားတွင် နစ်သည် ဆိုရုံလေး နစ်သွားသည်။ အဝ ဆီမှအေးစက်စက် အထိအတွေက တကိုယ်လုံးဆီသို့ ပျံ့နှံ့သွားပြီး ဒေါ်နုနုရှိန်၏ လက်တွေ တုန် လာသည်။ ဝုန်းဒိုင်း ကျဲနေသည့်ရင်ခုန်သံကြောင့် ရင်ဘတ်တခုလုံး ပွင့်ထွက်သွားတော့ မလိုခံစား နေရ၏။ “အား” စိတ် ကိုတင်းပြီး ဖိချလိုက် ရာ နွုတ်ခမ်းသားတွေ ဘေးကိုပြဲသွားပြီး လက်မဝက်လောက်တော့ ဝင်သွားသည်ဟု ထင်မိသည်။ အရမ်းတော့ မနာပါ အဝမှာ အေးစက်စက်နှင့် တစ်ဆို့ကြီးခံစားနေရတာ တခုပဲရှိသည်။ သိပ်မနာ သည့် အတွက် အားတက်လာပြီး ဖိချလိုက်ပြန်ရာ ဆက်မဝင်တော့ဘဲ တန့်နေသည်။ တနေရာရာမှာ ထောက် နေ သလို ခံစားရသည်။ ခရမ်းသီးကို ကြမ်းပြင်နှင့် မျဉ်းပြိုင် အနေအထားလောက်မှာ ထားပြီးထိုးသွင်းလိုက်မှ နောက် ထပ် တလက်မလောက် ထပ်ဝင်သွားသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ရင်ထဲတွင် ဘယ်လိုဖေါ်ပြရမှန်း၊ နားလည်ရမှန်း မသိသည့် ခံစားချက်တခုက လှိုက်၍လှိုက်၍ တက်လာသည်။ “အီး … အင်း ..အင်း” ကျဉ်းမြောင်းသည့် အပေါက်လေးထဲသို့ ထိုးသွင်းရတာဖြစ်လို့ နာတော့နာသည်။ တွင်းဝက ကြွက်သားတွေ သ ရေပင် ကို ဆွဲဆန့်လိုက်သလို တင်းသွားတာကို သိသည်။ အတွင်းဖက်ကတော့ နာတယ်လို့ လည်းပြောလို့ မရ ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိပါ။ ရေဆေးထားလို့ အေးစက်စက်ဖြစ်နေသည့် ခရမ်းသီးက အတွင်းဖက်နံရံတွေပေါ်က နု နယ်သည့် အသားလေးတွေကို ဖိထား၏။ မထူးတော့သည့် တူတူ လက်ကိုင်သည့်နေရာလေးလောက်ပဲ ချန်ထား ပြီး ထိုးထည့်လိုက်၏။ “အောင်မယ်လေး တော့” ဒေါ်နုနုရှိန် ရှေ့ကို ငိုက်ကျသွားသည့် အတွက် မွေ့ရာကို လက်နှစ်ဖက် နှင့် ထောက်ထားလိုက်ရသည်။ ဒီ လောက်ကလေး နှင့် အဆာင်ကို တပတ်ပတ်ပြီးပြေးလိုက်ရသလို မောနေသည်။ ခပ်ကုန်းကုန်း အနေအထား မှ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ကြည့်လိုက်သောအခါ ခရမ်းသီးက တလုံးလုံး နီးပါး အတွင်းထဲသို့ရောက်နေပြီ ဖြစ်သည်။
အစိမ်းရောင် ညှာတံကောက်ကောက်ကလေး ကအပြင်ကို တိုးထွက်နေ၏။ ထိုမြင်ကွင်း ကို ကြည့်ရင်း ငါဘာတွေ လုပ်နေသလဲဟု အပူတပြင်းတွေးနေမိသည်။ တုန်ရီနေသည့် လက်ဖြင့် ညှာတံကနေ ပြန် ဆွဲ ယူလိုက်သောအခါ တရွေ့ရွေ့ ထွက်လာနေသည့် အထိအတွေ့ ကဒေါ်နုနုရှိန်ကို ဖမ်းစားလိုက်သဖြင့် တဝက် လောက် အပြင်ကို ထွက်လာသည့် အခါပြန်ထိုးသွင်းလိုက်မိသည်။ “အား …အင်း …အ” တချက်ကနေ နှစ်ချက်၊ နှစ်ချက်ကနေ သုံးချက်၊ သုံးချက်ကနေ လေးချက်။ ဒေါ်နုနုရှိန် အသိစိတ်တွေပျောက် သွားသည်။ ခရမ်းသီးကို လွတ်ထွက်မသွားစေရန် ကျစ်ကျစ်ပါ အောင်ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဘယ်နှစ်ကြိမ် အထုတ်အသွင်း လုပ်နေမိသည်ကို လည်းမမှတ်မိတော့ပါ။ ရင်ထဲမှာ မချိမဆန့်ဖြစ်လောက်အောင် လောက်မြိုက်နေသည့်မီးကို ခရမ်းသီး နှင့် အားပါးတရ ငြိမ်းသတ်နေမိ၏။ စစ လုပ်ချင်းမှာ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း ရှိလို့ အားစိုက်ရသော်လည်း နောက် ပိုင်း အတွင်းကနေ အရည်တွေ အချွဲတွေ ထွက်လာသည့် အခါ လွုပ်ရှားရတာ သွက်လက်မြန်ဆန်လာ၏။ ခေါင်းကိုမော့၊ မျက်စိနှစ်လုံးကို စုံမှိတ်ပြီး ဒေါ်နုနုရှိန် အာရုံတွေ အလုံးစုံက ခရမ်းသီး နှင့် သူထိုးမွေနေသည့် အ တွင်း သားတွေအပေါ်မှာပဲ ရှိသည်။ တခါတရံ တွင် အားနေသည့်လက်နှင့် အစေ့လေးကိုပါ တပြိုင်နက်ထဲ ပွတ် ချေပေးမိသည်။ ဒီလိုလုပ်ရသည်က ပိုပြီး ဖီလင်ရှိကြောင်းလဲ သိလာ၏။ “အား .. အီး …အင်း …” လှိုက် လှိုက်လှဲလှဲ ရှိလွန်းသည့် ခံစားချက်ကြောင့် ပါးစပ်က ဘာတွေဘယ်လိုရေရွတ်မြည်တမ်းနေမိသည်ကို လည်း သတိမထားမိတော့ပါ။ တယောက်ထဲ အိပ်ယာပေါ်မှာ ဗြောင်းဆန်အောင် ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေမိသည်။ ခံ စားချက်၏ အဆုံးစွန်ဆုံး သို့ရောက်ရှိသွား ချိန်မှာတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် တကိုယ်လုံးကျဉ်တက်သွားသည်။ တဟီးဟီး နှင့် ညည်းရင်း တွန့်လိမ်နေမိ၏။ ပြီးတော့ ခရမ်းသီးကိုတောင် ပြန်မထုတ်နိုင်တော့ဘဲ အိပ်ယာပေါ်မှာ တစောင်း ကွေးကွေးလေး မှိန်းနေမိသည်။ ချွေးတွေ လည်းရွဲရွဲ စိုနေ၏။ မောလည်း အရမ်းမောနေသည်။ လူကမလွုပ် နိုင်သော်လည်း ရင်ထဲမှာတော့ ယောက်ယက်ခပ်နေသည်။ အရာအားလုံးတည်ငြိမ် ဖို့ အကြာကြီး မှိန်းနေလိုက် ရ၏။ “နုနု ရေ ….နုနု” ဒေါ်နုနုရှိန် သိပ်ကြာကြာတော့ မမှိန်းလိုက်ရပါ။ တံခါးထုသံ နှင့် အတူ အပြင်ကနေ ဒေါ်အေးစိန်ခေါ်နေသံကြား လိုက် ရ၍ လူးလဲထလိုက်ရသည်။ “ဘာလဲ ဒေါ်အေးစိန်” ချွတ်ချထားသည့် ထမိန်ကို ကမန်းကတန်း ပြန်ကောက်စွပ်ရင်း မေးမိသည်။ “ဖုန်းလာနေလို့ ” ထမိန် ကို ခပ်မြန်မြန်ရင်လျားလိုက်ပြီး တံခါးဆီကို အသွားတွင် လမ်းလျှောက်ရတာ တမျိုးကြီးဖြစ်နေတော့မှ ခရမ်း သီး ပြန်မထုတ်ရသေးတာ သတိရမိသည်။ ပြုတ် မကျအောင် လက်နှင့် အောက်ကနေပင့် ထားရင်း တံ ခါးဖွင့်ပေးလိုက်တော့ ဒေါ်အေးစိန်က ဒေါ်နုနုရှိန်၏ ဟန်းဖုန်းလေး ထိုးပေးသည်။
“မမ စိတ်များပြီး ထမင်းစားခန်းမှာ ထားခဲ့တယ်လေ” ထမိန်ရင်လျား နှင့် ဒေါ်နုနုရှိန်ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်ရင်းပြောသည်။ “ရေချိုး မလို့ လေ” အလွယ်ကူဆုံး ဆင်ခြေကိုပေးပြီး ဖုန်းကို လှမ်းယူလိုက် ၏။ နံပါတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ နေ့ခင်းက သွားလည် ခဲ့ သည့် သူငယ်ချင်း ဖြစ်နေသည်။ “ချသွားပြီ၊ နုနု ထမင်းစားခန်းထဲမှာ ဖုန်းကျန် ခဲ့တာဆိုတော့၊ ခနနေ ပြန်ခေါ်မယ်တဲ့၊ ထမိန်ကလဲ စောက်ထိုးကြီး နုနု ရယ်” “အော် …ရေချိုး မလို့လုပ်နေတုန်း ဒေါ်အေးစိန်က တံခါးထုတော့ မြန်မြန်ကောက်ဝတ်လိုက်ရတာပေါ့” ဒေါ်အေးစိန် ကိုပြောနေစဉ် ဖုန်းက ပြန်မြည်လာသည်။ “ဖုန်းပြောလိုက်ဦး မယ်ဒေါ်အေး စိန်လဲ သွားတော့” တံခါးကို ချက်ပြန်ထိုးလိုက်ပြီး ထူးလိုက်သည်။ ပေါင်ကြားထဲ လက်နှိုက်ထားတာကိုတော့ ဒေါ်အေးစိန် ဘာမှမေး မသွားပါ။ လက်ဖယ်လိုက်တော့လည်း ပြုတ်မကျပါ။ အတွင်း ကကြွက်သားတွေက ခရမ်းသီးကို ကြပ်နေအောင် ညှစ်ထားကြသည်။ “ပြော ….သူငယ်ချင်း၊ ဘာစိတ်ကူးပေါက်တုန်း” “နင်က ချက်ချင်းကြီး ပြန်သွားတော့ ငါ့ ကိုများ တခုခု စိတ်ဆိုးသွားတာလား တွေးမိလို့ဟေ့” “မဆိုးပါဘူးဟာ၊ နင်တို့ အနှောက်အယှက် ဖြစ်မှာစိုးလို့ ပြန်တာပါဆိုမှ” “အပျိုကြီး မဟုတ်တာမပြောနဲ့ နော်” “ဟဲ့ … နင်ငါ့ ကိုမှန်မှန်ပြောစမ်း၊ မှန်မှန် မပြောမှ ငါတကယ် စိတ်ဆိုးမှာ” “ဘာလဲ” “ငါလာတုန်းက နင်တို့ လုပ်နေကြတာ မဟုတ်လား” “နုနု ရှိန်၊ နင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ” “ဘာမှ မဖြစ်ဘူး၊ ငါထင်တာ မှန်မမှန်သိချင်လို့” “ဟုတ်တယ်ဟေ့ ၊ ဟုတ်တယ်၊ ဘာဖြစ်လဲ၊ သူက မနက်ဖြန် ခရီးသွားစရာ ရှိလို့ ၊ မသွားခင် ..တနေကုန် … နင် သဘောပေါက်တယ် မဟုတ်လား အပျိုကြီး၊ ဒီ့ ထက် သဘောပေါက်ချင်ရင်တော့ ငါ့လိုပဲ လင်ယူလိုက်” ဖုန်းပြောရင်း ထမိန်ကို လှန်၍ ခရမ်းသီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ အားလုံး အပြင်ဖက်သို့ရောက်သွားသည့် အခါ ဒေါ်နုနုရှိန် အလိုလို သက်ပြင်းချလိုက်မိသည်။ ခရမ်းသီး နှင့် အတူပါလာသည့် အရည်တွေက ထမိန် ပေါ်သို့ တတောက်တောက်ကျ၏။ “ကောင်မ ငြိမ်သွားတယ်၊ ပြီးတော့ သက်ပြင်းချတယ်၊ ဘာလဲ လင်ယူချင်စိတ်ပေါက်သွားပြီလား” “မဟုတ်တာတွေ လျှောက်မပြောနဲ့၊ နင်တို့ ဘာမှလုပ်လို့ မရအောင် တနေကုန် နင့်အိမ်မှာလာ ထိုင်နေလိုက်မယ်၊ ဒါနဲ့ ငါပြန်သွားတော့ရော ဆက်လုပ်ဖြစ်လား” “လုပ်ဖြစ်တယ် ဟေ့၊ လုပ်ဖြစ်တယ်၊ အခု သူရေသွားချိုးနေတုန်းဆက်တာ ရှင်းပလား” “အေးအေး၊ အဲဒါဆိုလဲ ပြန်လာရင် ထပ်လုပ်လိုက်ကြဦး ကြားလား” ဒေါ်နုနုရှိန် နှင့် ဒီအကြောင်း ဆက်မပြောချင်လို့ပဲလား၊ ဒါမှ မဟုတ် သူမ ခင်ပွန်း ပဲအနားပြန်ရောက်လာလို့ လား မသိပါ၊ သူငယ်ချင်းက တခြား အကြောင်းပြောင်းလိုက်သည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် လည်း အလိုက်သင့် ဆက်ပြောနေလိုက် ပါ သည်။ ဖုန်းပြောနေပေမယ့် မျက်လုံးတွေကတော့ ပေါင်ပေါ်တင်ထားမိသည့် ခရမ်းသီးကိုသာကြည့်နေမိသည်။
မသွားခင်ပြောခဲ့ သလိုပင် ညီမလေး ၏ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြီးချင်း စန္ဒာပြန်ရောက်လာပါသည်။ ပြန်ရောက်သည့် အကြောင်း သတင်းပို့လာရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် အတွက်ဝယ်လာသည့် လက်ဆောင်တွေလည်း ပေးသည်။ အဲဒီနေ့ က စန္ဒာ အလုပ်မသွားပါ။ အဆောင်မှာပဲ နားနေသည်။ နားနေတာလဲ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မည် တပတ်ကျော်ကြာကင်း ကွာနေရသည့် သူမ၏ အချောင်းကြီးနှင့် အတိုးချစိတ်ဖြေနေတာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်သည် ဟု ဒေါ်နုနုရှိန် တွေးနေ မိ၏။ ဒေါ်နုနုရှိန်လည်း ခရမ်းသီး တလုံးနှင့် အဆင်ပြေနေပါသည်။ စန္ဒာ့ ဟာကြီးလောက် မကြီးမားပေမယ့် ဒေါ်နုနုရှိန် အတွက်ကတော့ အကောင်းဆုံးဖြေသိမ့်မွုပေး နိုင်ပါသည်။ လက်နှင့် အစိကိုပွတ်ပြီး ဖြေရတာထက်ပိုကောင်း သည့် ခံစားမွုကို ဒေါ်နုနုရှိန် တပ်မက်စွဲလမ်းနေရပါပြီ။ မနက်တကြိမ်၊ ညတကြိမ် မှန်မှန်လုပ်၏။ အရည်တွေ ထွက် ရလွန်းလို့ လူလည်း အားအင်ကုန်ခမ်းကာ ညောင်းချိနေသည်။ ဒီလိုဖြစ် နေတာကိုတောင်မှ လူတွေက ဘယ်လို မြင်ကြတယ် မသိ။ ဒေါ်နုနုရှိန် ခုတလော အရင်ကထက် ပိုလှလာသည်ဟု ဆိုကြ သည်။ကိုယ့်ကိုယ်ကို မျက်နှာ တွေ ကျ၊ ဒူးတွေ ချောင်နေသည်ဟု ထင်နေမိချိန်မှာမှ ဒီလိုပြောကြသည်ကို ဒေါ်နုနုရှိန် နားမလည်ပါ။ စန္ဒာက တော့ တဖုံထူးသည်။ ပြန်ရောက်ပြီး နောက်တနေ့ လမ်းမှာတွေ့တော့ နွုတ်ဆက်ရင်း “သမီး ကြည့်နေတာ၊ ဆရာမ နည်းနည်း ပိန်သွားသလိုပဲ” “ဟုတ်လား၊ တို့တော့ သတိမထားမိပါဘူး” “ဒါပေမယ့် ခုမှဆရာမ ပိုကြည့်ကောင်းလာတယ်၊ တကယ်ပြောတာ” အနည်းငယ်ပိန် သလိုလိုဖြစ်သွားသည်ကိုတော့ ဒေါ်နုနုရှိန်လည်း ထင်မိပါသည်။ ပိန်သွယ်သော စန္ဒာ့ကို ကြည့် ရင်း သူတို့လို စိတ်ဖြေတတ်သူတွေ၊ အတုသုံးသူတွေ ပိန်တတ် သလားဟု တွေးနေမိသည်။ စန္ဒာ လည်း ရာဘာ ချောင်းကြီး နှင့် အာသာဖြေဖျောက်သည် မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့် စန္ဒာ ပိန်သည်ဆိုရင် ဒေါ်နုနုရှိန် လည်း နောက်ကျရင် ပိန်လာနိုင်ပေသည်။ အခုတောင်မှ ခရမ်းသီးလေး နှင့် သုံးလေးရက် လုပ်လိုက်ရသေးသည် ပိန် လာသည်ဟု ဆိုသူက ဆိုနေပေပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်နုနုရှိန် ဒီအလုပ်ကို မရပ်တန့်နိုင်ပါ။ အချိန်တန်ရင် ဘိန်းစွဲသူလို အသွေးအသားက တောင့်တ၏။ ခရမ်းသီး နှင့် စိတ်ရှိလက်ရှိထိုးပြီး အိပ်ပျော်သွားရသည့် အရသာ က ကောင်းလွန်းသည်။ တခုတော့ ရှိသည်၊ ရက်ကြာကြာ အသုံးချလိုက်သည့် အခါ ခရမ်းသီးက တဖြည်းဖြည်းညှိုးနွမ်းလာသည်။ အညှာတံကလည်း ကျွတ် ထွက်သွားသည့် အခါ အရင်းဖက်က ရေဆေးတိုင်းရေဝင်ပြီး ညိုမဲမဲ ဖြစ်လာသလို ပျော့လည်းပျော့လာ၏။ “ခရမ်းသီး ဟင်းလေး ဘာလေး မချက်တော့ဘူးလား ဒေါ်အေးစိန်ရယ်” ကိုယ်တိုင်ဈေးသွားဝယ်ဖို့ တွန့်နေ၍ ဒေါ်အေးစိန် ကို တဖက်လှည့်နှင့် ပြောမိသည်။ “ချက်ပေး မယ်လေ၊ နုနုက ဘယ်လိုစားချင်တာလဲ၊ ချဉ်ရည်လား၊ အကြော်လား အနှပ်လား” “အဆင်ပြေ သလိုသာလုပ်ပါ ဒေါ်အေးစိန်ရယ်” နောက်တရက် ဒေါ်အေးစိန် ဈေးသွားသည့် အခါ ခရမ်းသီးတွေပါလာ၏။ ဈေးထဲ လိုက်မသွားဘဲ ကားပေါ်က စောင့် နေခဲ့လို့ ဒေါ်အေးစိန် ဘယ်လိုဝယ်လာသည်ကို ဒေါ်နုနုရှိန် မသိပါ။
နောက်ခန်းမှာ ခြင်းတွေတောင်းတွေ ထားပြီး ရှေ့ကိုလာတော့မှ မေးမိသည်။ “ခရမ်းသီးရလား ဒေါ်အေးစိန်” “ရတယ်၊ ပါတယ်” အိမ်ရောက်ရင် သူတို့တွေ မသိအောင်ခရမ်းသီး တလုံးရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟု ဒေါ်နုနုရှိန် တလမ်းလုံး တွေးနေမိသည်။ ဒီတခါတော့ အရင်ဟာထက် နည်းနည်းပိုကြီးတာ ရွေးယူမည်ဟု စိတ်ကူးထားပါသည်။ သို့ပါ သော်လည်း အိမ်ကိုရောက်လို့ မီးဖိုထဲတွင် ခရမ်းသီးထည့်ထားသည့် ခြင်းကိုမြင်လိုက်ရသည့် အခါ ဒေါ်နုနုရှိန် မျက်လုံးပြူးသွားရသည်။ နည်းတဲ့ ခရမ်းသီးကြီးတွေ မဟုတ်။အသေးဆုံးက ဒေါ်နုနုရှိန် ခြေသလုံးလောက်ရှိ သည်။ ပြီးတော့သုံးလုံး ထဲသာပါသည်။ “အောင်မယ်လေး ဒေါ်အေးစိန် ရယ် ခရမ်းသီးတွေက ကြီးလိုက်တာ” “မီးဖုတ်ပြီး ကြော်မယ်လေ နုနုရဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် နံနံပင်လေးအုပ်ပြီး သုတ်မလားလို့” “လုပ်လုပ်၊ ကြိုက်သလိုလုပ်” မချိတင်ကဲ ပြောရင်း မီးဖိုထဲက စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့် ထွက်လာမိသည်။ သုံးလုံးထဲ ဆိုတော့ ယူလို့လည်း မ ကောင်း။ ယူလို့ရပြန်ရင်လည်း ဒီလောက်ကြီးတာကြီး နှင့် ဆိုရင် သေဖို့သာရှိ၏။ စန္ဒာ့၏ ရာဘာလိင်တံကြီး ထက် ပင် လေးငါးဆပိုတုတ်နေသည်။ လူပါထက်ခြမ်း ကွဲသွားလိမ့်မည်။ ဈေးမသွားခင် နွမ်းပျော့နေသည့် ခရမ်းသီး ဟောင်းလေးကို ခဲတံချွန်သည့် ဒါးဖြင့် အပိုင်းပိုင်းလုပ်ပြီး အိမ်သာထဲမှာ ရေဆွဲချခဲ့ မိသည်ကို ခုမှနောင်တတွေ ရနေမိသည်။ အိပ်ခန်းထဲမှာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် နှင့် မျက်စိကစား ရင်း တွေ့ရ သည့် ပေါင်ဒါဗူး၊ ရေမွေးပုလင်း၊ နွုတ်ခမ်း နီတောင့် တခုမှ အဆင်ပြေမည့် ပုံမရှိပါ။ စန္ဒာ့ အခန်းကို သွားကြည့်တော့လည်း ခရီးမှ ပြန်လာစဆိုတော့ အထုပ်တွေ အိတ်တွေနှင့် ပွရွုပ်နေ၏။ အိပ်ယာ ကို အသာလေးမပြီး ကြည့်လိုက်ရာ ဘာမှမတွေ့၊ တခြားနေရာတွေ လည်း လိုက်မရှာချင်တော့ပါ။ လက်ရာခြေရာ ပျက်သွားမှာစိုးရသည်။စိတ်၏ အလိုမကျမွု၊ အဆင်မပြေမွုတွေနှင့် ဒေါ်နုနုရှိန် တနေ့လုံး စိတ်တိုနေတော့၏။ နံနံပင်နံ့လေး သင်းပြီး ငရုပ်သီးစိမ်းတောင့်လေးတွေ လှီးထည့်ထားလို့ မွေးနေသည့် ဒေါ်အေးစိန်၏ လက်ရာ ခရမ်းသီးမီးဖုတ်သုပ်က မြင်သူတိုင်း သွားရည် ကျချင်စရာဖြစ်သော် လည်း ဒေါ်နုနုရှိန် ထမင်းကောင်းကောင်း မစားနိုင်ပါ။ “ထည့်လေ နုနု ရဲ့၊ ခရမ်းသီးစားချင်တယ်ဆို” ဘာမှမသိရှာသည့် ဒေါ်အေးစိန်က အတင်းလာခပ်ထည့် ပေးသည့် အခါ စိတ်တိုရပေမယ့် စေတနာ ကိုသိနေလို့ အတင်း ကျိတ်မှိတ်မျိုရသည်။ ဒီညတော့ လက်နှင့်ပဲ ပွတ်ပြီး အိပ်ရတော့မည် ဆိုသည့် အသိက ရင်ထဲမှာဟာတာ တာဖြစ်စေ၏။ ညနေစောင်းတော့ ခြံထဲမှာဆင်း လမ်းလျှောက်ရင်း အလုပ်ခွင်က နေပေါ့ပါးသွက်လက်စွာ ပြန်လာ သည့် စန္ဒာ နှင့် လမ်းမှာတိုးတော့ ဘာကြောင့် မှန်းမသိ စိတ်ထဲမှာ မလိုတမာဖြစ်ရသည်။ စန္ဒာကတော့ သူမ၏ စိတ် ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝစွာဖြင့် ကျေနပ်နှစ်သိမ့် နေနိုင်ပေမည်။
အာရုံတွေက မကြည်မလင်နှင့် ညစ်ညူးနေသောကြောင့် ခြံထဲက ခုံတန်းတခုမှာ ညမှောင်သည် အထိတယောက် ထဲ ထိုင်နေမိသည်။ ဒီအရွယ်ရောက်မှ မလုပ်သင့် တာတွေလျှောက်လုပ်ပြီး နောက် ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်မနိုင်ဖြစ်နေရ သည့် ဘဝကိုလည်း စိတ်ပျက်မိသည်။ စောစောစီးစီး လင်ယူခဲ့ရင်ကောင်းသားပဲ ဟုတွေးမိသလို ကိုယ်နဲ့ မဆိုင် တာတွေ လိုက်စပ်စုပြီး မစမ်းသင့်တာတွေ စမ်းကြည့်မိတာမျိုး မရှိဘဲ အရင်ကာလတွေ တုန်းကလို အေးအေး ချမ်းချမ်း မနေခဲ့ မိတာကိုလည်း နောင်တရသည်။ “ဒါကြောင့် ကြီးမှဝက်သက်ပေါက်ရင် မလွယ်ဘူးလို့ ပြောကြတာဖြစ်မယ်” စိတ်ပျက်အားလျော့စွာရေရွက်လိုက်ရင်း တစထက်တစ ထူထပ်သိပ်သည်းလာသည့် အမှောင်ထဲမှာ ဒေါ်နုနုရှိန် ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေမိသည်။ ဒေါ်အေးစိန် လွတ်လိုက်၍ အိမ်က ကောင်မလေး တယောက် အနားရောက်လာ သည်။ “ဆရာမ ထမင်းမစားသေးဘူးလားတဲ့၊ ကြီးစိန်က မေးခိုင်းလိုက်တယ်” အဆောင်သူတွေလည်း ညစာကိစ္စပြီးကြပြီထင်သည်။ ပြတင်းပေါက်အသီးသီးမှာ မီးရောင်တွေလင်းလက်နေ၏။ ဟို အခန်းဒီအခန်းကူးသန်းနေကြသည်ကို လည်း လှမ်းမြင်နေ ရသည်။ လက်မှာနာရီမပါလို့ ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲ ဆို တာ မသိပါ။ ခြောက်နာရီကိုတော့ တော်တော်ကျော်ခဲ့တာသေချာသည်။ နာရရား တံခါးပိတ်တာ ဒေါ်နုနုရှိန် ဒီခုံ မှာ ဝင် ထိုင်လိုက်ခါစက ပင်ဖြစ်သည်။ လမ်းမပေါ်မှာလည်း မီးတိုင်တွေ လင်းလက်နေကြလေပြီ။ ဒေါ်အေးစိန် တို့ လည်း ထမင်းစားချင်နေကြပြီထင်သည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် က လာမ စားသေးလို့ သူတို့ အလုပ်သမားအဖွဲ့ စားရခက်နေ ပုံရသည်။ “ဆရာမ မဆာသေးဘူးလို့၊ ရေလဲ ချိုးချင်သေးတယ်၊ ရေချိုးပြီးမှပဲ လာစားတော့မယ်၊ ထမင်းပြင်ပြီး အုပ်ဆောင်း နဲ့သာအုပ်ထားလိုက် လို့ ကြီးစိန် ကိုပြောလိုက်နော်” “ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ” ကောင်မလေး လှည့်ထွက်သွားပြီးမှ ဒေါ်နုနုစိန် တစုံတရာ ကိုသတိရပြီး နောက်ကလှမ်းပြောလိုက်သည်။ “အော် …ဒေါ်အေးစိန် ကိုပြောလိုက်ကွယ်၊ မနက်က ခရမ်းသီး ဟင်းတွေ ကျန်ရင် စားလိုက်ကြတော့၊ ဆရာမ မစားချင်တော့ ဘူးလို့” ဒေါ်နုနုရှိန် အဲဒီ ခရမ်းသီးဟင်းကို ယောင်လို့တောင်လှည့် မကြည့်ချင်တော့ပါ။ ငါးစိမ်း မြင် ငါးကင်ပစ် ဆိုသလို နေ့ခင်းက အိမ်သာ ခွက်ထဲပစ်ခဲ့ မိသည့် ခရမ်းသီးလေး ကို နှမျောနေမိ၏။ မသေချာပဲ စွန့်ပစ်မိတာကို နောင်တ ရနေ၏။ ဒေါ်အေးစိန် ကိုမမှာဘဲ ကိုယ်တိုင်သွားဝယ်လိုက်ချင်ပေမယ့် မသွားရဲပါ။ ဆရာမ အပျိုကြီးက ဈေးထဲမှာ ခရမ်းသီး တွေကိုသေသေချာချာကြည့်ရွု့ပြီး ဝယ်သွားသည် ဆိုတာမျိုး မဖြစ်လို။ အရင်ကတော့ အကြောင်း တိုက် ဆိုင်ရင် ဈေးဝယ်ဖူးသည်။ ခရမ်းသီးလည်း ဝယ်ဖူးမှာမလွဲပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းက စိတ်ထဲမှာ ဘာမှမရှိ။
အခု တော့ ကိုယ့်အပြစ်နှင့် ကိုယ်လိပ်ပြာမလုံ ချင်သလိုဖြစ်နေရသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ထိုင်နေတာကြာလို့ နာရာရား တောင် တခေါက်လာကြည့်သွား၏။ “အိုက်လို့ ပါ နာရာရား ရယ်” ရိုးသားသည့် အဖိုးကြီးက အခန်းထဲမှာလေအေးစက်နှင့် နေသည့်သူပြောသည့် ဆင်ခြေကိုလက်ခံ ပြီး ပြန်ထွက် သွား၏။ ခနလောက်ဆက် ထိုင်နေပြီးတော့ဒေါ်နုနု ရှိန်လည်း အိမ်ထဲဝင်ဖို့ ပြင်သည်။ နောက်ကျိနေသည့် အာရုံ တွေ လျော့ပါးသွားအောင် ရေတဝချိုးလိုက်မည်။ ပြီးတော့မှ ထမင်းကို ဝင်သလောက်သွားစားပြီး အိပ်တော့ မည် ဟု ဆုံးဖြတ် လိုက်၏။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒေါ်နုနု ရှိန်ထိုင်ရာကအထတွင် ဂါဝန်ကြီးတဖားဖား နှင့် လမ်းပေါ်မှာ ခပ်သုတ်သုတ် သွားနေသည့် မစိုးစိုးနွယ် ကိုမြင်လိုက်ရသည်။ သူမ ကတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် ကို မြင်သည့်ပုံမပေါ်ပါ။ မမြင်တာပဲ ကောင်းပါသည်။ မြင်ရင် ခြံစည်းရိုးနား ကပ်လာပြီး အရောင်းအဝယ် စကားတွေပြောနေဦး မည်။ ထို့ ကြောင့် သစ်ပင်ရိပ် မှာခနရပ်ပြီး မစိုးစိုးနွယ် လွန်သွားသည် အထိရပ်စောင့်နေလိုက်သည်။ လမ်းမ အတိုင်း ခပ်သုတ်သုတ် သွားနေသည့် မစိုးစိုးနွယ် ကို နာရရားမြင်ရင် ရည်းစားထွက်ရှာသည် ဟုပြောချင် ပြောနေဦးမည်။ အိမ်မကပ်သည့် ပွဲစားမ ကို လမ်းပေါ်မှာ ခနခန မြင်နေကျ ဒေါ်နုနု ရှိန် အတွက်တော့ ဒီလိုမြင်ရ တာ မဆန်းတော့ပါ။ မစိုးစိုးနွယ်ဝေးသွားတော့ မှ အိမ်ဖက်ကို လျှောက်လာရင်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဆရာမ အ လုပ်နှင့် ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းကို မရွေးချယ်ခဲ့ဘဲ လူအများနှင့် ဆက်ဆံရသည့် တခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတခု ခု ကို ရွေးချယ်မိရင် ကောင်းသားဟု တွေးမိပြန်ပါသည်။ ရေချိုးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကြည့်မိအောင်၊ ပေါင်ကြားကို လက်မရောက်အောင် တော်တော်သတိထားရသည်။ စိတ်က ထလာရင်ပြေဖို့ လွယ်မည်မဟုတ်။ ရင်သားတွေကိုတောင် ဆပ်ပြာမတိုက်မိပါ။ ခပ်မြန်မြန်ချိုး ပြီး အဝတ် မြန်မြန်လဲကာ ထမင်းစားခန်း ဆီဆင်းခဲ့တော့ တယောက်မှမရှိကြတော့။ ဒေါ်နုနုရှိန် ဝင်သွားမှ မီးဖိုထဲက ကောင် မလေး တယောက် ထွက်လာသည်။ “ဟင်းချို နွေးပေးရမလား ဆရာမ” “နေတော့၊ ဆရာမ နည်းနည်းပဲ စားမှာ” အုပ်ဆောင်း အောက်မှာ ခရမ်းသီးဟင်း ကို မတွေ့ရပါ။ ဒေါ်အေးစိန် အကြောင်းသိသူပီပီ မနက်က သုပ်ရင် ခရမ်း သီးကို ဒီညနေ ကြော်မည် ဆိုတာ ဒေါ်နုနုရှိန် မှန်းမိသည်။ ခရမ်းသီး မပါလို့လားမသိပါ နေ့ခင်းကထက်တော့ ထ မင်း ပိုစားလို့ကောင်းသည်။ ညစာချိန်မှာ ပုံမှန်စားနေကျ အတိုင်း ထမင်းတပန်းကန် အသာလေးကုန်သွားသည်။ စားပြီးတော့ အခန်းတွေ တပတ်လိုက်ကြည့်သည်။ ဘယ်သူမှ မအိပ်ကျသေးသော်လည်း စန္ဒာ့ အခန်းကတော့ တံ ခါးလည်း ပိတ် မီးလည်းပိတ်ထားသည်။ ဘေးခန်းကို မေးကြည့်တော့ “မနက် အစောကြီးသွား စရာရှိလို့တဲ့ ဆရာမ” ဘေးခန်းက ကလေးမ မမြင်အောင် အပြင်ဖက်ကို လှည့်ပြီးဒေါ်နုနုရှိန် မဲ့ပြုံးလေး ပြုံးလိုက်မိသည်။ တကယ်သွား စရာလည်း ရှိချင်ရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါပေမယ့် ဒေါ်နုနုရှိန် ကတော့ စန္ဒာ အခန်းထဲမှာ ရာဘာလိင်တံကြီး နှင့် အလုပ် ရွုပ်နေလိမ့်မည် လို့ပဲထင်သည်။ ကိုယ့် အခန်းကိုယ်ပြန်လာရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် မျက်လုံးထဲမှာ ပေါင်ကိုဖြဲပြီး ကြီးမား သည့် လိင်တံကြီးကို သူမ၏ အင်္ဂါထဲသို့ အတင်းထိုးသွင်းနေမည့် စန္ဒာ့ကို မြင်ယောင်နေမိသည်။ စန္ဒာ့ ၏ မျက် လုံးတွေက ရမ္မက်ဖြင့် ရီဝေမှေးစင်းနေမည်လား၊ ဒါမှမဟုတ် နာကျင်မွုဖြင့် ပြူးကျယ်နေ ကြမည် လားဆိုတာ ဒေါ် နုနုရှိန် အလွန်သိချင်နေမိပါသည်။ ဘယ်လိုပင်ဖြစ်စေ အဆုံးမှာတော့ ကျေနပ်နှစ်သိမ့် မွုတခုကို စန္ဒာ မလွဲမသွေ ရရှိလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကို လည်းဒေါ်နုနုရှိန် သိနေသည်။ စန္ဒာ့ အကြောင်းကိုတွေး၊ စန္ဒာ့ စိတ်ခံစားမွုကို မှန်းဆရင်း ဒေါ်နုနုရှိန်၏ စိတ်တွေလည်းလွုပ်ရှားလာသည်။ အ သက် ကြီးမှ အရမ်းအညှာလွယ်နေသည့် ဒေါ်နုနုရှိန်၏ ရတနာရွေ ပခြုပ် ကလေးကလည်း ချက်ချင်းဆိုသလို အရည် တစိုစို နှင့် ဖြစ်လာသည်။ ခါတိုင်းညတွေလို ကျေနပ်မွုကောင်းကောင်း ရအောင်လုပ်ပေးမည့် ခရမ်းသီး လေး မရှိတာ ကို မ ချင့်မရဲဖြစ်ရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် အိပ်ယာပေါ် စိတ်ပျက်လက်ပျက်လှဲ ချလိုက်မိပါတော့သည်။ “စန္ဒာ ဒီနေ့ တယ်စောပါလား” ညကကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်လို့ အစောကြီးအိပ်ယာက ထပြီး ကော်ဖီပြင်းပြင်းတခွက် ထိုင်သောက်နေတုန်း စန္ဒာ ဝင်လာသည်။ “ဟုတ်တယ်ဆရာမ၊ ရုံးမှာ ပွဲရှိလို့လေ၊ လူကြီးတွေလဲ လာမယ်တဲ့” ဒါကြောင့်ထင်သည်၊ ခါတိုင်းလို စကပ်နှင့် မဟုတ်ဘဲ စန္ဒာ မြန်မာဆန်ဆန်ထမိန်နှင့် လက်ရှည်အကျ င်္ီလေး ဝတ် ထားသည်။ ကိုယ်က အိပ်ရေးမဝလို့ မကြည်မလင်ဖြစ်နေချိန်မှာ စန္ဒာကတော့ လန်းလန်းဆန်းဆန်း ရှိနေတာ ကြောင့် ဒေါ်နုနုရှိန် စိတ်ထဲကကျိတ်ပြီး မနာလိုဖြစ်နေမိပါသည်။ ညတုန်းက လက်နှင့်လုပ်ရတာကို ဘယ်လိုမှအားမရပါ။ အရင်နေ့တွေတုန်းကလို အစေ့လေးကို ပွတ်ပြီး ခရမ်းသီး နှင့် အပေါက်ထဲ ထိုးရတာမျိုးနှင့် လုံးဝ မတူသည့် အတွက်စိတ်မှာ မတင်းတိမ်နိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်။ စိတ်ကျေနပ် မွု ရဖို့ အကြာကြီးလုပ်ခဲ့ရ၏။ ပြီးတော့လည်း တော်တော်နှင့် အိပ်မပျော်ပါ။ အိပ်ယာပေါ်မှာ တလိမ့်လိမ့် နှင့် နေရ ထိုင်ရခက်နေခဲ့သည်။ အိပ်ပျော်ပြန်တော့လည်း အိပ်မက် မက်ပြီး ပြန်လန့်နိုးရသည်။ အိပ်မက်ထဲမှာ စန္ဒာက ဖဲကြိုးလှလှလေးစည်းထားသည့် အထုပ်တထုပ်နှင့် လာကန်တော့၏။ “ဘာတွေတုန်း စန္ဒာရဲ့ သီတင်းကျွတ်လဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့” “ဆရာမ အတွက်အဆင်ပြေမှာလေး တွေ့လာလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကြုံတုန်းကန်တော့တာ” “အော် …အေး အေး” စန္ဒာ ကန်တော့တာမြင်တော့ အနားမှာရှိတဲ့ အဆောင်သူတွေကပါ ထလာပြီး အတူကန်တော့ကြသည်။ ဘယ် သူတွေ လည်းဆိုတာကိုတောင် ရေရေရာရာ မမှတ်မိတော့ပါ။ ဒေါ်နုနုရှိန် လည်း စိတ်ထဲမှာပျော်ပြီး မုန့်ဝယ်စား ကြဟု စန္ဒာ့ လက်ထဲ ပိုက်ဆံ အထပ်လိုက် ထည့်ပေးလိုက်တာမှတ်မိသည်။ “ဘာတွေများတုန်း နုနုရဲ့” သူတို့ထွက်သွားသည့် အခါ အနားကိုရောက်လာသည့် ဒေါ်အေးစိန်က မေးသည်။ “မသိပါဘူး ဒေါ်အေးစိန်ရယ်၊ စန္ဒာ ဝယ်လာတာကို ကျန်တဲ့ကလေးတွေက ရောကန်တော့ကြတာ” “နုနု ပိုက်ဆံထွက်သွားတာပေါ့၊ မုန့်တော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဖဲပြားပတ်ထားတာဆိုတော့၊ မှန်း ….ပြစမ်းပါဦး” ကိုယ့်ဖာသာ အထုပ် ကို ဆကြည့်နေရာမှ ဒေါ်အေးစိန် လက်ကို ပေးလိုက်မိသည်။ ဒေါ်အေးစိန်က လည်း ကိုင် လွုပ်ကြည့်လိုက်ပြီး “ဘာသံမှလဲ မကြားရဘူး၊ ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်” “ဖွင့်လေ” အပေါ်ဆုံးက ဖဲကြိုးကို ဖြေထုတ်လိုက်ပြီး ပါကင်စက္ကူလှလှ လေးကို မစုတ်ပြဲအောင် သတိထားပြီးခွာသည်။ ဒေါ်အေးစိန် က ဒီအကျင့် ရှိသည်။ထိုစက္ကူကို သိမ်းထားပြီး လိုအပ် ရင်ပြန်သုံးတတ်သည်။ စက္ကူဖယ် လိုက် သောအခါ ကဒ်ထူ လေးထောင့်ဘူးလေး ထွက်လာသည်။
အဖုံးကို ဖွင့်ကာကြည့်လိုက်ရင်း “ဘာကြီးတုန်း၊ အရုပ်ထင်တယ်၊ ဒီကလေး မတွေကတော့လေ” ဗူးထဲကို လက်နှိုက်ကာ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးနောက် “အောင် …မယ်လေး …သောက်ခွေးတော်” အထဲမှာခွေထည့် ထားသည့် ပန်းနုရောင်ရာဘာတံကြီးက ဗြောင်းကနဲ စန့်သွားသည်။ ဒေါ်အေးစိန် လက်ထဲ မှာ ပန်းနုရောင်ရာဘာလိင်တံကြီးက တရမ်းရမ်းခါနေ၏။ ဒေါ်နုနုရှိန် လည်းမြင်လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်းကြောင့် နွုတ် ခမ်းတွေ ဆွံ့အသွားပြီး မျက်လုံး အဝိုင်းသားဖြင့် ကြောင်ကြည့်နေမိသည်။ ဒေါ်အေးစိန် လည်း မြင်သာအောင် မြှောက်ကြည့် လိုက်ပြီးမှ အလန့်တကြား လွတ်ပစ်လိုက်သည်။ နံရံကို သွားမှန်ပြီးနောက် ပြန်ကန်ထွက်လာကာ ဒေါ်နုနုရှိန် ရှေ့မှာလာကြ၏။ “ကမြင်းမ လေးတွေ၊ မိုက်ရိုင်းလိုက်ကြတာ၊ ဒါလုပ်စရာလား” ဒေါ်အေးစိန် မျက်စိရှေ့ကနေ ဝုန်းကနဲပျောက်သွားသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ကတော့ ခြေထောက်ရှေ့မှာကျနေသည့် လိင်တံကြီးကို တုန်ရီဖိုလှိုက်သော ရင်ဖြင့် မျက်တောင်ပင် မခပ်နိုင်ဘဲ စိုက်ကြည့်နေမိသည်။ စန္ဒာ့ အခန်းထဲမှာ မြင်ခဲ့ရတာထက် ပိုကြီးပြီး ပိုရှည်သည်။ အရင်းဖက်ကလည်း အပြားကြီး မဟုတ် ဂွေးဥကြီး နှစ်လုံးပါ အတွဲလိုက် ပါသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် မရဲတရဲဖြင့် လက်ကလေး ကိုဆန့်ပြီးကောက်ယူရန်ဟန်ပြင်စဉ် ဒေါ်အေးစိန် အနားကို ပြန် ရောက်လာသည်။ လက်ထဲမှာလည်း အသားလှီးဓါးကြီး တချောင်းကိုင်ထား၏။ “ကောင်မလေးတွေ၊ ငါနဲ့ တွေ့မယ်၊ လူကြီးကို ဒီလို လုပ်စရာလား” မစင်တုံးကို ကိုင်သလိုရွံရှာစွာ ဖြင့်ဒေါ်အေးစိန် လိင်တံကြီးကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး စားပွဲပေါ်ပစ်တင်ကာ ဒါးကြီး ဖြင့် တဝုန်းဝုန်း ခုတ်တော့သည်။ “အင် …မှတ်ပြီလား၊ အေးစိန်တဲ့၊ ဒါမျိုးစော်ကား တာတော့ မခံဘူး” တဝင်းဝင်းတောက်အောင်ထက်မြ သည့် ဒါးကြီးနှင့် အချက်ပေါင်းများစွာ ဆက်ကာဆက်ကာ ခုတ်လိုက်သည့် အခါ အချောင်းကြီးက ဝက်အူချောင်းကို လှီးချလိုက်သလို အကွင်းလိုက်အကွင်းလိုက် ပြတ်ထွက်ကုန်သည်။ လက်ကလေး ကိုရှေ့ကို တုန်ရီစွာဖြင့် ဆန့်တန်းရင်း “မလုပ်ပါနဲ့၊ မလုပ်ပါနဲ့” ဟုဒေါ်နုနုရှိန် တားမြစ်မိသည်။ ဒါ ပေမယ့် ပါးစပ်သာလွုပ်လို့ရသည်။ အသံက လုံးဝထွက်မလာပါ။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း နှမျောတသစွာ နှင့် အော် ဟစ်ကာတားဆီး သော်လည်း ဒေါ်အေးစိန်က တချက်မှလှည့် မကြည့် သည့် အပြင် ကြားသည့်ပုံလည်း မရပါ။ ထို့ ကြောင့် ဒေါ်အေးစိန် လက်ကို ပြေးဆွဲလိုက်မိရာ ဒေါ်နုနုရှိန် ကို ဒေါသတကြီး ဖြင့်လှည့်ကြည့် ပြီး ဒါးကြီးကို ဝင့် လိုက်စဉ် ဒေါ်နုနု ရှိန်လည်း ကိုယ်ကိုယ်ဝပ်ချလိုက်မိ၏။
ဒီတော့ မှအသံ ထွက်လာသည်။ “မလုပ်ပါနဲ့” ထိုအချိန်မှာပင် ဒေါ်နုနုရှိန် အိပ်ယာက လန့်နိုးသွားရသည်။ ပြန်အိပ်သော်လည်း ဘယ်လိုမှ မပျော်တော့ပါ။ အိပ် ပျော်သလိုလို ဖြစ်နေသော်လည်း အားလုံးကို စိတ်ကသိနေသည်။ လူးလှိမ့်လွန်းလို့ တွန့်ကျေနေသည့် အိပ်ရာ၏ အတွေ့ အထိ၊ တခါတရံဘယ်က လွင့်လာမှန်းမသိသည့် အိမ်မြှောင်စုပ်ထိုးသံ၊ လမ်းမပေါ်မှာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း မောင်းသွားသည့် ကား။ တခါတလေ လေထဲမှာမျောသွားသလို လူကငိုက်မြည်းသွားသော်လည်း ချက်ချင်းပင် တခုခု ကိုအကြောင်းပြုပြီး အသိစိတ်က ပြန်ဝင်သည်။ အိပ်မပျော်သည့် ညတာသည်ရှည်လျား လွန်းလှ၏။ ထို့ အတူပင် အထီးကျန်ဆန်လွန်းလှသည်။ နေ့၏ အလင်းရောင်တွေ အရှေ့ဖက်ဆီက ပေါ်ထွက်လာချိန်မှာတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် ဆက်လက်ပြီးသည်းခံဖို့ မစွမ်း တော့ဘဲ အိပ်ယာထဲက ထွက်ပြီး မျက်နှာသစ်၊ အဝတ်အစားလဲ လိုက်သည်။ မှန်ထဲမှာ ကိုယ့်မျက်နှာ ကိုယ် ပြန် ကြည့်မိသည့် အခါ မမြင်ဖူးသည့် လူတယောက်ကို မြင်နေရသလိုပင်။ အပြင်ကိုထွက်လာချိန်မှာ တဆောင် လုံးတိတ်ဆိတ် နေသည်။ ဒေါ်အေးစိန် တို့ အဖွဲ့ကတော့နိုးကြပြီထင်သည်။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ကော်ဖီတခွက်ဖျော်ပြီး ထိုင်သောက်နေခိုက်စန္ဒာ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ “ဆရာမ ကိုပါပေးကွယ်” စန္ဒာ့ ကိုထမင်းကြော်ပန်းကန် လာချပေးသည့် ကောင်မလေးကို ပြောလိုက်လို့ ထမင်းကြော် ရောက်လာသည်။ တကယ်တော့ ဒေါ်နုနုရှိန် စားချင်စိတ်မရှိပါ။ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိလို့ ထမင်းကြော်စားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် က တဇွန်းချင်း အသက်မပါသလို စားနေသလောက် စန္ဒာကတော့ ခပ်သွက်သွက်စားနေသည်။ နောက်ကျမှာ စိုးနေပုံရ၏။ အိမ်က ကလေးမ တယောက်ကိုလည်း အပြင်မှာသူမ ကိုကြိုသည့်ကားရောက်မရောက်ကြည့်ခိုင်း လိုက်သေးသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ကြည့်နေမှန်းသိသော အခါ မလုံမလဲ အပြုံးနှင့် “ဒီလိုနေ့ မျိုးနောက်ကျရင် အလုပ်ပြုတ်မှာ ဆရာမ ရဲ့” အလုပ်ကိုစောစော ရောက်ဖို့ စိတ်စောနေသည့် စန္ဒာသည် ညတုန်းက သူမ၏ အတုကြီးကို အသုံးချချင်မှချ လိမ့် မည်။ ခရီး မထွက်ခင်က သိမ်းသွားခဲ့သည့် နေရာကနေ အပြင်ကိုထုတ်ထား၊ မထား ကို ဒေါ်နုနုရှိန် သိချင်စိတ် ပေါက်လာသည်။ ဒါပေမယ့် အခုချက်ချင်းတော့ မဖြစ်သေးပါ။ အဆောင်မှာ လူတွေရှိနေသေးသည်။ ထိုအချိန် မှာပင် မနက်ခင်း ကျောင်းတက်ရမည့်၊ အလုပ်ဝင်ရမည့် အဆောင်သူတွေ အိပ်ယာက ထလာကြသည်။ အိမ် သာ ခန်းတွေဖက်ဆီက၊ ရေချိုးခန်းတွေ ဖက်ဆီက အသံတွေ ထမင်း စားခန်းထဲအထိ ပျံ့လွင့်လာ၏။ စန္ဒာလည်း အိတ် လေး လွယ်ပြီး ခပ်သုတ်သုတ်ပြေးလေပြီ။ စန္ဒာ့ အခန်းကို ဝင်ရှာဖို့ အချိန်တော်တော်စောင့်လိုက်ရပါသည်။ မနက် ကိုးနာရီကျော်လောက်မှ တဆောင်လုံး ရှင်းလင်း တိတ်ဆိတ်သွား၏။ ဒေါ်နုနုရှိန် ဝရန်တာတလျှောက် လိုက်ကြည့်ရာ အခန်းတွေအားလုံး ပိတ်ပြီး တ ယောက်မှ မကျန်တော့ကြောင်းတွေ့ရမှ သော့တွဲပြန်ယူပြီး စန္ဒာ့ အခန်းကို ဝင်ခဲ့သည်။ အရင်နေ့ ထက်ရှင်းလင်း သပ် ရပ်နေသော်လည်း ဒေါ်နုနုရှိန် တွေ့လိုသည့် အရာကိုတော့ မတွေ့ရပါ။
ထားနေကျနေရာမှာလဲ မရှိ၊ စန္ဒာ နေ ရာပြောင်းထားတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ မသွားခင်သိမ်းသွားသည့် နေရာကနေ ပြန်မထုတ်ရသေးတာပဲဖြစ်မည်။ဟို နားဒီနား အကြိုအကြား ကိုလိုက်အကဲခပ်ကြည့်ပြီး လက်လျှော့ကာ ပြန်ခဲ့ရသည်။ အိပ်ယာပေါ်မှာပြန်လှဲနေစဉ် မျက်လုံးတွေလေးလာပြီး ဒေါ်နုနုရှိန်မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားရာ ဒေါ်အေးစိန် လာနှိုးမှ နိုးသွား၏။ “ဒီနေ့ ဈေးသွားရမယ် နော် နုနု” ဒေါ်နုနုရှိန် အပြင်မထွက်ချင်ပါ။ အိပ်ယာထဲမှာပဲ ခွေနေချင်သည်။ “ကျွန်မ ခေါင်းတွေ တအားကိုက်နေလို့ ဒေါ်အေးစိန် တက္ကဆီ နဲ့ပဲသွားလိုက်နော်” မအီမသာ ဟန်ပန်ကိုလည်းမြင်နေရသောကြောင့် ဒေါ်အေးစိန် ယုံသွားသည်။ “အင်းလေ၊ ရတာပဲ၊ နုနုကြည့်ရတာလဲ မလန်းဘူး၊ ဆေးသောက်ပြီးပြီလား” “သောက်ထားတယ်၊ သောက်ပြီး မှိန်းနေတာ” “နေ့လည်စာရော စားမှာလား” “စားမယ်” “ဒါဆိုလဲ ကောင်မလေးတွေကို မှာခဲ့မယ်” ဒေါ်အေးစိန် ထွက်သွားပြီးနောက် ဒေါ်နုနုရှိန် အိပ်ပျော်သွားပြန်သည်။ နိုးလာလို့ အောက်ကို ဆင်းလာတော့ ဒေါ် အေးစိန် ဈေးကိုထွက်သွားပြီဖြစ်သည်။ခြံထဲမှာ ကိုလှရွေတို့ လင်မယား အလုပ်လုပ်နေကြတာကို ခနဆင်းကြည့် ပြီး အခန်းသို့ပြန်ကာ ရေချိုးအဝတ်လဲသည်။ ရေမချိုးခင် အကျင့်ပါနေသည့်လက်က ပေါင်ကြားကိုနှိုက်မိသေး သော် လည်း စိတ်ထဲက ဆန္ဒကို ကြိုးစားတွန်းလှန်လိုက်သည်။ အာရုံပြောင်းသွားစေဖို့ ရေပန်းကို အရှိန်ပြင်းပြင်း ဖွင့်ပြီး ချိုးလိုက်သည်။ ခေါင်းလည်း လျှော်ပစ်လိုက်၏။ စိတ်ထဲမှာ လန်းဆန်းသလိုဖြစ်သွား မှ ရေချိုးတာကိုရပ် လိုက်သည်။ လူကနည်းနည်း ကြည်လင်သလိုပြန်ဖြစ်သွားလို့ နေ့လည်စာစားဖို့ အောက်ကိုပေါ့ပါးစွာ ဆင်းခဲ့သည်။ မနက်က ထက်တော့ စားလို့ ဝင်ပါ၏။ ထမင်းစားပြီးတော့ မီးဖိုထဲမှာ ဒေါ်အေးစိန် ကိုယ်စားဟိုဟိုဒီဒီ ညွန်ကြားရင်း စင်တခု ပေါ်မှာ ဆန်ကာနှင့် ထည့်ထားသည့် သခွားသီး သုံးလုံးကိုသွားတွေ့သည်။ ကြုံလှီပိန်ရွုံ့ပြီး အပွေး တက်နေသည့် ကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့ အသီးတွေကြားတွင် ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့် တလုံးက ဒေါ်နုနုရှိန် ကို၏ ခြေလှမ်းတွေကို ရပ် တန့်သွားစေသည်။ အရင်နေ့က ရခဲ့သည့် ခရမ်းသီးထက် တော့ကြီးသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျက်စိကစား လိုက် ပြီးနောက် ထိုသခွားသီးကို ဖျပ်ကနဲ ကောက်ယူလိုက်မိသည်။ ဒီတိုင်းလည်း ကိုင်မသွားချင်လို့ အကျ င်္ီပွပွကြီးထဲ သို့ ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး အိပ်ခန်းဆီ ခပ်သွက်သွက် ပြန်တက်လာခဲ့သည်။ နောက်ကိုလည်း လုံးဝလှည့်မကြည့်တော့ ပါ။ ဘယ်သူမှ မမြင်လို့တော့ ထင်မိပါသည်။ အခန်းထဲပြန်ရောက်မှ ယူလာသည့် သခွားသီးကို သေသေချာချာထုတ်ကြည့်ရသည်။ အရွယ်အစားက ကြက်ဥ ခပ်သေးသေး လောက်တော့ရှိသည်။ အရှည်ကတော့ ရှစ်လက်မကိုးလက်မလောက်ရှိမည်ဟု မှန်းဆမိသည်။ ကြည့်နေရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် အနည်းငယ်ကြောက်စိတ်ဖြစ်လာသည်။
စန္ဒာ့ ဟာကြီးလောက် မကြီးမား မရှည်လျား သော်လည်း အရင်သုံးဖူးသည့် ခရမ်းသီး နှင့်စာရင် ကြီးနေလို့ သုံးဖို့ မဝံ့ မရဲဖြစ်နေသည်။ နောက်ဆုံးတော့ စမ်း ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး အရင်ဆုံးရေသွားဆေးလိုက် သည်။ ပြောင်စင်သွားအောင် ဂရုတစိုက်ပွတ်တိုက်ပေး လိုက် သည့်အခါ ထူးခြားမွုတခုသွားတွေ့သည်။ သခွားသီးက ခရမ်းသီးလောက် မချောမွတ်။ ရေဆေးလိုက်သည့် အခါ ပိုပြီးသိသာလာ၏။ ဒေါ်နုနုရှိန် ထမိန်ကိုမတင်လိုက်ပြီး အဝမှာသခွားသီးကိုတေ့ကြည့်သည်။ လွယ်မည်လို့တော့ မထင်။ ပေါင်ကိုတ အားဖြဲပြီး ထိုးကြည့်သည့်အခါအဝ တွင်တစ်နေသည်။ နာ လည်းနာသည်။ ကွဲထွက်သွားတော့မတတ်အောင်ခံ ရခက် လွန်းလှ သည်။ ပြန်ယူကာမြှောက်ကြည့်ရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် မောနေသည်။ ရင်တွေခုန် လက်တွေတုန် နေ သည်။ အသက်ကို မနည်းရွုနေရ၏။ ဒီဟာလောက်တောင် ခက်နေရင် စန္ဒာ့ ဆီကဟာကြီးမျိုးဆိုရင် ဆိုဖွယ် ရာမရှိတော့ပြီ။ စန္ဒာ့ လိုမိန်းကလေးပင် သွင်းလို့ရပါလျှက်နှင့် မိမိလို ဖွံ့ထွားတောင့်တင်းသည့် မိန်းမက ဘာ ကြောင့် မရရ ပါ သနည်း။ နားထဲမှာ ဂျယ်သုံးရသည် ဆိုသည့် စန္ဒာ့စကားသံ ပြန်ကြား ယောင်လာ၏။ ဒေါ်နုနုရှိန် ကိုယ်တိုင်လည်း လက်ဆောင် ဝယ်ပေးဖူး၏။ ထရပြီး ထမိန်ကိုခပ်တင်းတင်းပြင်ဝတ်လိုက်ကာ စားပွဲပေါ်က ပိုက်ဆံအိတ်ကို လှမ်းယူ လိုက်၏။ မှန်ထဲက အ ရိပ်ကို တချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်း အဝတ်လဲဖို့ မလိုဟု ဆုံးဖြတ် လိုက်သည်။ “ကိုလှရွေ၊ ခြံတံခါး ဖွင့်လိုက်၊ ကျွန်မ အပြင်သွားဦးမယ်” ဖွင့်ထားသည့် တံခါးကနေ တရှိန်ထိုးမောင်းထွက်သွားပြီး လမ်းတလျှောက်မျက်စိကစား သွားသည်။ စတိုး ဆိုင်ကြီးကြီး တဆိုင်တွေ့တာနှင့် ရပ်ပြီးဝင်ကြည့်လိုက်သည်။ အဝနား မှာ ဂျယ် ဗူးတွေ၊ အတောင့်တွေတွေ့ သော် လည်း မကြည့်တော့ပါ။ အတွင်းဖက်မှာမြင်ရသည့် ကလေး ပစ္စည်းတွေရောင်းသည့် ကောင်တာဆီ တန်းဝင် သွားပြီး ဗူးကြီးတဗူး ဝယ်ပစ်လိုက် သည်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဒေါ်အေးစိန်လည်း ပြန်ရောက်နှင့် နေသည်။ အပြင်မသွားတော့ပါ ဟု ပြောပြီးမှ ထွက်သွား သည့် ဒေါ်နုနုရှိန်ကို စူးစမ်းသည့် အကြည့်ဖြင့်ကြည့်သည်။ “ဆေးသွားဝယ်တာ” ခပ်တိုတိုရှင်း ပြလိုက်ပြီး အခန်းထဲတန်းဝင်လာသည်။ ဒေါ်အေးစိန်ကလည်း နောက်ကလိုက်လာ၏။အလိုက်ကန်းဆိုးမသိသည့် ဒေါ်အေး စိန်ကို စိတ်ထဲက မကြည်တော့ပါ။ “ဒေါ်အေးစိန်၊ ဘာတုန်း” “နေမကောင်းဘူးဆိုတော့ ညနေစာဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့” “ဆေးသောက်ပြီးတရေးလောက် အိပ်လိုက်ရင် ကောင်းသွားမှာပါ” “အင်း …အင်း …ပြီးတာပဲ” ကုတင်ပေါ်မှာ သခွားသီးကို ဒီတိုင်းပစ်တင်ထားခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ ဖြင့် ဒေါ်အေး စိန်က အခန်းဝ မရောက်မှီပြန်လှည့်သွားသည်။
တံခါးကို ပြန်ပိတ်ရင်း မိမိ မော နေသည်ကို ဒေါ်နုနုရှိန် သတိထားမိသည်။ စိတ် တွေလည်း အရမ်းလွုပ်ရှားနေ၏။ တုန်တုန် ရီရီ ဖြင့် ထမိန်ကို ကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်တက် လိုက် သည်။ ပြီးတော့ ဗူးကိုဖွင့် ပြီး သခွားသီးပေါ် ဆီတွေလောင်းချလိုက်ပြီး ပတ်ပတ်လည်မှာ စိုရွဲသွားအောင် ပွတ် လိုက် သည်။ ပြီးတော့မှ ကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်ပြီးနောက် ပေါင်ကိုကားကာ သခွားသီး ကို အဝမှာ တေ့လိုက်၏။ တဝုန်းဝုန်းခုန်နေသည့် ရင်ခုန်သံတွေကြောင့် မျက်စိကိုမှိတ်ကို ထိုးသွင်းလိုက်၏။ ရှေ့ကို နည်းနည်း ပိုတိုး လာ သလိုရှိသော်လည်း သိပ်မဝင်ချင်။ ကြွက်သားတွေက တောင့်ခံနေ သည်။ နားလည်းနာ၏။ ထို့ကြောင့် သခွား သီး ကို လုံးဝရွဲစိုသွားအောင် ဆီထပ် လောင်းလိုက်သည်။ အစိလေးကိုလည်း သာသာယာယာပွတ်ပေးပြီး အထဲက အရည်တွေ စိမ့် လာအောင် လုပ်ပေးလိုက်သည်။ အတွင်းဖက်မှာလည်း စိုလာတော့မှ မျက်စိကိုမှိတ်ကာ သခွား သီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်၍ အားကုန်ဖိသွင်းလိုက်သည်။ “ဖျစ်” ကနဲမြည် သွား သည့် အသံက အခန်းထဲမှာ ဟိန်းသွားသယောင်ရှိ၏။ “အု” နှာခေါင်းထဲကရော ပါးစပ်ထဲကပါ လေတွေ တဟုန်ထိုးထွက်သွားသည်။ အထဲမှာပြည့်နင့်ကျပ်ပြီး ကြွက်သားစိုင် တွေက တဆစ်ဆစ်နှင့်နာလာ၏။ နာကျင်မွုကို ဥပေက္ခာပြု လိုက်ပြီး ထပ်၍အားထည့်ဖိချလိုက်ရာ လက်ဖနောင့် နှစ်ခုက တွင်းဝကို ဖတ် ကနဲလာရိုတ်သည်။ အားလုံးနီးပါးဝင်သွားပေပြီ။ ဒေါ်နုနုရှိန်လည်း ယောင်ပြီး အပေါ်ကို ကော့ထိုးလိုက်မိ၏။ အောင်အောင်မြင်မြင်ဝင်သွားပြီဆိုတော့ ဆက်လုပ်စရာတခုသာ ရှိတော့သည်။ အံကိုခဲပီး တဖြည်းဖြည်းချင်း အထုတ်အသွင်းပြန်လုပ်သည်။ ပြည့်နင့်နေသည့် အရသာက အတွင်းသားတွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ထိ၏။ ခုချိန်မှာ နာကျင်မွုဆိုတာကို ဒေါ်နုနုရှိန် အလေး မထားတော့ပါ။ ဘာမှမဆိုင်သည့် စ အိုဝကလေးပင် တင်းပြီးကိုက်ခဲလာသည့်တိုင် နောက်ဆက်တွဲရောက်လာမည့် အရာတွေက ပိုပြီးရင်ဖိုလှိုက် မော ရမည်မှန်း စိတ်ကသိနေသည်။ “အား ..အမယ်လေး ….ကျွတ်.ကျွတ်” ဒေါ်နုနုရှိန်၏ ကိုယ်ခန္ဓာကလည်း အားတက်သရောတုန့်ပြန်သည်။ တစိမ့်စိမ့်ထွက်လာ သည့် အရည်တွေ က လည်း များသထက်များလာ၏။ အမည်ဖေါ်ပြခေါင်းစဉ်တပ်ရန် မစွမ်းသာ သည့်ဝေဒနာ၏ စေ့ဆော်မွုတောင့် ဒေါ်နုနုရှိန် ခေါင်းတခါခါလည်တခါခါ နှင့် တစာစာညည်းရင်း ပိုပြီးမြန်သထက်မြန်အောင် အသွင်းအထုတ် လုပ်နေမိသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ဘာရုံထဲမှာ အခုလက်ရှိဖြစ်နေသည့် ခံစားချက်တွေမှအပ ဘာဆိုဘာမှ မသိတော့ပါ။ ပါးစပ်က ဘာ တွေပြောပြီး ဘာတွေညည်းနေမိမှန်းလဲ မသိတော့။ တရိပ်ရိပ် တရစ်ရစ် နှင့် တကိုယ်လုံးသွက်သွက်ခါနေသလို ဖမ်းစားထားသည့် အရသာက တကိုယ် လုံး ကိုလွမ်းခြုံထား၏။ အထဲမှာနာကျင်ရမည်၊ ထိခိုက်သွားမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်စိတ် ပျောက်ဆုံး သွားရသည်။ စွမ်းနိုင်သမျှအားအင်ကိုသုံးပြီး ထိသထက်ထိအောင်ဆောင့်ထိုးနေမိသည်။ စိတ် ခံစားရမွုတွေ၏ အမြင့်ဆုံးအထွဋ်အထိပ် ကိုရောက်ရှိသွားပြီးချိန် မှာတော့ လူတကိုယ်လုံး လေ ထဲသို့ လွင့် မြောက်တက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်။
မြောက်တက်သွားသော်လည်း ချက်ချင်းပြန်ကျမလာ၊ ၀ါဂွမ်းစလေး လေထုထဲမှာလွင့်မျော နေ သလို လေဟုန်မှာ စီးရင်း ရှိသမျှအားအင်တွေ အကုန်ပျောက်ဆုံးသွားသည်။ အထဲက သခွားသီး ကိုတောင်ကြိုးစားပြီး မနည်းပြန် ထုတ် လိုက်ရသည်။ အားလုံးအပြင်ကို ရောက်သွား ပြီးချိန်နောက်မှာတော့ ဘာဆိုဘာမှ ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ ရီဝေစွာ မျောလွင့်ရင်း နှင့် တဖြည်း ဖြည်းချင်း အိပ်မောကျသွားသည်။ အလင်းရောင်တွေ ပျယ်လွင့်ပြီးညသို့ ဝင်လုလုညနေစောင်းကို ရောက်မှ ဒေါ်နုနုရှိန် ပြန်နိုးလာ ၏။ ပေါင်ကြားထဲ မှာလည်း တမျိုးကြီး ဖြစ်နေသလို လူကလည်းပင်ပန်းနေ၏။ ဘေးမှာကျနေသည့် သခွားသီးကြီးကို စိုက်ကြည့်ရင်း တခါတလေ စန္ဒာ သူ့ဟာကြီးကို အရည် တစိုစို နှင့် ဘာကြောင့်ထားခဲ့သည်ကို အခုမှနားလည်မိသည်။ ခံစားမွု အ မြင့်ဆုံးကို ရရှိပြီးချိန် တွင် ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ချင်တော့သည့် သဘာကို နားလည်လိုက်လို့ ဖြစ်သည်။ အိပ်ရာမှ ဖြည်းဖြည်းထရင်း နွမ်းနယ်မွုတွေပြေပျောက်သွားအောင် ရေချိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်၏။ သခွားသီးကြီးကို ရေပြောင်အောင်ဆေးကာ ဘီရိုထဲမှာ သိမ်းပြီးမှ ရေချိုးသည်။ ရေမချိုးခင် အမွေးရိတ်ရင်း ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ပြန် ကြည့် လိုက်ရာ အရင်ထက်ဖေါင်းမို့ပြီး နီရဲနေသည်ကို တွေ့ ရသည်။ အခုထိအရည်တွေကလည်း တစိမ့်စိမ့် စို နေသေး၏။ ရေချိုးလိုက်သည့် အခါနွမ်းနယ်မွုတွေ အနည်းငယ်လျော့ပါးသွား၏။ ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာတကိုယ်တည်း ဘဝအတွက် စိတ်လွုပ်ရှားဖွယ်ရာ ဖြေသိမ့်မွုတခုကို ရလိုက် ကြောင်းတွေး မိပြီးနောက်တွင် လူကလည်း တက်ကြွရွင်လန်း လာ သည်။ ထမင်းစားဖို့ အောက်ို ဆင်းလာတော့ ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်နေသည့် ဒေါ်နုနုရှိန်ကိုကြည့်ပြီး ဒေါ်အေး စိန်က “တရေးအိပ်လိုက်တော့ အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ ဟုတ်လား” “ဟုတ်တယ်” “ညနေစာဘာချက်ရမလဲ လို့တောင် လာမေးဦးမလို့၊ နုနုအိပ်ပါစေလေဆိုပြီး မလာတာ” “ရပါတယ်၊ အဆင်ပြေသလိုပဲလုပ်ပါ” စိတ်ကြည်လင်နေလို့ နည်းနည်းနွမ်းနေပေမယ့် ဒေါ်နုနုရှိန် ထမင်းစားလို့ဝင်သည်။ ထမင်းစား နေချိန်မှာ သခွား သီးတလုံးပျောက်ဆုံးသွားသည့် အတွက်ဒေါ်အေးစိန် ကောင် မလေးတွေကို မေးနေသံကြားရသည်။ “ငါ သေသေချာချာ မှတ်မိပါတယ်၊ မနက်က သုံးလုံးကျန်တာပါ” မတတ်သာတော့လို့ ဒေါ်နုနုရှိန် ဝင်ပါလိုက်သည်။ တော်ကြာ ဒေါ်အေးစိန်က ကောင်မလေး တွေကို သခွားသီး တ လုံးအတွက်နှင့် ဆူပူကြိမ်းမောင်းနေဦးမည်။ “ကျွန်မ နေ့ခင်းက စားလိုက်တယ်ဒေါ်အေးစိန်ရေ၊ ဒေါ်အေးစိန်ဈေးသွားနေတုန်းက” “အော် …ဒါဆိုလဲ ပြီးရော” ထမင်းစားပြီးနောက် စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာဖြင့် ခြံထဲဆင်းလာခဲ့သည်။
ဒီညမှာမှ လမင်းက ထိန်ထိန်သာနေ၏။ လ ရောင်အောက်တွင် လမ်းလျှောက်ရင်း ခြံဝသို့ ရောက်လာသည်။ လရောင်က စိတ်ကိုပိုပြီး ကြည်နူးရွင်လန်းစေ၏။ ခြံထဲမှာ ဖြတ်တိုက်လာသည့် လေက လည်းနူးညံ့ ကာ လတ်ဆတ်နေ၏။ “နုနု နေကောင်းသွားပြီလား” “ကောင်းသွားပြီ၊ နာရာရား ကိုဘယ်သူပြောလဲ” “အေးစိန်ပြောတာ” နာရာရားနှင့် စကားပြောရင်း လမ်းမပေါ်မှာ တရွေ့ရွေ့ နှင့် လျှောက်လာနေသော မစိုးစိုး နွယ်ကို လရောင်မှာ ထင်ရှားစွာ မြင်ရသည်။ မစိုးစိုးနွယ်ကတော့ ဒီဖက်ကိုလှည့်တောင် မကြည့်ဘဲ သွားနေသည်။ ဒီနေ့ တော့ အရင် လိုပုံမရပါ။ သူမ၏ ဟန်အတိုင်း ညင်ညင်သာသာ လှမ်း လာနေသည်။ အရောင်ရင့်ရင့် တီရှပ်ပွပွ နှင့် အရောင်ခပ် ဖျော့ဖျော့ ထမိန်ဝတ်ထားသည့် မစိုး စိုးနွယ် ခြံဝက အဖြတ်တွင် နာရရားက ကွမ်းတံတွေးပျစ်ကနဲ ထွေးထုတ် လိုက် သည်။ သင်္ကာ မကင်းသော စကားကိုပြောဦးမည် ဆိုတာသိလို့ ဒေါ်နုနုရှိန် ပြုံးလိုက်မိ၏။ “ခြံတံခါး ဖွင့်ပေးစမ်းပါ နာရရားရယ်၊ နုနုအပြင်မှာ ထွက်လျှောက်လိုက်ဦးမယ်” “ဟိုကောင်မလေး နောက်ကို လိုက်ချောင်းမလို့ လား” ခါးကြားက သော့တွဲကြီးကို ဖြုတ်ရင်းနာရရား မေး၏။ “ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ နာရရားကလဲ၊ လသာလို့ လမ်းလျှောက်ချင်လို့ပါ” မြီးကောင်ပေါက် အပျိုမလေး တယောက်လို ခြေကိုဆောင့် ပြီးဒေါ်နုနုရှိန် ပြောလိုက်မိ၏။ ပြီးတော့ နာရရား ဖွင့် ပေးသည့် တံခါးကနေ လရောင်ကြောင့် လင်းလက်နေသည့် လမ်းမပေါ်တက်လိုက်၏။ သာလွန်းသည့် လရောင် ခြည်ကြောင့် လမ်းမီးတိုင်တွေ၏ အလင်းရောင်တွေက ပင်မှိန်ဖျော့လို့ သွားသည်ဟု ဒေါ်နုနုရှိန် ထင်မိသည်။“နုနုရေ ဒီနေ့တော့ ခရမ်းသီးကို ပုဇွန်ခြောက် များများနဲ့ နှပ်ပေးမယ်၊ ကြိုက်တယ် မဟုတ်လား” “ကြိုက်ပါတယ်” နှပ်တာမကြိုက် အစိမ်း အတိုင်းပဲကြိုက်တယ်ဟု စိတ်ထဲက ပြောရင်း ဒေါ်အေးစိန် ပြသည့် ခြင်း တောင်းထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ အရှည် တပေ နီးပါးလောက်ရှိနိုင်သည့် ခရမ်းသီး ထွား ထွားဖြောင့်ဖြောင့် ကြီးတွေကို တွေ့လိုက်ရတော့ ရင်ထဲ ဒိတ်ကနဲ ခုန်သွားသည်။ ဒေါ်အေးစိန် မ သိအောင် ဘယ်လို ယူရင်ကောင်းမလဲ ဟုတွေး ရင်း မီးဖိုထဲ ဝင်သွားသည့် ဒေါ်အေးစိန် ကို နောက်ကနေလိုက် ငေးနေမိ၏။ ခနလောက်နေတော့ လိုက်ဝင်သွား သည့် အခါ ကောင်မလေး တယောက်က ခရမ်းသီးတွေကို လှီးတောင်လှီးနေပြီ ဖြစ်သည်။ နှမျောတသစိတ်ကို ထိန်းပြီး ဒေါ် နုနုရှိန် မီးဖိုထဲက ပြန်ထွက်ခဲ့ရ၏။ တော်သေးသည်။ လက်ရှိသုံးနေသည့် ခရမ်းသီးက သုံး လို့ရနေ သေးသည်။ အခုဝယ်လာသည့် အသီးလောက်တော့ မထွားပါ။ ခရမ်းသီးတလှည့်၊ သခွားသီးတလှည့် နှင့် ဒေါ်နုနုရှိန် အဆင်ပြေနေတာတော်တော်ကြာပြီ ဖြစ် သည်။ အဆောင် မှာ ကျွေးရန် အရည်တခွက် နှင့် ငပိရည်တို့စရာ ကိုလည်း သေသေချာချာ လုပ်ပေးဖို့ ဒေါ်အေးစိန် ကို ညွန်ကြား လိုက်ပြီး သည့် နောက်တွင် မီးဖိုချောင်၌ ခရမ်းသီး နှင့် သခွားသီး သိပ်မပြတ်တော့ပါ။ အရင်လို တလုံးထဲကို မပုတ် သိုး မညှိုးနွမ်းရအောင် ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းရတာ မျိုးသိပ်မရှိတော့ပါ။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက အရွယ် အစား ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အေးစိန်ကလည်း ဒေါ်နုနုရှိန် အသုံးချဖို့ မဟုတ်၊ မီးဖိုချောင်အတွက် အဆင်ပြေအောင် ဝယ်ခြင်းသာ ဖြစ်ရာ ဒေါ်နုနုရှိန် စိတ်ကြိုက်က အမြဲလိုမရ၊ ကောက်တာက ကိစ္စ မရှိပါ၊။ စင်း လုံး ချောဖြောင့်နေတာထက် ခပ်ကောက် ကောက်ကလေးက လှဲနေရာမှ ထိုးရာတွင်ပိုအဆင်ပြေ ကြောင်း ဒေါ်နုနုရှိန် အတွေ့ အကြုံအရ သိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
အရွယ်အစား သေးငယ်ရင်သာ အာ သာမပြေသည့် အတွက် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရသည်။ သီးမွေး ငှက်ပျောသီးနှင့် လည်းဒေါ်နုနုရှိန် စမ်းကြည့်ဖူးသည်။ ဒါပေမယ့် အစိမ်းရမှ အဆင်ပြေ ၏။ ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်လို့ရတတ်သည့် အမှည့်တွေဆိုရင် အားစိုက်ထိုးလိုက်ရင် ကျိုးတာတို့ အခွံ ကွဲထွက်သွားတာတို့ ဖြစ်တတ် သည်။ ကွဲသွားရင် အရည်တွေနှင့် ငှက်ပျောသီးရောပြီး ချွဲပစ်သွားသည်။ ပြီးရင် မနည်းပြန်ဆေးထုတ်ရ၏။ ဒါ ကြောင့် ဒေါ်နုနုရှိန်က အခွံမာသည့် ခရမ်းသီး နှင့် သခွားသီးကိုပဲ သဘောကျသည်။ အဲဒီနှစ်ခု ဆိုရင် ခရမ်းသီးကို ပိုသဘောကျ ၏။ မျက်နှာပြင်က နဂိုထဲက ချောမွေ့နေတော့ ဆီများများ မလိုသည့်အပြင် လက်ကိုင်စရာညှာတံ လေးပါလို့ အားလွန်ပြီး အဆုံးရောက်သွားလည်း ပြန်ဆွဲဖို့ အဆင်ပြေသည်။ သခွားသီး ကျတော့ လက်ကို ထိန်း နေ ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်အေးစိန် အခုဝယ်လာသည့် ခရမ်းသီးကို ဒေါ်နုနုရှိန် နှမျောနေမိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ကိစ္စတော့ မရှိပါ၊ လက်ရှိဟာက သုံးလို့ ရနေသေးသည့် အတွက် စိတ်ထဲမှာ သိပ် ထားမနေတော့ပါ။ လတ်တလောသုံးနေသည့် အသီးမကောင်းတော့သည့် အချိန်တွင် ဒေါ်အေး စိန်ဝယ်လာသမျှက လည်း စိတ် တိုင်း မကျရင် ဒေါ်နုနုရှိန် အလွန်စိတ်ညစ်ရသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ဘဝ တွင် စိတ်ဖြေစရာကလည်း ဒီတခုသာ ရှိ လေရာ ဒါကိုထိခိုက်ရင် မခံမရပ်နိုင်အောင် စိတ် တိုရသည်။ အဲလိုနေ့ မျိုးဆိုရင် စန္ဒာ့ ဟာကြီး ပြေးယူချင် စိတ် ပေါက်၏။ ကိုယ့်ဖာသာ အဆင်ပြေနေတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် စန္ဒာ့ အခန်းသို့ မရောက်တာတောင် အတော်ကြာပြီ ဖြစ်သည်။ခုလောက်ဆိုရင် စန္ဒာလည်း အပြင်ကို ပြန်ထုတ်ပြီးလောက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်အေးစိန်က ကောက် ကောက်ကွေ့ကွေ့ နှင့် အပွေးတက် နေသည့် သခွားသီး ပိန်ချိချိတွေ ဝယ်လာသည့် တရက်မှာတော့ စိတ်မထိန်း နိုင်တော့ဘဲ စန္ဒာ့ အခန်း ကို ဝင်ခဲ့မိသည်။ ထားနေကျနေရာကို ကြည့်လိုက်တော့ တန်းတွေ့သည်။ သခွားသီး၊ ခရမ်းသီးတွေလို ပြောင်ချောမဟုတ်ဘဲ အဖုအထစ် အရစ်တွေပေါ်နေသည့် ဟာကြီးကို ကောက်ယူ လိုက်မိသည့် ဒေါ်နုနုရှိန်၏ လက်တွေတုန်နေ၏။ ပိုကောင်း သည့် အရသာကို ခံစားရတော့မည်ဟုလည်း တွေးရင်း ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသည်။ အသင့် ယူ လာသည့် စက္ကူအိတ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်ပြီး ခပ်မြန်မြန်ပြန် ထွက်လာ ခဲ့သည်။ စန္ဒာ ပြန်မလာ ခင် ပြန်ထားရမှာ ဆိုတော့ အချိန်ဖြုန်းလို့ မဖြစ်ပါ။ အခန်းထဲရောက်သည်နှင့် စန္ဒာ့ ဟာကြီးကို ရေစင်စင်ဆေးလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ သေသေချာ ချာကြည့်နေ မိ သည်။ အရင်းက အပြားဝိုင်းလိုအရာက လေစုပ်ခွက်ဖြစ်ကြောင်း တွေလိုက်ရပြီး နောက် ကုတင်ဘောင်မှာ၊ ကု လားထိုင်မှာ လိုက်ကပ်ကြည့်သည်။ ကပ်လို့မရ ပြန်ကွာကွာကျသည်။ မှန်တင်ခုံက မှန်မှာကပ်လိုက်တော့မှ ဖတ် ကနဲကပ်သွား၏။ မှန်မှာ ငေါက်တောက်ကပ်နေသည့် ဟာကြီးကို ကြည့်ရင်း ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟု စဉ်းစားနေမိ သည်။ မှန်မှာကပ်ပြီးတော့ လုပ်ရင်မရပါ။ မှန်တင်ခုံပေါ်မှာ တက်ခွထိုင်ရင် ကျိုးကျပြီး လူကြားမကောင်းသူကြား မကောင်း တွေဖြစ်တော့မည်။လက်နှင့် ကိုင်ထည့်ရင်ရသော်လည်း ဒီဟာကြီးကို ဝင်အောင် ထည့်ဖို့ မိမိမှာ အား အင်ရှိပါမလားဟု တွေးမိသည်။
စိတ်အမှတ်မဲ့စွာဖြင့် မှန်သားကို လက်နှင့် ပွတ်ကြည့်နေရင်း ရေချိုးခန်းထဲက ကျောက်ပြားခင်း ကြမ်းပြင်ကို သတိ ရလိုက်သည်။ မှန်ကနေ ပြန်ခွာယူပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်လာ ခဲ့သည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ထင်သည့် အတိုင်းပင် ကျောက်ပြား မှာ ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲကပ်သွားသည်။ အပေါ်ကိုမတ် မတ်ကြီးထောင်တက်နေသည့် ဟာကြီးကိုကြည့်ရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် က တုန်ကရီဖြစ်လာသည်။ ခေါင်းတွေလည်း ရီဝေလာပြီး စိတ်ညှို့ခံထားရသူတယောက်လို ရေချိုးခန်းထဲက ပြန် ထွက် လာ ပြီးနောက် အဝတ်တွေ အကုန်ချွတ်ချလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဘီရိုထဲက ဆီပုလင်းကိုယူပြီး ရေ ချိုးခန်း ထဲသို့ ဒရီးဒယိုင်ဖြင့် ပြန်ဝင်လာခဲ့သည်။ ဆီပုလင်းကို ဖွင့်ပြီးထိပ်ကနေ တဖြည်းဖြည်းချင်း လောင်းချရင်း လက်တဖက်နှင့် အစိလေးကို ပွတ်ကာ အဆင် သင့်ဖြစ်ဖို့ လုပ်ထားလိုက်သည်။ စိတ်ကအရမ်းလွုပ်ရှားနေ သည့် အတွက် ကြာ ကြာမဆွလိုက်ရပါ။ ဒေါ်နုနုရှိန် လက်ကိုရွဲရွဲ စိုသည်အထိ အရည်တွေထွက်လာသည်။ ဆီတွေ ရွဲပြီးပြောင်လက်နေသည့် ဟာကြီးကို လက်နှင့် ဆုပ်၍ ဆီတွေနှံ့သွားအောင်ပွတ်ပေးလိုက်ပြီး နောက် လိုလိုမယ်မယ် နောက်ထပ်နည်းနည်း ထပ်လောင်း လိုက် သည်။ စိတ်ချရပြီထင်တော့မှ အချောင်းကြီးပေါ်မှာ ကိုယ်ကိုကြွပြီးခွထိုင်လိုက်သည်။ တုန်ရီနေသည့် လက်တွေနှင့် အဝ မှာ တည့်တည့် ဖြစ်အောင်နေရာချပြီးနောက် မျက်စိကို မှိတ်၍ တကိုယ်လုံး အားနှင့် ဖိထိုင်ချလိုက်သည်။ “ဗျစ်…ဗျစ်” အချောင်းကြီး၏ ဘေးပတ်လည်ကအရစ် နှင့် ဖေါင်းကြွနေသည့် သွေးကြောတွေက ဒေါ်နုနု ရှိန်၏ အပေါက် လေး ထဲသို့ မချိမဆန့် အတင်းတိုးဝင်သွားကြသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် လည်း ဗြန်းက နဲ ကွဲ ထွက်တော့ မတတ်နာ ကျင်သွား ရသည်။ အတွင်းက အသားတွေက အလိပ်လိုက်ရောပါသွားသလို ပင်။ ဗိုက်ကြောတွေသာမက ရင်သားတွေပါ တင်းတောင့်သွား၏။ “အား …နာလိုက်တာတော်”ဟုပင် ငြီးလိုက်မိလေတော့သည်…..ပြီးပါပြီ။